That's so good, right?: August 2009
No Regret (Ending)
'ဒါအပိုင်းတစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ပျင်းစရာမကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လို့တော့ မျှော့်လင့်တာပဲ။'
ရာသီဥတုကလည်းဒီနေ့မှ အေးစက်နေလိုက်တာ နှင်းတွေတောင်ကျနေတာ လမ်းမတစ်လျှောက်လူ တွေများရှင်းလို့ပါလား။ တိုက်ခန်းတွေမရှိတဲ့ လုံးချင်းအိမ်ရာတွေမှာ လူတွေက အပူပေးစက်တွေနဲ့အိမ်ထဲမှာငြိမ့်နေကြပြီပေါ့။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲကတော့ အဲဒီလိုစက်တစ်လုံးမလိုအပ်ဘဲ ပူနွေးနေပါရဲ့။
ဆိုင်ထဲမှာတော်တော်စုံတာပဲဗျ အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ၊ စာရေးကိရိယာတွေ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေ။ မြို့စွန်နားမှာ ဒီလိုဆိုင်ကြီးမျိုးရှိတာ ဒီနားဝန်ကျင်ကလူတွေအတွက် အတော်ဟန်ကျတယ်။
တိပ်ခွေတစ်ခွေ၊ အခိုင်ခံ့ဆုံးကြိုးခွေတစ်ခွေ ပြီးတော့ ဂေါ်ပြား....ဂေါ်ပြားကတော့ ကားထဲမှာရှိပါတယ်လေ။ ခပ်သွက်သွက်သွားမှကောင်း မှာ တော်ကြာ သူရစိတ်တိုနေဦးမယ်။ အခုတောင် သူ့အစီအစဉ်တွေကို သဘောသိပ်ညီချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မထားသင့်တော့ဘူး မရှိမဖြစ်လိုအပ်ခဲ့တဲ့ သောက်ရေတစ်ခွက်ကို အသူရာတွင်းနက်ထဲကို လောင်းချလိုက်တော့မယ်။ ဘယ်တော့မှ ပြန်လည်မသောက်သုံး နိုင်တော့ဘူးပေါ့။
အပြင်ထွက်ဖို့ပြင်ပြီးမှ ပြတင်းပေါက်ကတစ်ဆင့် လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်တော့ ဖြူဖွေးနေတဲ့ နှင်းခဲဖတ်တွေ အဖတ်အဖတ်တွေနဲ့ တဖွဲဖွဲကျ နေတာ ကားတွေအပေါ်တောင်တော်တော်ဖုံးနေပြီ။ ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီး စိတ်မရှည်တဲ့သူငယ်ချင်းလေးအတွက် သူ့အကြိုက် SPY၀ိုင် ပုလင်းတွေဝယ်သွားဦးမှ။ မိမိအတွက် အဆင်မပြေနေပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ဘ၀ကိုနားလည်ပြီး အရာရာစိတ်မှာ နှစ်မြှုပ်ပြီး ခံစား ကူညီတတ်တဲ့သူ သူ့မှာ ဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အတွင်းကျကျမသိသေးပါ။ ဒီနေ့ထိတော့ နှစ်လိုဘွယ်ကောင်း ပါ့။
တံခါးကိုဖွင့် စွေ့ကနဲအ၀င်မှာ ကားကိုဆောင့်ထွက်လိုက်တာကြောင့် လူတောင်ယိုင်သွားတာပဲ။ တော်တော်စိတ်မြန်တဲ့အကောင်။ ကားခါးပတ်ကိုအမြန်ပတ်ပြီး ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်လိုက်ရတာ သူ့ကိုကြည့်တော့ မောင်းရိုးမောင်းစဉ်လိုပါပဲ။
' ဖျောက်....ဖျောက်' မြည်နေတဲ့ အသံကလွဲလို့သစ်တောထဲမှာ ဘာသံမှမကြားရဘူး။ ကားမီးကိုသာအားပြုပြီး နှင်းမှုန်တွေကြားမှာ တစ်ဆင့် သစ်တောခပ်နက်နက်ဆီ ကျွန်တော်တို့တိုးတိုက်ပြီး သွားရတာ ရေခဲရေတွေလိုအေးမြနေတဲ့စမ်းချောင်းလေးတွေ ကိုလည်း ဖြတ်ရသေးတယ်။ လူတစ်ရပ်နီးပါး
'Did you think that I was something I was gonna do and cry?
လူတစ်ယောက်ကို အနံ့မွှေးတဲ့ ပန်းနှင်းဆီလေးတစ်ပွင့်လှမ်းပေးခဲ့တယ်။ မွှေးကြူတယ်၊ ရင်ခွင်ထဲထည့်တယ် ပြီးတော့ နင်းချေတယ်။ သူ့ခြေထောက်အောက်မှာ ရဲရဲနီတဲ့ သွေးရောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားပြီး အေးစက်တဲ့နှင်းတွေကြားမှာ ခဲသွားပြီ.....ရေခဲတစ်တုံးဖြစ်သွားပြီ ထင်ပါရဲ့။
သစ်တောခပ်နက်နက်ထဲကို မောင်းလာကြတာ သားကောင်ကြီးတွေရဲ့အသံကို ကြားစပြုလာပြီဆိုတော့ အတော်နက်လာပြီထင်ပါရဲ့။ တစ်ခါတစ်လေ ဝေါင်းကနဲ ဟောက်လိုက်တဲ့ တောကောင်ကြီးရဲ့အသံကြောင့်တုန်တောင် တုန်သွားမိသေး။ သူရမျက်နှာကိုတစ်ချက် ကြည့်လိုက်တော့ နှင်းတွေနဲ့အပြိုင် အေးစက်စက်။
ကားကိုတောတန်းလေးအလွန်ရောက်တော့ ရပ်လိုက်ကာ အချိန်အတော်ကြာ နှစ်ဦးသားငြိမ်သက်နေမိကြသေးတယ်။ ကားရေဒီယိုကတော့ ရာသီဥတုအခြေအနေကို အသံချိုချိုနဲ့ ကြော်ငြာပေး နေတာကိုကြားနေရတာပေါ့လေ။ ရေခဲမှတ်အောက် ရောက်နိုင်သတဲ့၊ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးမှာ အေးစက်တဲ့နှင်းမှုန်တွေအောက်မှာများလှဲလျောင်းနေရရင် ဟင်း.....ဟင်း။
'Stop quacking, you fucker!'
"Wow, it really is something to see, worth seeing."
ကားပေါ်ကနေ ဆွဲချလိုက်တာ ဘုန်းကနဲအသံမည်သံနဲ့အတူ သူ..သူပြုတ်ကျလာတယ်။ အသည်းမဲ့သူလိုပါပဲ ခနိုးခနဲ့လေသံနဲ့ သူရက သူ့ကို စကားတွေနဲ့ကန်ကျောက်လိုက်သေးတယ်။
သူရဘာတွေကိုနာကြည်းနေတာလည်းမသိ တကယ်ဆို ကာယာကံရှင် ကျွန်တော့် ထက်သူက ပိုပြီးဘာကြောင့်ထူးကဲနေရတာလဲ။
'Sir, have you enjoyed enough so far?'
'Last time for mountain-climb training, Sir.'
စတိဗ် ထိတ်လန့်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့ သူရကို မော့ကြည့်ပြီး မလုပ်ပါနဲ့လို့များပြောချင်နေသလား ပါးစပ်ကတလှုပ်လှုပ်နှင့်။ မျက်ဝန်းတွေကရော မျက်ရည်စများဝေ့နေရော့သလား။
ဓာတ်မီးကိုစွဲကိုင် ဂေါ်ပြားကိုပုခုံးမှာထမ်းရင်း ကျွန်တော်ရှေ့က ခပ်ဖြေးဖြေးလျှောက်လာသလို သူရက ကြိုးတွေနဲ့တုပ်နှောင်ထား တဲ့စတိဗ်ကို ခေါ်ဆောင်လာနေတဲ့ ဒီအချိန်များမှာတော့ သူရဟာ စကားတွေပြောပြောပြီး ရိုက်နှက်နေတဲ့ အာဏာပါးကွက်သားနဲ့တူနေ ပြန်ပါတယ်။
'You despicable prick! Fucking stupid mutt!"
ဟိုး....တိုက်အမြင့် ပြတင်းပေါက်ကနေ ကျွန်တော့်အရုပ်လေးပြုတ်ကျသွားတယ်။ ရင်ထဲမှာ ဟာကနဲပဲ။ ဒါပေမဲ့ အသုံးမလိုတော့တဲ့ အရုပ်ပဲ ဒီတစ်ကြိမ်မလွှင့်ပစ်လည်း နောက်ဆိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှ မရတော့တာ။ ဒီတော့ ပြုတ်ကျပါစေတော့။ လေပြင်းအနှော့မှာ လေဟာနယ် ထဲထိုးကျနေတဲ့ အရုပ်ကလေးကိုကြည့်ရင်း .....ရင်ထဲမောနေရုံပါပဲပေါ့။
အပြိုင်းအရိုင်းပေါက်နေတဲ့ မြက်ရိုင်းတောတွေရဲ့ အလယ်အရောက်မှာတော့ သူရက မြေကျင်းနက်နက်ကို အားသွန်ခွန်စိုက် တူးတယ်။ ကျွန်တော်က ဘေးကနေ မီးထိုးပြပြီးကူညီရတာပေါ့။
သူရရဲ့ခြေတစ်ဖက်မြောက်တက်သွားပြီး ဘုန်းကနဲကျင်းထဲကျသွားတဲ့ စတိဗ်ကိုမကြည့်ရဲတော့သလိုပဲ။ သူဟာ ဘာမှ ပြန်လည်မတုန့်ပြန် နိုင် တဲ့အတွက်လား ဒါမှမဟုတ် အရာရာကို လက်လျော့ပြီး နေနေတဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ခံယူသွားတာကြောင့်လား အဲဒီလိုလူရဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေရတာ ဘာကြောင့်များလည်း။
တကယ်ဆိုသူရုန်းကန်ထွက်ပြေးရင်ရနေသားပဲ။ ကျွန်တော်...ကျွန်တော့်ကိုချစ်များ ချစ်နေသေး တာလား။
ပြတင်းပေါက်ကနေ မြေပြင်ပေါ်လဲကျနေတဲ့ အရုပ်လေးကို လှမ်းမြင်နေရတယ်။ မိုးစက်လေးတွေကလည်း တဖွဲဖွဲကျလာပြီ။ ရွှံ့ရေတွေလည်း လမ်းပေါ်မှာအိုင်စပြုလာပြီ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဘယ်လိုမှ တင်းမထားနိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ်မပိုင်ဆိုင်ရပေမဲ့ အသုံးမပြုချင်တော့ပေမဲ့ စင်ပေါ်မှာထားပြီး သူ့ကိုအလှကြည့်နေနိုင်သေးတာပဲ။ ပြီးတော့ သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအတိတ်ကို တမ်းတနိုင်နေသေးတာပဲ။
'Stop that. It's almost done. I said stop that.'
'Fuck you what wrong?'
'Just stop that. I can't do this. Take all the money with you.'
ကိုကြီးကလည်း ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ၀မ်းသာမျက်ရည်တွေနဲ့အတူ မျှော်လင့်ရောင်ခြည်တွေနဲ့ လင်းလက်လာတဲ့မျက်လုံးတွေဖြင့် ကြည့်မ၀ဖြစ်နေရင်း ဘာကိုထိတ်လန့်တကြားဖြစ်သွားသလည်း မသိ ရုတ်တရက်ပြူးကျယ်လာရင်း တစ်စုံတစ်ခုကို ပြောချင်နေတဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်တည်လာတယ်။ ဒီတော့မှ သူ့ပါးစပ်က တိပ်ကိုခွာဖို့ ခွာပေးဖို့ သတိတရလက်လှမ်းလိုက်စဉ်မှာ ' ခွပ်...'
'Aw, you fucker whatasight!'
လေရူးသုန်သုန်မှာ ကျွန်တော့်ခေါင်းတွေချာချာလည်မှုနဲ့အတူ ခိုလှုံဖူးရာ ရင်ခွင်ကျယ်ထဲ တအိအိလဲကျသွားရတာကို နောက်ဆုံးသတိရလိုက်ရပါတော့တယ်။ အမှောင်လောကဟာ မိတ်ဆွေရင်းပဲဆိုပါတော့လေ...။
အေးမြတဲ့ အရိုင်းလေတွေရဲ့ ထိခတ်မှုကို အရေပြားကတစ်ဆင့်သိလိုက်ရချိန်မတော့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးဟာ ကြိုးတွေနှင့် တုပ်နှောင်ထားတာခံနေရကြောင်း ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းအစုံကလည်း အသံပြုမရအောင် တိပ်ပြားကြီးကြီးနှင့် ပိတ်ခံထားရကြောင်း ကျွန်တော်အလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာသိလိုက်ရပါပြီ။
လမ်းတွေရဲ့ ဖြောင့်ဖြူးမှု ကြမ်းတမ်းမှုတွေရဲ့ အာရုံကို အတိအကျသိနေရတဲ့ ကားနောက်ခန်းက ကျွန်တော့်မှာ ဘာကို လုပ်ဆောင် ရမည်မှန်းမသိ၊ ဘာကြောင့်များ ကျွန်တော့်ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာပါလိမ့်။ ဒယ်ဒီတို့မှာ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ရန်ညှိုးထားမဲ့သူမရှိဘူး အခုအချိန်ထိမရှိခဲ့ဘူးပါ။ ငွေကြောင့်လား ငွေကြောင့်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ကားထဲမှာလည်း အတော်အသင့်ပါနေသား မဟုတ်လား။
ကားပြတင်းကတစ်ဆင့် မြင်လိုက်ရတဲ့ နီယွန်မီးရောင်ကြောင့် မြို့စွန်လမ်းမပေါ်ကတစ်နေရာဆိုတာကို သတိပြုမိလိုက်တယ်။ ရှေ့ခန်းက ဒရိုင်ဘာနေရာကလူကတော့ အေးအေးဆေးဆေး ကားရေဒီယိုက သီချင်းကိုလိုက်ညည်းနေရင်း ဘယ်သူ့ကိုစောင့်နေသည်မသိ။
ခဏလေးအကြာမှာတော့ ကားတံခါးဖွင့်ပြီး ဆောင့်ပိတ်သံနှင့်အတူ တစ်စုံတစ်ယောက် ကားထဲဝင်ထိုင်လိုက်တာကို သတိပြုမိ လိုက်တယ်။ ဟင်......ဒီရေမွှေးနံ့ကို ရဖူးတယ်...ရဖူးခဲ့ပါတယ် ဆွေမင်း......ဆွေမင်းသုံးတဲ့ရေမွှေးနံ့။ သူများလား.... ။
ခပ်ဖြေးဖြေးမောင်းထွက်လာတဲ့ကားဟာ အရှိန်အတော်အသင့်ရလာတော့ အမြန်မောင်းတော့တာပဲ။ အဝေးပြေးလမ်းမ....ဟုတ်တယ် အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ရောက်လာပြီထင်ပါရဲ့။ ကားမောင်းနေသူနဲ့ ဘေးကထိုင်လိုက်လာသူတို့ စကားကိုတပြောပြောနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ကြားလိုက်ရတာရှိသလို မကြားလိုက်ရတာလည်းရှိပါရဲ့။
ကားနောက်ခန်းတံခါးကို ခပ်ပြင်းပြင်းဖွင့်လိုက်တဲ့ အရှိန်ကြောင့်ရုတ်တရက်လန့်သွားရသလို မျက်နှာဆီကို စူးရှစွာထိုးလာတဲ့ အလင်းဓာတ်မီးကြောင့် မျက်လုံးများ ပြာဝေသွားရတာ။ နည်းနည်းကြာတော့ ခပ်ဖြေးဖြေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ ဆွေမင်း....ဆွေမင်းရယ် သူ့ဘော်ဒါလေးရယ်ပါလား။ ကိုယ့်ကို ရက်စက်နိုင်ပြီလား....ညီရာ။
“ဘယ်လိုလည်း သူဌေးမင်းရဲ့ အခုကောရယ်နိုင်သေးရဲ့လား။ မဒီလေးကတော့ဆွေးနေတော့မှာနော်"
တစ်ဖက်သတ်စွပ်စွဲချက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကောမင်းသိရဲ့လား။ ကိုယ့်အနေနဲ့ကျတော့ ဘာမှပြန်လည်ချေပခွင့်မရှိရပါလား။ ညီ မင်းကရော ကိုယ့်ကို ဒီလိုလုပ်မှ ကျေနပ်တော့မှာလား။
မြေကျင်းကိုတူးနေပြီ ဘုရား...ဘုရား ငါ့ကို ငါ့ကို မင်းတို့ဘာလုပ်မှာလည်း။ ဘ၀ဟာဒီလိုအဆုံးသတ်ရတော့မှာလား။ ကိုယ့်အတွက် မင်းတို့ ဒီလိုစီရင်တော့မှာလား....။
ခြေထောက်က ကြိုးကို တရွတ်တိုက်ဆွဲပြီး ကျင်းဆီကိုဆွဲခေါ်သွား...သွားခြင်းနဲ့အတူ ဘုန်းကနဲပစ်ချခြင်းကို ခံရပါတယ် မြေကျင်းထဲ။
ရင်ထဲမှာ တကယ့်ကိုနာကျင်မှုတွေ ၀မ်းနည်းဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ မျက်ရည်တွေ တွေတွေကျမိပါတော့တယ်။
သူ့ဘော်ဒါက ဂေါ်ပြားကိုမြောက်တင်ရင်း ဆွေမင်းကိုရိုက်ထည့်လာတာ ဖြာကနဲဆင်းလာတဲ့သွေးတွေနဲ့အတူ စိုက်ကျလာတယ် ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ရှိရာ။
'Yeah, if you love him so much, I'll burry you together with him'
ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားကို မြေသားတွေနဲ့ ဖို့ဘို့ကြိုးစားရင်း ဂေါ်ပြားကိုလွှင့်ပစ်ကာ ဓာတ်မီးကိုကျင်းထဲကန်ချ ပြီးတော့ အဝေးကိုထွက်ခွားသွားတော့တယ်။
'Fuck! Why should we be this miserable?' ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့တော့တာပါလား။ မထားခဲ့ပါနဲ့ ကူညီပါဦးကွာ...။
ကောင်းကင်ပေါ်ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့လည်း လေရူးတသုန်သုန်နဲ့ နှင်းတွေကျနေတဲ့ အေးစက်စက်ညမှာ ကိုယ့်ချစ်သူကိုဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ပါလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကိုသာရရှိခဲ့။ ခြေလက်တွေကလည်း ကြိုးချည်ထားတာ။ ပါးစပ်ကလည်း တိပ်နဲ့ပိတ်ထား...အား။
တစစ်စစ် ကိုက်ခဲနေတဲ့ခေါင်းကို ထောင်မကြည့်မိနိုင်လိုက်အောင် မူးဝေနေသေးတာ အတန်ကြာ။ အေးစက်နေတဲ့ အရာပေါ်လဲ ကျနေတာတော့လည်းမဟုတ်တော့ပြန်ဘူး။ နှလုံးခုန်သံ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့အတူ နွေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်တစ်ခုထဲမှာပါလား....။
ရာသီဥတုရဲ့ အေးစက်မှုက ဦးခေါင်းကိုနည်းနည်းပိုပြီးနာကျင်စေသလိုပါပဲ။ သစ်ပင်ထက်က သစ်ရွက်တွေကလည်း တဖွဲဖွဲကျနေတာများ နှင်းမိုးစက်တွေအတိုင်း။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် မသေးသေးပါဘူး။
သစ်တောကြီးက ဘာကြောင့်များတိတ်ဆိတ်နေရပါလိမ့်။ တောကောင်တွေရဲ့ အသံလည်းမကြားရ ဟိန်းဟောက်သံတောင် မမြည်။ ဒါပေမဲ့ ရဖူးနေကြ ကိုယ်သင်းနံ့သင်းသင်းလေးကြောင့် အမူးပြေ လာရတာကြောင့် အသာခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်မိရပြန်ပါတယ်။
အားအင်တွေမရှိတော့သလို ခန္ဓာကိုယ်ဟာ နှုံးကျသွားတာများမယုံနိုင်ပါဘူး။ ရှိသမျှအားတွေနဲ့ အသာထက ချည်နှောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေ ပါးစပ်မှာ ပိတ်ထားတဲ့ တိပ်တွေစတဲ့ အချုပ်အနှောင် မှန်သမျှကို ဖယ်ရှားပေးလိုက်ရတာ ခရီးရှည်တစ်ခုကို သွားရသလို မောလိုက်တာ ဗျာ..။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မထပါရစေနဲ့ ခဏလေးငြိမ်နေပေးပါလားဗျာ။ ဒီရင်ခွင်...ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးထဲ ခဏတာပဲဖြစ်ဖြစ် ခိုလှုံပါရစေ....ခိုလှုံခွင့်ပေးပါဦး။
တည်ငြိမ်နေတဲ့ ကန်ရေပြင်မှာ လေပြင်းတွေကြောင့် လှိုင်းကြက်ခွပ်တွေထခဲ့တယ်။
မုန်တိုင်းကြောင့်ကန်ရေပြင်ဟာ လှိုင်းထန်ခဲ့တယ်။ ကန်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းကိုမရောက်သေးတဲ့ လှေငယ်ပေါ်မှာ အသည်းအသန် ထိတ်လန့်နေရတဲ့ လူသားတွေက နှစ်ယောက်ထဲ။ အခုတော့ လေပြင်းမုန်တိုင်းဆဲသွားတော့ လှေပေါ်မှာ မလှုပ်မယှက် ငြိမ်သက်နေကြမိရော။ အချိန်အတော်ကြာ စကားတောင်မပြော ဖြစ်ကြပါဘူး လေ။
'ညီ..ထ ကိုယ့်ကျောပေါ်တက်' ကျွန်တော့်အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး ချစ်စိတ်ဝင်သွားတယ်ထင်ပါ့။
သူ့ကျောပြင်ပေါ်ကိုအသာအယာတင်ပြီး ရပ်ထားခဲ့တဲ့ကားရှိရာကို ခပ်ဖြေးဖြေးရွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
ရပ်ထားတဲ့ကားကို ကားလမ်းမရှိရာဘက်ကိုအသင့်လှည့်ပြီးသားတွေ့ရတဲ့အခါ သူရ...ချစ်သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒို့တွေက သူငယ်ချင်းဖြစ်ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ တံခါးကိုအသာဖွင့်.... အသာချပြီးထိုင်စေကာ ကျွန်တော့်ကို မျက်ဝန်း တွေနှင့် တွေတွေစိုက်ကြည့်နေတာ စူးစူးနင့်နင့်။ ဒီလိုအကြည့်တွေမှာ နစ်မြောခဲ့ရတာ ရင်ခုန်တိမ်းမူးခဲ့ရတာပါ။
'Sorry' 'Nice to meet you, Steven'
စကားတွေကိုပြန်မပြောပဲ မျက်ရည်တွေဝေ့နေတဲ့ မျက်ဝန်းကတစ်ဆင့် ကိုကြီးရင်ဘတ်ကိုလှမ်းမြင်နေရပါတယ်။
ကျွန်တော်နားလည်ပါပြီဗျာ ကိုကြီးက ကျွန်တော့်လိုထုတ်ဖော်ပြီး မချစ်ပြ တတ်သူဆိုတာ။ ကားကလေးက ခပ်သွက်သွက်နှင့် ခရီးမိုင် အတော်များများကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ပါပြီ။ စိတ်တွေအေးဆေးသွားပြီဆိုတော့မှ ခရီးမိုင်အတော်များများညက လာခဲ့တယ်ဆိုတာကို သတိပြုမိရပါတော့တယ်။
မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်တဲ့ အမှောင်ကမ္ဘာကြီး တစ်လှည့်ရောက်လာပြန်ပေါ့။
ကားပြူတင်းကတစ်ဆင့် တိုးဝင်လာတဲ့ လေအေးအေးလေးကြောင့် ကိုကြီးပုခုံးဆီ ကျွန်တော် တိုးလို့ကပ်မှီရင်း... ..ငြိမ်သက်လိုက်ပါသွားရပေါ့။
'ညီ့ဒိုင်ယာရီကို ဖတ်ပြီးသဘောကျနေတာ...ဟုတ်လား။ အင်းဟုတ်တယ်...အဲဒီကဗျာလေးက ကျွန်တော့်ခံစားမှုနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ ကူးရေးထားတာဗျ။'
ညနေချမ်းလေးဟာ အအေးပိုလာတာကြောင့် နှစ်ဦးသားလှေကားတွေကတစ်ဆင့်သာ ခပ်သွက်သွက်ဆင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော် တို့ခြေသံတွေဟာ တဒေါက်ဒေါက်ပေါ့။ Lobby ထဲအရောက် နှင်းဆီရနံ့လေး ထုံသင်းသွားတာကြောင့် ဝေ့၀ဲကြည့်လိုက်တော့ ကောင်လေး တစ်ယောက်က ချစ်စရာကောင်မလေးကို ချစ်ရည်ဝေ့နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်ရင်း ပန်းစည်းတစ်ခုကို ဆက်သနေတာကို မြင်ဖြစ် အောင်မြင်လိုက်ရသေးတော့တာ။
Posted by Alex Aung at 6:19 PM No comments:
No Regret Part V
အပြာရောင်မီးလုံးလေး ခပ်မှိန်မှိန်လင်းနေတာ ကဗျာဆန်လိုက်တာ။ သီချင်းသံလေးကလည်း ကြည်နူးဖို့အကောင်းသား။ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ သီချင်းဖွင့်ထားရင် စားသူတွေအနေနဲ့ အစားကိုပိုစားမိစေသတဲ့။ဂီတမှာ မျောပါသွားရင်းစားမှန်း မသိစားမိနေတာမျိုးလေ။
ဒီအချိန်....ဒီအချိန်ဆိုရင် သူအိမ်ပြန်ရောက်ပြီလား ရုံးမှာပဲ အလုပ်လုပ်နေတုန်းလား။
နို့နည်းနည်းပိုပြီးပါတဲ့ ခပ်ချိုချိုကော်ဖီမျိုးကို ကျွန်တော်အစတုန်းက သိပ်မကြိုက်ခဲ့ပါ။ ကော်ဖီဆိုတာက နည်းနည်းခါးမှ ကော်ဖီအရသာ ဆိုတာ ပီပြင်မှာ မဟုတ်ဘူးလား။ ကော်ဖီတစ်ခွက်ရဲ့ခါးသက်မှုကို ကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ အစားအစာမှာတော့ ပုဇွန်တင်ပူရာကို ကျွန်တော် တော်တော်ကြိုက်တယ်။ သူကတော့ဆူရှီလို အရသာကိုပိုကြိုက်တယ်။
သူ့အတွက်ဝယ်သွားဦးမှပါ။ ရုံးကပြန်လာရင်မောနေလို့ သူဘာမှချက်ပြုတ်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူးလေ။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကို စားသောက် ကော်ဖီခွက်ကလက်ကျန်လေးအဆုံးသတ်ပြီး ဖူဂျီကဖေးကနေထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ရွှေအိုရောင်ည နေခင်းဟာ တစ်မျိုးတစ်ဖုံတော့ ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းသား။ လမ်းမကြီးတလျှောက် လူတွေကိုယ်စီကိုယ်စီသွားလာ လှုပ်ရှားနေကြတာ အိမ်ပြန်လမ်းကိုမရောက်တော့မှာကျနေတာ။
တွေ့နေကျ ကျွန်တော်လာနေကျအချိန်လေးရောက်ရင် ခြေလှမ်းတွေက ကိုကြီးရှိရာကို လှမ်းမိနေတာပါ။ သူလည်းပဲကျွန်တော့်ကိုမျှော်နေမယ်ဆိုတာ အသေအချာပြောနိုင်ပါတယ်။
" ချစ်သူ ဘေးနားမှာနေတဲ့ခဏ နူးညံ့နွေးထွေးသလို
အကြည့်လေးများထဲ တင်းထားမယ် တို့စိတ်ကူးတွေ
အခိုးအငွေ့ဖြစ်ကာရယ် နှလုံးသားဟာ ပန်းလိုကြွေကျတယ်။"
သီချင်းလေးခပ်တိုးတိုးညည်းရင်း တိုက်ခန်းလှေကားတွေကို ခပ်သွက်သွက်တက်လာရင်း ရင်တွေများတောင်ခုန်မိပါရဲ့။
'တီး.....တောင်....တီးတောင်' ဖျပ်ကနဲတံခါးပွင့်လာတော့ ၀မ်းသာအားရအတွင်းကိုဝင်မယ်ပြင်ပြီးခါမှ ကိုကြီးမဟုတ်ဘဲ ကောင်မလေးတစ်ယောက်။သူမ ဘယ်သူလည်း...။
အဲဒီကောင်မလေးက ဘယ်သူလည်း။ အထက်တန်းလွှာကဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ သန့်စင်လှပနေလိုက်တာ ဖူးနုနေတာ။ စတိဗ်နဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်သလည်း။ မေးခွန်းအများကြီးကို တိတ်တဆိတ် ရင်တွင်းမှာမေးနေမိခဲ့ပါရော။ သူမ.....သူမဟာ....။
ပူပန်စိတ် ရှုပ်ထွေးမိတဲ့စိတ်တွေနဲ့ ပြန်လာဖြစ်တာများ မြေညီထပ်ကိုဘယ်လိုရောက်လာမှန်းသတိမထားမိအောင်ပါပဲ။
အချစ်ဆိုတာ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေကို ဖြစ်ထွန်းစေသလား။ ခံစားမှုကိုရော ပေးစွမ်းတာအချစ်ပဲလား။ ဆွေးမြေ့မှုကိုတော့မပေးပါနဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာရယ်။အချစ်ဆိုတာ.......။
လူတွေသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ လူတွေကြားထဲဖြတ်သန်းလာရင်း ပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေါ်အရောက်မှာ အဲဒီကောင်မလေးပေးလိုက်တဲ့ ဖောင်းကြွစာလုံးများနဲ့ ကဒ်ဖြူဖြူလေးကိုဖွင့်ဟ ကြည့်မိတော့....ဟား......စတိဗ်ရယ် ၊ နွေးနွေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးရယ် စေ့စပ်ကြောင်း လမ်းမယ့် ဖိတ်စာလေးပါလား။ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရနိုင်သေးတဲ့ နေရာလေးကို ဆုံးရှုံးတော့မယ်ပေါ့။
အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့လည်း အထီးကျန်ဆန်နေသလို ခံစားရမိသလိုလိုပဲ။ အရင်ကလည်း တစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ရတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ တစ်ယောက်တည်းမနေတတ်တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့။
ခါတိုင်းအချိန်မှာ လေတဖျပ်ဖျပ်တိုက်ခတ်နေတဲ့ ပြတင်းကလိုက်ကာစလည်း လေအနော့မှာမလွင့်နိုင်တော့သလို ဖွင့်နေကျ တီဗီကလည်း တိတ်ဆိတ်လို့။ ခုတင်ပေါ်က မွေ့ယာပေါ်မှာ ခြေကားယားလက်ကားယားနဲ့ မှောက်ပြီးငြိမ်သက်နေမိတာ အချိန်အတန်ကြာပါရဲ့လေ။ အစားအသောက်စားချင်စိတ်လည်း သိပ်မရှိတော့သလိုပါပဲ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကအသံတွေကနေ ဝေးရာကိုခဏပြေးဖို့ နားမှာတပ်ထားတဲ့ နားကြပ်လေးကိုအသာဖြုတ်ရင်း တံခါးမကြီးကို အသာ လှမ်းသွားတာ တံခါးခေါက်သံက မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေသလိုပါပဲ အားပျော့လိုက်တာ။ ဘယ်သူများပါလိမ့်...။
စတိဗ်....ကိုကြီး...မောင်းတင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေအဝေးပြေးသွားပြီ။ မြှောက်ပြသော သွေးယိုထွက်နေတဲ့သူ့လက်တစ်ဖက်ကို အသာလှမ်းကိုင် လိုက်ရင်း အခန်းထဲကိုခေါ်လာ ပြီးတော့ ရှေးဦးသူနာပြု သေတ္တာလေးထဲက ပတ်တီးကိုထုတ်ကာ အသာအယာ သန့်ရှင်းပေးရင်း ဖွဖွ ငြင်သာစည်းပေးနေရပါပကော။
"မင်း...မင်းငါ့ကို Playful လုပ်ခဲ့တဲ့သူလို့ထင်နေတယ်၊ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။"
"ငါ အစပြုကတည်းက Disgusting ဖြစ်နေခဲ့ရတာလေ။"
တုန့်ရပ်သွားတဲ့ပတ်တီးစည်းနေတာကနေ ငြိမ်သက်သွားမိရင်း သူ့မျက်နှာကို အသာမော့ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကို ခပ်တွေတွေစိုက်ကြည့်နေတဲ့သူ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်သီသီဝေ့နေတာ။
"ဒါပေမဲ့ မင်းကို ငါ..ငါချစ်တယ်" အသံတိတ်မျက်ဝန်းများနဲ့ စကားဆိုရင်း အတန်ကြာနှုတ်ဆိတ်သွားတာ မိနစ်များစွာပါ။
ယိုင်နဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို သူ့ဘေးမှာ အသာရွေ့လိုက်ရင်း 'ဒါဆို..ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ relationship ကဘာလည်းဗျာ။' စကားလေးများပြန်ပါဦး။ ဒီလိုတော့ဖြင့်တိတ်ဆိတ်တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့စိုက်ကြည့်မနေပါနဲ့ တစ်ခုခုဖြေပါဗျာ။
"ကျွန်တော်က ပညာတတ်မဟုတ်လို့လား၊ ကျွန်တော်စာကြိုးစားသင်ပါ့မယ်။"
"ကျွန်တော်က ညစ်နွမ်းနေလို့လား၊ ကိုကြီး....ကိုကြီးအတွက်ဆို ယုံကြည်စွာနဲ့သီးသန့်ရှိရစေပါ့မယ်။"
"ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်က ဆင်းရဲလို့များလား။ ကျွန်တော်အလုပ်ကောင်းကောင်းကြိုးစားပါ့မယ်ဗျာ။ ကိုကြီး...။"
သူ မျက်ရည်ဝေ့နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်ရင်းထရပ်ကာ တိုက်ခန်းလှေကားရှိရာဦးတည်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော်မတားမိဘူး။ တားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ ဟစ်အော်ခေါ်ပြီး တားလိုက်ချင်ပါရဲ့။
ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲက လှမ်းထွက်သွားမယ့်ခြေလှမ်း တွေမဖြစ်ပါစေ နဲ့.....ကို...ကြီး။
"What it us?" "What am I to you?"
ကိုယ့်စိတ်ခံစားမှုတွေကို အစွမ်းကုန်ဖောက်ထုတ်ပစ်ဖို့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အားရပါးရငိုကြွေးဖို့ ဟိုး...လှမ်းမြင်နေရတဲ့ အားကစားကွင်းထဲ ပြေး...အပြေးသွားရင်း ဒူးထောက်ထိုင်ချ ငိုကြွေးမိပါတယ်။ ယောက်ျားလေးဆိုတာ မငိုရဘူးတဲ့ ကိုကြီးကပြောခဲ့တယ်။ ညီ....ညီဆိုတဲ့ ကျွန်တော် လူသားဆန်ပါရစေ ကိုကြီးရယ်။
ခပ်မှောင်မှောင် ပလက်ဖောင်းမီးတွေကလည်း ပိုမိုမှောင်နေသလား၊ ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားမှုများလှတဲ့မြို့ပြက လမ်းတွေကလည်း တိတ်ဆိတ်လှပါလား။ နာရီကိုတစ်ချက်ကြည့်မိတော့မှ သန်းခေါင်ယံရောက်နေမှန်းသိတော့တယ်။
အဲဒီည တိုက်ခန်းလှေကားက ခြေသံတဒေါက်ဒေါက်နဲ့ အချိန်အတော်ကြာကြားရတဲ့ခြေသံဟာ ကျွန်တော့်ခြေသံပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လေးကန်စွာနဲ့ အိမ်အပြန်ခြေလှမ်းတွေ...။
အတော်တော့ခက်သားပဲ။ လူတစ်ချို့ကကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စပ်စုသွားလေရဲ့။မျက်ခွံတွေရဲပြီး မို့နေသမို့လေ။ အသားဖြူဖြူကောင်ကလေး မျက်ဝန်းတွေက ငိုထားသလား ဘာကြောင့်လည်းပေါ့။
တွေ့လည်းတွေ့ချင်ပါတယ် ကိုကြီး။ ဒါပေမဲ့....
"ခဏလေး ခဏလေးပဲ ခေါ်မှာပါ။ ကိုကြီးမကိုင်ပါစေနဲ့ မကိုင်ပါစေနဲ့။" ကိုကြီးအောက်ကိုဆင်းလာမည့်အချိန်ထိ စောင့်နေပါ့မယ်ဗျာ။”
"ကျွတ်.....ဖုန်းက၀င်လာသေးတယ်။" ကိုကြီးကိုခေါ်နေပါတယ်ဆိုမှလေ။ "ဗျာ.......ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ကျွန်တော်အဲဒီဌာနကို အရောက်လာခဲ့ပါ့မယ်။ ကျေးဇူး ကျေးဇူးပါခင့်ဗျာ့။" ကမ္ဘာကြီးလည်သွားသလား မသိ။ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခုဆုံးရှုံးသွားသလိုပဲ။
မြို့စွန်က ကန်သာယာနားက လမ်းလည်ပလက်ဖောင်းမှာ ကားဖြူလေးတစ်စီး တိမ်းမှောက်သွားပါသတဲ့။ အဲဒီကားထဲက မောင်းသူကတော့ ပွဲချင်းပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုပဲ။ ပြီးတော့ သူ့ရင်ဘတ်ထဲက လိပ်စာကဒ်က ကျွန်တော့်လိပ်စာကဒ်ဖြစ်နေသမို့ ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်ရကြောင်း အကြောင်းကြားလာပါတယ်။
သီဟ.......ကားဖြူကြီးကိုမောင်းပြီး မြို့ကြီးကိုပတ်မယ့် သီဟရယ်။ သွေးသံရဲရဲနဲ့ဖြစ်နေမယ့် မင်းခန္ဓာကိုယ်ကို ငါ...ငါမြင်ရတော့မှာပါလား။
မီးခိုးခေါင်းတိုင်ကတစ်ဆင့် လွင့်မျောသွားတဲ့ မီးခို့ငွေ့တွေနဲ့အတူ သီဟရဲ့ ၀ိဥာဉ်တွေမျောလွင့်ပါသွားပြီ....လေတွေထဲကို မျောလွင့်ပါသွားပြီထင်ပါရဲ့။ မြို့အစွန်ကျနေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ သုဿန်က သဂြိုဟ်ဌာနမှာ အရိုးအိုးဖြူဖြူကို ယူဆောင်လာရင်း ကားရှိရာကိုပြန်ခဲ့တာ ကားနားမှာ သူရကဒေါပွရင်း စောင့်နေပါရဲ့။ သူဘာကြောင့်ဒေါပွနေသလည်း ဆိုတာကိုတော့ ခံစားနားလည်မိ ပါတယ်။
စိတ်ထဲကခံစားမှုကို အပြင်ထုတ်ပြီးမပြတတ်တဲ့ကျွန်တော့်လို မဟုတ်တဲ့ သူရကတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ညီအစ်ကိုတွေလို နေထိုင်ခဲ့ကြရတဲ့ သီဟရယ် ကျွန်တော့်အကြောင်းရယ်ကို ဂဃနဏ သိနေသူမို့ ပြီးတော့ သူ့မှာလည်းသူ့ဇာတ်ကြောင်းနဲ့သူ အစကတည်းကပေါက်ကွဲနေတာ။ အခုတော့ သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုများတွေ့ရင် အသေသတ်တော့မလားဘဲ။
ဒေါမာန်အပြည့်နဲ့ကားနားအမြန်သွားရင်း ကျွန်တော့်ကိုစောင့်နေတယ် အသင့်ပေါ့။ အပေါ်ယံအသွင်အပြင်က ကြမ်းတမ်းနေပေမဲ့ ညီအစ်ကိုအပေါင်းအသင်းစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့သူရရယ် မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တရှိန်ထိုးမောင်းလာတဲ့ ကားနောက်ခန်းမှာ ကျွန်တော်ထိုင်နေရင်း တံခါးမှတစ်ဆင့် အရိုးမှုန်လေးတွေကိုကြဲချနေမိပါတယ်။ လေအယူမှာ လွင့်မျောပြီး ဝေ့၀ဲသွားတဲ့ အမှုန်လေးတွေနဲ့ အတူ မင်းလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပါစေ ကွာ။ သီဟ.....သီဟရယ်။ အေးငြိမ်းရာမှာ နားခိုနိုင်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွာ...။
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေက မျက်ရည်တွေ တွေတွေစီးဆင်းနေတယ် ဘယ်လိုမှမထိန်းထားနိုင်တော့ဘူး ရင်ဘတ်ထဲက တလှိုက်လှိုက်ကိုခံစားရပြီး ငိုကြွေးမိတော့တာ။ ဒါကိုသူရက ဂရုဏာ ဒေါသောနဲ့ ဘုကြည့်ကြည့်နေမှန်းသိပေမဲ့ မတတ်နိုင်ပါ။
သီဟကို ကားဝယ်ပေးတဲ့သူ့လူက ရဲအရာရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီကောင်ကို လုံးဝမကျေနပ်ဘူး။"
သူရလည်းဆက်မမေး ကျွန်တော်လည်းဆက်မဖြေမိဘဲ ရုတ်တရက်နှစ်ဦးသားစကားတွေ မဆိုဖြစ်ရင်း ကားဆက်မောင်းလာကြတာ တိတ်ဆိတ်လို့ပါ။ မြို့ထဲလာတဲ့လမ်းကလည်း ရှည်လျား လွန်းလို့ မောင်းတာများနှေးနေရော့သလား။စိတ်တွေက လေအလျင်လို လွင့်နေမိလို့များလား။
သူရအနေနဲ့ အံသြသွားသလား ကျွန်တော့်စကားကို။ အရာရာအဆင်ပြေနေပြီလို့ သူမှတ်ထင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့် အခြေအနေမှာ ပြန်လာမယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက်လေ။ အခုခိုလှုံရာမဲ့တော့မည့်ကျွန်တော့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဟာ ဒီနေရာပဲမဟုတ်လား။ ခိုနားစရာမရှိသူများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါပဲလေ။ အသင့်တော်ဆုံးနေရာလို့ပဲဆိုပါရစေ။
ကျွန်တော့်စကားကိုကြားတော့ သူရ မျက်လုံးပြူးနဲလှည့်ကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်အပေါ်လည်းသူ ဒေါဖောင်းသွားပြန်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ် ဘာတွေခံစားရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်လည်းခံစာမိနေတဲ့အချိန်ပါကွာ။ မင်းမသိသေးတာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် သူငယ်ချင်းရယ်။
"မင်းကိုချနင်းသွားတာလေ သောက်ရူးရဲ့။ သီဟဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ မင်းမမြင်ဘူးလား။ငါ့အဖြစ်ကိုလည်း မင်းသိတာပဲ သောက်ကောင်မက ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံသွားတာ့ ငါ့လိုကောင်မျိုး လက်မထပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ လူတောမတိုးနိုင်ပါဘူးတဲ့ အဲဒါမင်းသိတယ်မလား။ ရိုက်နှက်ပစ်လိုက်ရင် ငွေတွေအတောင့်လိုက် သူ့ဗိုက်ထဲကထွက်လာမှာ။ အခုတော့ပြေးပြီလေ။"
"မင်းမသိဘူးလား သွေးစုပ်ဖုပ်ကောင်တွေကို ဘယ်လိုအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုတာ။ သူတို့နှလုံးသားကို သပ်လျှိုရိုက်ပြီးအဆုံးသတ်ပစ်ရမယ်။
ကျွန်တော်...ကျွန်တော်ကိုရော ဒီလိုအဆုံးသတ်မှုမျိုးအဖြစ်မခံဘူးမဟုတ်လား ကိုကြီး။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား.... ဟင်။
မဟူရာရောင် မည်းနက်တောက်ပြောင်နေတဲ့ မြွေတစ်ကောင်လိုရှည်လျားလှတဲ့လမ်းမကြီး ကားမီးနီနီတွေက နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုအသွင်ကိုဖြစ်လို့။ လမ်းမကြီးဘေး ပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက် တဒေါက်ဒေါက်လျှောက်လာတဲ့ ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေကတော့ လေးကန်နေဆဲ အတွေးဆန်နေဆဲ။
ရင်ခွင်ထဲကအေးဆက်ဆက် အရိုးအိုးဖြူဖြူလေးကို ငုံကြည့်ရင်း သီဟအတွက်ဝမ်းနည်းမိပြန်ရော။ ချစ်တဲ့သူနဲ့အတူနေချင်တယ် ချစ်တဲ့သူ သူချစ်တဲ့သူက ဘယ်သူများပါလိမ့်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူပျော်ရွှင်စွာနေသွားချင်မှာပဲ။
'မင်းမှာ ငါ့လိုပဲ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူး။မှန်တယ်မဟုတ်လား သူငယ်ချင်း။'
ခြေလှမ်းများစွာကိုလှမ်းရင် အိမ်ကိုရောက်မှန်းမသိရောက်လာကာ အိပ်ယာထက်ကိုလည်း အသိမဲ့စွာလှဲလျောင်းငြိမ်သက်ခဲ့ရတာ ....မွန်းကြပ်နေတဲ့ ညတစ်ည....ဖြစ်ခဲ့....။ ခံစားတတ်သူမှသာ ခံစားရတာများလား၊ မခံစားတတ်သူများအတွက်ရော ဘယ်လိုများပါလိမ့်။
မနက်ခင်း နေရောင်ခြည်လေးတွေ ကျဆင်းလာတဲ့ ပြတင်းတံခါးက တစ်ဆင့်ကောင်းကင်ပြင်ကျယ်ကိုမော့ကြည့်မိတော့ မိုးလင်းသွားပြီပဲ။ မနက်အိပ်ယာထမယ် အလုပ်သွားမယ် ညအိမ်ပြန်အိပ်မယ် လူတွေဟာ နေ့တွေ လတွေ နှစ်တွေ ဖြတ်သန်းနေကြတာ ကျွန်တော်လည်းပဲ ကာလအတော်ကြာပြီ။ ဒီနေ့မနက်ခင်းလေးဟာတော့ ကွက်လပ်တွေများနေသလိုခံစားမိပါတယ်။
ရေစက်အချို့ တင်နေတဲ့ကြည့်မှန်ကတစ်ဆင့် ထူးထူးဆန်းဆန်းမြင်ရတာကတော့ နာကျင်တဲ့ခံစားမှုတွေ ရောစပ်နေတဲ့ အပြုံးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကျွန်တော့် ပုံရိပ်ကိုပါပဲ။ နာကျင်မှုအပြည့်နဲ့အပြုံးတစ်ခု ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်ဆင်းမိပါလိမ့်။
ခြေထောက်တွေရဲ့သယ်ဆောင်ရာအတိုင်း ခပ်သွက်သွက်လှမ်းလာရင် မြို့လည်ကောင်ရောက်လာတော့ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေဟာ ကိုကြီးရဲ့ ရုံးခန်းကို ဦးတည်နေမှန်း သတိကပ်ပါတော့တယ်။ ဟုတ်တယ်...သူ့ကိုသွားတွေ့သင့်တယ်။မေးမြန်းသင့်တယ်။ကိုယ့်ဘာသာ အကျဉ်းကျမနေသင့်ဘူးလေ။
တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတဲ့ နံပါတ်တွေနဲ့အတူ တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်မြင့်တက်လာတဲ့ ဓာတ်လှေကားကတစ်ဆင့် ကျွန်တော့် စိတ်တွေဟာ ပြန်လည်မြင့်မားလာရသလိုပဲ။ ကိုကြီးကိုတွေ့ရတော့မှာမို့ထင်ပါရဲ့။
ရုံးခန်းထဲမှာလည်း ၀န်ထမ်းတွေမရှိဘူး။ ကိုကြီးအခန်းဖက်ကိုရှာကြည့်တော့လည်း သူမရှိပြန်ဘူး။ အစည်းဝေးခန်းမဘက်မှာရော.....တံခါး မကြီးပွင့်လာမှုနဲ့အတူ ၀န်ထမ်းအချို့ရော ကိုကြီးပြောပြတဲ့ ဒယ်ဒီမာမီတို့တွေပါ ထွက်လာတာကိုမြင်ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဘေးကဖြတ်လျှောက်သွားရင်း စကားဆိုနေကြတာ ကျွန်တော့်ကိုတောင် တိုက်မသွားကြတာကံကောင်းပါပဲ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ သူတို့စုံတွဲကို မြင်လိုက်ရချိန်မတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ စို့တက်လာသလိုဖြစ်လာရပါပြီ။ တကယ်ပဲ....တကယ်ပါပဲလား။
ခပ်တုန့်တုန့်ခြေလှမ်းတစ်ချို့နဲ့အတူ စတိဗ် ကျွန်တော်ရှိရာကိုတောင် သတိမထားဘဲ နွေးနွေးနဲ့အတူ လှမ်းလျောက်သွားတာ။ မသက်ဆိုင်သူတစ်ယောက်လို သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို မြင်ရသလိုမျိုးတစ်ချက်သာကြည့်ပြီး လှမ်းထွက်သွားတာလေ သူ....သူ ရက်စက်လိုက်တာဗျာ။
အမှန်တရားက တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်လာပြီ။ ကျွန်တော် ကျွန်တော်ကတော့ ငြင်းဆန်မိနေဆဲ။ ငြင်းနေဆဲ......ပါပဲ။
ညနေလေးစောင်းလို့ လက်ကအနာကိုက်လာတော့မှ မြို့ထဲကိုပြန်လည်မောင်းထွက်လာခဲ့ရပြန်တယ်။ အိမ်ကိုပြန်ရမှာလား....ညမွှေးပန်း ကိုရော မသွားဘူး ဆွေမင်းမှမရှိတာပဲ။ ဟိုဟိုဒီဒီ တွေးမိနေပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဆွေမင်းရဲ့တိုက်ခန်းဆီကိုသာ ဦးတည်မိခဲ့ပါတယ်။
ပတ်တီးဖြူဖြူလေးကို တစ်စတစ်စစီးနှောင်ပေးရင် ကောင်ငယ်လေးမျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်ကြည်တွေဝေ့လာတာကိုမြင်ရတော့ ကျွန်တော်လည်း ခံစားချက်တွေမြင့်လာရတာပါပဲ။ သူ့ဘက်ကဘာတွေခံစားနေရလည်း မခွဲနိုင်တာတော့သေချာပါတယ်။ ကိုယ်လည်းမခွဲနိုင် မခွဲနိုင်ပါဘူးကွာ...။
ဟင်း....ရင်ဖွင့်နေတဲ့ သူ့ခံစားမှုတွေကို နားထောင်သူသက်သက်သာဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော် သူ့ကိုဘာမှပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံး...ဘယ်လိုမှတားဆီးမရတော့ဘူး အဆုံးစွန်ထိပေါက်ကွဲတော့ မယ့် ခံစားမှုတွေဖြစ်တည်လာချိန်မှာတော့ ထရပ်ပြီး အခန်းထဲကနေ တလှမ်းခြင်းထွက်ခွာလာရပါတယ်။
အခု...အခုမှအလုံးကြီးကျသွားတဲ့ပုံစမျိုးနဲ့ မာမီတို့မျက်နှာကိုမြင်ရပြန်တော့ နည်းနည်းလေးကျေနပ်မိသလိုလို။ ဒါပေမဲ့လူဆိုတာ အတ္တစိတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုတာတော့အမှန် ကျွန်တော့်ချစ်အတ္တလေးအတွက် စဉ်းစားမိချိန်မှာတော့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံထဲက တဆစ်ဆစ်ပါ။ နွေးနွေးကရော တကယ်ပဲကျွန်တော့်အကြောင်းမသိတာလား တကယ့်ကိုပဲ ကိုယ့်ကို ချစ်ခင်နှစ်သက်တာလား ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်လိုပဲ မိဘတွေအတွက် သက်ပြင်းတစ်ခုချလိုက်ခြင်းလား။
လက်ထဲကဖုန်းရော အိမ်ကဖုန်းရောမအားနိုင်ကြပါဘူး။ မင်္ဂလာသတင်းမေးသူ စုံစမ်းသူများရဲ့ဖုန်းတွေ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟတွေရဲ့ ဖုန်းတွေ လာလိုက်ကြတာ မအားပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ အင်း...အင်းပါပဲ။ သတို့သားတစ်ယောက်ရဲ့ ပျော်ရွှင်တက်ကြွမှုဆိုတာ ကျွန်တော့်မှာမရှိတာ သူတို့အတွက်ထူးဆန်းသလား ဟား...........ဟား။
မနက်ခင်း.......မိသားစုစုံညီ ရုံးချုပ်ကိုအတူလာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဆောင်းဦးလေပြေနဲ့အတူ သစ်ရွက်တွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေကျနေတာ စိမ်းစိုနေတဲ့သစ်ပင်အစား နီစွေးစွေးအရောင် သစ်ပင်တို့ကို မြင်နေရတာ။ ကောင်းကင်ကြီးရယ် နီစွေးနေတဲ့သစ်ပင်အိုအား တဖန်စိမ်းစို ရအောင် အကြင်နာလေးများ ဆွတ်ဖြန်းပေးပါ စိုစွတ်ပါရစေလားဗျာ...။
ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်းလုပ်ကြတဲ့ အစည်းအဝေးလာ လူကြီးမင်းများကတော့ ၀မ်းသာအယ်လဲဖြစ်နေကြလေရဲ့။ မင်္ဂလာကိတ်စအတွက် အမျိုးမျိုးသော အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ ပေးနေကြတာ ၀မ်းသာသူမာမီတို့အတွက်ကတော့ တပြုံးပြုံး။
သစ်သီးချိုတွေကိုစားသုံးနေကြတဲ့လူတွေအကြားမှာ ချိုမြိန်တယ်ဆိုတဲ့အသီးကိုစားပြီး သွားမှာအချဉ်အရသာခံစားနေရ သူတစ်ဦးအဖြစ် ကျွန်တော်ခံစားနေရပါတယ်။ အစီအစဉ်တွေလုပ်ကြ လုပ်ငန်းရေးရာတွေဆွေးနွေးကြနဲ့ဒီနေ့တော်တော်စည်ကားနေကြပါရဲ့။
အစည်းအဝေးခန်းမတံခါးကိုအဖွင့် ကျွန်တော့်ရင်တွေ ဒုတ်ခနဲခုန်သွားရပါတယ်။ ညှိုးနွမ်းနေတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ဆွေမင်းကို မလှမ်းမကမ်း မှာ မြင်လိုက်ရတာကြောင့်။ ဒီလိုအချိန် ဒီလိုနေရာမှာ သူ့ကိုဘာများပြောရမှာပါလိမ့်။ နှုတ်ခမ်းများကအလို လိုတိတ်ဆိတ် သွားကြတာ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေ တုံ့ဆိုင်းကုန်တာ တပြိုင်နက်တည်းဖြစ်တည်သွားတာဟာ ကျွန်တော့် အဖြစ်တွေပါ။ နွေးနွေးက ကျွန်တော့်ဘေးမှာစကားတပြောပြောနဲ့လိုက်ပါလာနေတာ.....ဟင့်အင်.....မင်းနဲ့ငါမသိဘူး။
နွေးနွေးပြောနေတဲ့ စကားတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကားပါကင်ရှိရာကိုလှမ်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ နိမ့်ကနဲဖြစ်သွားတဲ့ ဓာတ်လှေကားရဲ့ လှုပ်ရှားမှုက ရင်ထဲသိမ့်ကနဲဖြစ်သွားရပေါ့။ ဘေးချင်းယှဉ်စီးလာတဲ့ နွေးနွေးမျက်ဝန်းကို ကြည့်လိုက်မိတော့ သူမမျက်ဝန်းတွေက တစ်စုံတစ်ခုကိုသိနေသလို ပြီးတော့ အဖြေသိချင်နေတဲ့ပုံဟန်တွေကိုမြင်လိုက်ရတာ ကျွန်တော် အံ့သြသွားရပြီ။
'သိပ်အတ္တမကြီးပါနဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတာ ချစ်တယ်ဆိုတာ လက်ထပ်တာ တစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်တည်သွားတယ်လို့ ကျွန်မထင်နေတယ်များထင်သလား။'
မီးပွိုင့်ကလည်း အခုချိန်မှလာပြီးကျပ်နေရ သေးတယ်။ မီးအစိမ်းရောင်ပြလည်းပြရော ကားကိုလျောကနဲ လျောကနဲမောင်းထွက်လာလိုက်တာ ဘေးဘီကိုတောင် မကြည့်မိတော့တဲ့အထိပါ။ ဒီအချိန်မှာ သူနဲ့တွေ့ဖို့ကိစ္စကလွဲလို့ ဘာကများအရေးကြီးမှာလည်း။
လူနေအိမ်ခန်းတွေက ကားတွေကလွဲလို့ ကားပါကင်မှာကားတော်တော်များများမရှိတော့ပါဘူး။ သူဘယ်နားမှာ များလည်း......သူ့ကား လည်းမတွေ့မိပါလား။
Posted by Alex Aung at 6:09 PM 1 comment:
'သားညီ....ဒါဦးငယ်ရဲ့ ဘော်ဒါ ကျော်စွာလင်းတဲ့၊ ဦးငယ်နဲ့အတူလာနေမှာ။ သားညီက အန်ကယ်ကျော်လို့ခေါ်ပေါ့။'
ဦးငယ်သည် အောင်မြင်စပြုနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ဦးစီးဦးဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဖက်ရှင်ဆိုင်တွေဖွင့်ထားသည်။ ယောက်ျားလေးသုံးပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းမှာလည်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လေသည်။ ကျွန်တော်သည်ပင် သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြင့် မန်နေဂျာဖြစ်နေသည်ပင်။
ဖေကြီး၊ မေကြီးနှင့် ကိုကိုတို့အားလုံး ကနေဒါမှာ နေထိုင်နေကြသည်မှာ ကျွန်တော်ဆယ်ကျော်သက်မစွန်းတစွန်းအရွယ်ကတည်း ကပင်။ ကျွန်တော်သည်သာ ဦးငယ်ကို သံယောဇဉ်ရှိတာရော မြန်မာပြည်မှာ နေပျော်သည်ရောကြောင့် ကျောင်းတက်ရင်း ဦးငယ်ကို ကူညီလုပ်ကိုင်ရင်း ပျော်ရွှင်နေမိသည်ပဲ။
ဦးငယ်သည် အခုအရွယ်ထိ အိမ်ထောင်မကျသေးသည့်လူပျိုကြီးဖြစ်သည်။ စီးပွားရှာကောင်းသော၊ ရုပ်ရည်ခန့်ညားသော သူ့အတွက် အိမ်ထောင်ဘက်မှာ မရှားပေ။ ဒါပေမဲ့ ဦးငယ်သည် သူ့သူငယ်ချင်းများစွာဖြင့်သာ သွားလာလှုပ်ရှားနေသည်ကများပါသည်။
အမြင်စူးရှမှု၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ လမ်းသစ်ထွင်နိုင်မှုတို့ကြောင့် ဦးငယ်ရဲ့ ဖက်ရှင်ဆိုင်များစွာဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲ။ ဒုတိယမြို့တော် မန္တလေးမြို့မှာပင် ဆိုင်ခွဲ ၂ခုရှိသည်။ ဦးငယ်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အများကြီးထဲမှာ လူမျိုးစုံ ပါသည်။ သည်အထဲမှာမှ အခုအိမ်မှာ လာရောက်နေထိုင်မည့် အန်ကယ်ကျော်နဲ့ အတော်တွဲသည်။ ဘယ်သွားသွား ဘယ်လုပ်ငန်းဖြစ် ဖြစ် နှစ်ဦးအတူ ထူထောင်ကြသည်ကများသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ လူငယ်ပီပီ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ရွှင်စွာနေတတ်သည်။ ယခုနှစ်မှစပြီး UFL မှာ အင်္ဂလိပ်စာမေဂျာဖြင့် ကျောင်းစ တက်ရ မည် ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကျော်သက်လွန်ခါစ လူငယ်တစ်ဦးပင်ဖြစ်တော့သည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက အားကစားဝါသနာ ပါသည် ကြောင့်ရော ဖေကြီးနဲ့ တူသည်ကြောင့်ရောထင့် ထွားကြိုင်းသည်မှာ ဦးငယ်ဘော်ဒီနှင့် မတိမ်းမယိမ်းပင်။ စိတ်ထားကတော့ ကလေး ဆန်ချင်တုန်းဖြစ် သည်။
မနက်ခင်းအိပ်ယာနိုးခါစ အိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာစဉ် ဦးငယ် မန္တလေးကပြန်ရောက်ပြီး သူ့သူငယ်ချင်းနှင့် မိတ်ဆက်ပေး လာခြင်းဖြစ် သည်။ အန်ကယ်ကျော်ဆိုသူကို သိပ်သဘောမကျချင်ပါ။ မျက်လုံးများက တစ်မျိုးလို့တော့ ထင်မိသည်။ ညအိပ်ဘောင်းဘီမလဲရသေး သည့် ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်သည့်ပုံစံက နည်းနည်းဆန်းချင်သည်။
တက္ကသိုလ်စတက်ခါစ လူငယ်တွေထုံးစံအတိုင်း သူငယ်ချင်းအသစ်တွေဖြင့် သွားတာလာတာ သင်တန်းတွေ တက်ကာဖြင့်နေမိသည် ကြောင့် ပထမနှစ်ဝက် စာမေးပွဲတွင် အမှတ်အလွန်နည်းလှစွာဖြင့် အောင်သည်။ ညနေခင်း အိမ်ရောက်တော့ ကျွန်တော့်အိတ်ကို ဦးငယ်ယူကြည့်စဉ်မှာတော့ ထိုအမှတ်စာရင်းစာရွက် ဦးငယ်လက်ထဲရောက်သွားခဲ့လေသည်။ စာနှင့်ပတ်သက်လျှင် ဖေကြီးထက်ပင် စနစ်ကြီးသော ခွင့်မလွှတ်တတ်သောကြောင့် ဖေကြီးက စိတ်ချယုံကြည်ခြင်းကို ခံယူရသူဖြစ်သည်။
'ကျော်စွာ...ဒီကောင့်ကို ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ကိုကြီးက အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ဘယ်လိုမှသူ့ကို စောင့်ကြည့်နေနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကျော်စွာက ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ကိုကြီး ကိုယ်စားထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်ပေးပါ။ ပြီးတော့ အမှတ်စာရင်းမှာက ဒီကောင်တော်တော်အမှတ်နိမ့်နေတယ်။ ညီက သြဇီက ပါရဂူဘွဲ့ယူခဲ့သူဆိုတော့ အတော်ပဲ ကောင်းကောင်းထရိန်နင် လုပ်ပေးပါ။' ဦးငယ်သည် ကျွန်တော်နှင့် အန်ကယ်ကျော်အား ရှည်လျားစွာမှာကြားပြီး စာကြည့်ခန်းရှိရာသို့ ထွက်သွားလေတော့သည်။
'ကဲ...ကောင်ကလေး မင်းဦးလေးကတော့ အန်ကယ်ကျော့်လက်ထဲ မင်းကိုအပ်လိုက်ပြီ...ဒီနေ့ကစပြီး သားညီရဲ့ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းက အန်ကယ်ကျော့်အပေါ်ကိုရောက်လာပြီ။'
ထိုစကားကို အန်ကယ်ကျော်က ကျွန်တော့်ပုခုံးကို အသာညှစ်ကိုင်ရင်းပြောလေသည်။ တစ်မျိုးတော့ တစ်မျိုးပင် ဦးငယ်က သူ့သူငယ်ချင်းကို ကျွန်တော့်အား အလုံးစုံအပ်နှံသည့်ပုံဖြစ်နေသည်။
ကျွန်တော်သည် အခုအရွယ်ထိ ကလေးစိတ်မကုန်သေးပေ။ ကိုယ့်ထက်ငယ်သော ကလေးတွေနှင့် ကစားကောင်းတုန်း၊ သူငယ်ချင်းတွေ နှင့် ကစားတုန်းပင်။ ပြီးတော့ အိမ်မှ ကားဒရိုင်ဘာ ဦးလေးရဲ့ သား ရဲမွန်နှင့်လည်း နဘမ်းလုံးကောင်းတုန်းရှိသေးသည်။ ဒါကို အိမ်ရောက် ခါစ အန်ကယ်ကျော်က မကြိုက်သလို ရှိသော်လည်း ကျွန်တော့်အား ဘာမှမပြောခဲ့ပေ။ အခုတော့ အန်ကယ်ကျော့်အကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ရလေ ပြီ။
အိယ်ယာထချိန်မှစ၍ မျက်စိနှစ်လုံးမှိတ်ချိန်ထိ ကျွန်တော့်အား Time Table ဆွဲပေးလေသည်။ ကျွန်တော့်ကို နားဝင်အောင် ချော့မေ့ာ့ဆို ဆုံးမသည်။ သူ့အစီအစဉ်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာကို သူကိုယ်တိုင် ကြပ်မတ်သင်ကြားပေးသလို ကျောင်းကစာများကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးသည်။ အချိန်ကြာလာ တော့ သူ့ကိုအထင်ကြီးအားကျလာမိတော့သည်။
အလုပ်က လက်အောက်ငယ်သားတစ်ချို့အပါအ၀င် ရဲမွန်တို့ဖြင့် ရောနှောနေသည်ကို ဘာမှမပြောပေမဲ့ ကွယ်ရာတွင်တော့ သူတို့အား ဆူသည်ပြောသည်ဟု သိရသည်။ နောက် သူတို့တွေက ခပ်တန်းတန်းဆက်ဆံသော အခါမှ အန်ကယ်ကျော်က အာရုံမလွင့်အောင် စာကိုပိုဂရုစိုက်အောင် ၀ိုင်းပြီးကြပ်မတ်ပေးဖို့ ပြောထားလို့ဆိုသည်။
အိမ်က ရဲမွန်သည် ကျွန်တော့်ထက် ၂နှစ်သာကြီးပြီး အဝေးသင်တက်နေသူဖြစ်သည်။ သူ့အဖေ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ ဒရိုင်ဘာလာ လျှောက်စဉ်ကတည်းက ပါလာသော ငယ်မွေးခြံပေါက်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော့်ကစားဖော်ပြောသမျှ လုပ်ဆောင်ပေးတတ်သော သူအဖြစ် အိမ်တွင်ရှိနေသူဖြစ်သည်။
ဒါကိုအန်ကယ်ကျော်က ဘာဖြစ်သည်မသိ ရဲမွန်နှင့် လုံးထွေးနေသည်ကို မျက်စိစပါးမွှေးဆူးလေသည်။ 'သားညီ ဒီကောင်တွေနဲ့ အရော ၀င်လုံးထွေးနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး။ သားညီအားလပ်ချိန် ပျင်းရင် အန်ကယ်ကျော်နဲ့ တင်းနစ်ရိုက်ရင်ရိုက်၊ ဗီဒီယိုကြည့် ချင်ရင် လည်းကြည့်။' အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော့်အား ထိုအချိန်က (ကျွန်တော့်အထင်) သားအရင်းနှင့်မခြား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့လေ သည်။ လက်သည်းခြေသည်း ညှပ်ပေးတာမျိုး၊ တစ်ခါတစ်လေ ရေချိုးခါနီး ခေါင်းလျှော်ပေးတတ်တာမျိုး လုပ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထိုအချိန် များတွင် ရဲမွန်သည် မျက်နှာသုပ်ပ၀ါလေးကိုင်ကာ ကျွန်တော့်အား တွေဝေစွာငေးကြည့်နေတတ်၏။
တစ်နေ့ အလုပ်ကိစ္စဖြင့် သူအိမ်အပြင်ထွက်သွားစဉ် အိမ်မှာ ကျွန်တော်၊ ထမင်းချက်လင်မယား၊ ရဲမွန်သာလျှင် ကျန်နေခဲ့၏။ ကျွန်တော့်အား အန်ကယ်ကျော်ပေးခဲ့သော အိမ်စာများအား အခန်းထဲတွင် ရေးဖြေနေချိန်တွင် 'ဒေါက်....ဒေါက်' ဆိုတဲ့တံခါးခေါက် သံနှင့်အတူ အခန်းအပြင်ဘက်မှ အသံပြုတာကိုကြားလိုက်ရသည်။
အခန်းတံခါးကို အသာလှစ်ပြီး ၀င်လာသည့်ရဲမွန်သည် အခန်းထဲရောက်မှ ဘာကို မလုံမလဲဖြစ်နေသည်မသိ ဟိုကြည့် သည်ကြည့်။
'ဟမ်...ကိုရဲက ဘာသတိပေးမလို့တုန်းဗျ ရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါဗျာ။'
'ဒီလို ကိုညီရဲ့ ကိုညီ့ဦးငယ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းအန်ကယ်ကျော်လေ ကိုညီ့အပေါ် မရိုးသားသလိုပဲ။ ဟိုတနေ့က သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လာလည်ရင်း ပြောနေကြတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်မှန်းမသိပေမဲ့ တစ်မျိုးပဲဗျာ။ ကောင်လေးကို ငါမွေးထားတာ သိပ်မကြာခင်စားလို့ရပြီတဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းက နင်တစ်ယောက်ထဲကြိတ်စားမနေနဲ့ ငါ့ကိုလည်း ပေးကျွေးဦးလို့ သူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြတယ်။'ဟု ရဲမွန်က တုန်တုန်ရင်ရင်ဖြင့်ပြောလေသည်။
သူပြောသောစကားတွေကြောင့် ကျွန်တော်အလွန့်ကို နားရှုပ်သွားလေ၏။ ဘာတွေလည်း မွေးစားတာတွေရော စားလို့ရပြီဆိုတာတွေရော ငါ့ကိုလည်း ကျွေးဦးဆိုတာတွေရော။ ကျွန်တော်စိတ်ညစ်သွားရလေသည်။
'ကိုရဲကလည်း ကြည့်ပြောပါဦး။ ယောက်ျားလေးချင်းကြိုက်စရာလား။ မိုးကြိုးတွေပစ်ကုန်ပါဦးမယ်။'
'ဘယ်က မိုးကြိုးပစ်ကုန်ရမှာလည်း ကိုညီရဲ့ ဦးငယ်....ဦးငယ်နဲ့ သူနဲ့က လင်မယားလိုနေကြတာ။ ဦးငယ်က အလုပ်များနေတော့ ကိုညီ့ဘက်လှဲ့လာတာပေါ့။'
ကျွန်တော်တွေဝေသွားရပါ၏။ ကိုရဲဆိုသည့် ရဲမွန်သည် ကျွန်တော့်အတွက်ဆို ငယ်စဉ်ကတည်းက အနစ်နာခံသူ၊ အကျိုးလိုလားသူဖြစ် သည်။ ကျွန်တော့်အား လိမ်ပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ရဲမွန်သည် အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခွပါသော ထိုစကားကို ပြောဆိုကာ အခန်းထဲမှ ထွက်သွားလေသည်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကြည့်ဖူးကြားဖူးနေသော ကိစ္စ....အား...ဘ၀၏ ရှုပ်ထွေးမှုဆိုတာကြီးနဲ့များ ကျွန်တော် ပထမဆုံးအကြိမ်စ၍ ရင်ဆိုင်နေရပြီနဲ့တူသည်။
'သားညီ...အန်ကယ်ပြန်လာပြီ၊ အန်ကယ်ကျော့်အခန်းကိုလာခဲ့ဦး။ ဒီမှာ မင့် ဦးငယ်က အ၀တ်အစားဒီဇိုင်းအသစ်တွေ ထည့်ပေးလိုက် တယ်။ တော်မတော်ကြိုက်မကြိုက် လာဝတ်ကြည့်ဦး။'
မြို့ထဲမှပြန်လာသော အန်ကယ်ကျော်၏ အသံကို ကြားလိုက်ရ၏။ ယခင်ကဆိုလျှင် အန်ကယ်ကျော့်အခန်းကို အမြန်ဝင်ကာကျွန်တော့် အတွက်ယူလာသော အ၀တ်အစားများအားပြေးယူမိမည်ဖြစ်သည်။ ယခုတော့ ရဲမွန်ပြောစကားကြောင့် ကျွန်တော်ရွံ့တွန့်တွန့်ဖြစ်နေ၏။ နောက်ဆုံးတော့လည်း အန်ကယ်ကျော့်အခန်းရှိရာကို ရောက်သွားရတာပါပဲ။
'သားညီ ဒီမှာဝတ်ကြည့်စမ်းပါဦး ဂျင်းဘောင်းဘီဒီဇိုင်းအသစ်တွေ။ အခုခေတ်စားနေတဲ့ Skinny ရော ၊ Retro ဒီဇိုင်းတွေရော။ အင်္ကျီက တော့ Body Fit တွေယူ လာတယ်။ မင်းဘော်ဒီနဲ့ဆိုလိုက်မှာပါ။' အန်ကယ်ကျော်က ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ကျွန်တော်ဝတ်ထားသော အင်္ကျီကြယ်သီး အားဖြုတ်ပေး နေ၏ ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးနေကြ အန်ကယ်ကျော်မှာ ဘာမှမဖြစ်သော်လည်း ကျွန်တော့်မှာ ရင်တုန်သလိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်နေ ရတော့သည်။
ပြီးနောက် သူယူလာသော အင်္ကျီများကို တစ်ထည်ပြီး တစ်ထည်ဝတ်ကြည့်ခိုင်းတော့သည်။ 'သားညီ ဘောင်းဘီလည်း ၀တ်ကြည့်ဦး လေ..မတော်ရင်ဆိုင်ကို ပြန်ယူသွားရအောင်။'
'ဟို....ဟိုလေ' ' ဘာဟိုလေလဲ...ကဲချွတ် အောက်ခံဘောင်းဘီပါတယ်မဟုတ်လား...ကိုယ့်ဦးလေးပဲ ရှက်မနေစမ်းပါနဲ့။'
သူပြောသမျှစကားတွေကို လိုက်လုပ်ဖို့လိုသလား။ ဟိုတွေးဒီတွေးဖြစ်ရင်း နောက်ဆုံးတော့ ငြင်းမရသည့်အဆုံး ဘောင်းဘီအားချွတ်ချ လိုက်လေတော့သည်။ ထိုအခါတွင်မှ သတိထားမိသည်မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီတိုအောက်မှ ကျွန်တော့် ငပဲသည် ဘောင်းဘီအတွင်းမှ ကွဲထွက်တော့မည့်အလား ရုန်းကန်နေလေသည်။
ပထမတွင် အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော့်အောက်ခံဘောင်းဘီအတွင်းမှ ရုန်းထွက်တော့မည့်အလား ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေ သော အရာကို မှင်သက်မိသလိုမျိုးကြည့်နေမိသော်လည်း သတိပြန်ဝင်လာသည့်ပုံဖြင့် မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ သူယူလာသော ဂျင်းဘောင်းဘီတစ်ထည်အား ကျွန်တော့်ကိုပေးကာ 'ကဲ...သားညီ ၀တ်ကြည့်'ဟု တုန်ရင်တိုးလျှသော အသံလေးဖြင့် ပြောလေသည်။
ကျွန်တော်လည်း အယောင်ယောင်အမှားမှားဖြင့် ဂျင်းဘောင်းဘီအားသူ့လက်မှ ကောက်ယူဝတ်လိုက်ပြီး ဘောင်းဘီဇစ်အားဆွဲတင် လိုက်သောအခါဝယ် 'အား' မျက်စိထဲတွင် မီးပွင့်သွားပြီး ကျွန်တော့်လိင်တံအား မီးစနှင့် ထိုးခံလိုက်ရသလိုမျိုး ခံစားလိုက်ရလေသည်။ ဘောင်းဘီဇစ်ကို မဆင်မခြင်ဆွဲတင်လိုက်သောကြောင့် ဇစ်နှင့် ထိပ်ဖျား မိတ်ဆက်သွားရလေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော့် မျက်စိထဲဘာမှမမြင်တော့။ အန်ကယ်ကျော့်အခန်းထဲ ကုန်းကုန်းကွကွဖြစ်နေရလေတော့သည်။ 'ဟ..ဟ သားညီ ဘာဖြစ်တာလဲ အထိတ်တလန့်ရှိလိုက်တာကွာ။'
အန်ကယ်ကျော့်အသံကြားမှ ကျွန်တော်သတိဝင်လာတော့သည်ပဲ။ ဖြစ်နေချိန်တွင် ကျွန်တော့်ရှက်စိတ်များသည် ဘယ်ကိုလွင့်စင် သွားသည်မသိ။ နာကျင်မှုကသာ ဦးဆောင်နေလေသည်။ 'ဟို...ဟိုလေ ဘောင်းဘီဇစ်ညှပ်နေလို့....အား'
'အင်း....ဘာများဖြစ်သလည်းလို့ မင်းကလေ မင့်ဦးလေးနဲ့ တော်တော်တူတယ်။ လုပ်ချင်ရာစွတ်လုပ်တာပဲ ရှေ့နောက်ဘာမှ မကြည့်ဘူး။ တူနဲ့ဦးလေးနဲ့ လိုက်ပ။'
ဗီရိုထဲမှ ဆီတစ်မျိုးကိုယူ ဘောင်းဘီဇစ်အားသုတ်လိမ်းပြီး ဇစ်ကိုရုတ်တရက်ဆွဲချလိုက်တော့ ကျွန်တော့်မျက်စိထဲတွင် ဘာမှမမြင်တော့ ဘဲ ဒူးထောက်ကာ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီဇစ်အားဆွဲဖြုတ်ပေးနေသော အန်ကယ်ကျော့် ခေါင်းအား ကိုင်ကာ ကျွန်တော့်ကိုယ်နဲ့ဆွဲကပ် ထားနေမိတော့သည်။ ကျွန်တော် သတိဝင်လာသောအခါဝယ် အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံတွင် မျက်နှာအပ်နေလျှက် အရေပြားမှပဲ့၍ထွက်လာသော သွေးစတို့သည် သူ၏ပါးပြင်ဝယ် စွန်းပေလျှက်တွေ့လိုက်ရလေသည်။
'ဘာအခုမှ ကန်တော့လည်း ဒီမှာသွေးတွေပေကုန်ပြီ အသည်းငယ်လိုက်တာလည်းလွန်ရော လူကောင်ကြီးနဲ့မှမလိုက်။'
အန်ကယ်ကျော်သည် အပြစ်တင်စကားဆိုသော်လည်း ဒေါသထွက်ဟန်မတူ။ ကျွန်တော့်မှာသာ အနည်းငယ်ထိတ်လန့်သွားရသည်။
ထိုအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်သည် ဒစ်မပြုတ်သေးပေ။ အရေပြားသည် ကျွန်တော့်အတံအား ငုံထားသည်မှာ ငှက်ပျောဖူးကြီးသကဲ့သို့ ပင်။ ကျွန်တော့်အသက်အရွယ်နှင့်မလိုက်ဖက် ကျွန်တော့်ညီဘွား အရှည်မှာ ၅လက်မနှင့် ၈စိတ်လောက်၊ လုံးပတ်မှာ ၁ိ^ကျပ်လုံးပတ် ခန့်ရှိနေလေပြီ။
ရဲမွန်သတိပေးစကား ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲဝင်လာပေမည့် ခုလိုအခြေအနေမှာ ဘယ်လိုမှငြင်းဆန်၍ မဖြစ်နိုင်တော့။ ကျွန်တော့်အား ခုတင်စောင်းတွင် ထိုင်ခိုင်းကာ အောက်ခံဘောင်းဘီအား ဆွဲချွတ်လိုက်လေသည်။ ထိုအခါတွင် ကျွန်တော့်အတံသည် ဘောင်းဘီ အောက်မှ ရုန်းထွက်လာပြီး အန်ကယ်ကျော့်မျက်နှာဆီသို့ အမြောက်နဲ့ချိန်ထားသကဲ့သို့ ဒူးထောက်၍ ထိုင်နေသော အန်ကယ်ကျော်၏ မျက်နှာရှေ့တွင် တရမ်းရမ်းဖြစ်နေလေသည်။
'မင်းကလည်း ယောက်ျားလေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ ခဏလေးအောင့်ခံ'
အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော်မစပ်စေရန် လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ကျွန်တော့်ဟာကိုဆုပ်ကိုင်လျှက် သူ၏ နှုတ်ခမ်းပါးကလေးများကို စူလျှက် ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကို လေဖြင့်မှုတ်ပေးလေသည်။
အရက်ပြန်အရှိန်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ အန်ကယ်ကျော် မှုတ်ပေးသောလေကြောင့်လည်းကောင်း အေးကနဲဖြစ်သွားကာ အနည်းငယ် အစပ်ပြေသွားလေတော့သည်။ အန်ကယ်၏ နှုတ်ခမ်းအစုံသည် ကျွန်တော့်ပစ္စည်းထိပ်နားတွင် ကပ်ကာမှုတ်ပေးနေသည့်ပုံမှာ ကျွန်တော့် ဘ၀ရဲ့ ခံစားမှုအသစ်ဖြစ်သောကြောင့် မမေ့နိုင်စရာပင်။ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်တွင် ထိုင်လျှက် လက်အားနောက်သို့ထောက်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို ကော့ပေးနေမိတော့၏။ တစ်ချက်တစ်ချက် ကျွန်တော့်ဟာနှင့် အန်ကယ်ကျော်၏ စိုလက်နေသည့် နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာသည် ထိတစ်ချက် မထိတစ်ချက်ဖြစ်နေလေတော့သည်။ အတန်ကြာ မိန့်မူးနေမိပြီးတော့မှ သတိဝင်လာကာ မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ တွင် သူ၏လက်အစုံက ကျွန်တော့်ငပဲအား ယုယစွာကိုင်လျှက်ဖြင့် နှုတ်ခမ်းအစုံအား စူလျှက်ကျွန်တော် မစပ်စေရန် ထိပ်နားကပ်လျှက် တဖူးဖူးနှင့် မှုတ်ပေးနေလေသည်။
အန်ကယ်ကျော်၏ မျက်လုံးအစုံသည် ကျွန်တော်ကဲ့သို့ မှေးစင်းနေလေသည်။ 'အန်ကယ် ညီ့ဟိုဟာမှာ သွေးနည်းနည်းထွက်နေသေး တယ် ဆေးခန်းသွားပြရမလားဟင်' ကျွန်တော်စိုးရိမ်စွာနဲ့ မေးမိတာပေါ့ဗျာ။ ဒီကိစ္စနှင့် ဆေးခန်းသွားပြရမှာ ရှက်စရာကောင်းသမို့လား။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားလေးတွေမှာ ဒီဟာက အဓိကပင် မရှိမဖြစ်ပစ္စည်း၊ တော်ကြာ တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှဖြင့် ကျွန်တော်လူညွန့် တုန်းပေတော့မည်။
'ဘာမှ ဆေးခန်းသွားပြစရာမလိုဘူး... ခုချက်ခြင်း သွေးတိတ်အောင် လုပ်ပေးမယ် မျက်စိမှိတ်ထား။'
ကျွန်တော် နားမလည်နိုင်စွာဖြင့် မျက်စိအစုံအား မရဲတရဲပိတ်လိုက်၏ ပထမတွင် ကျွန်တော်၏ ငပဲထိပ်သည် ငွေ့ငွေ့လေးပူနွေးလာကာ တဖြည်းဖြည်း စိုစွတ်လာလေသည်။ ထိပ်မှသည် တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အကြောအခြင်များကို စုပ်ယူခြင်း ခံလိုက်ရသလိုမျိုးဖြစ်သွားလေသည်။ အန်ကယ်ကျော်ဘာလုပ်လိုက်လေသနည်း။
ကျွန်တော်သိချင်စိတ်ကို ထိန်းမရတော့တာကြောင့် မျက်လုံးကို တဖြည်းဖြည်းခြင်းဖွင့်လိုက်သောအခါ အံ့သြသော....အားနာသော မဖော်ပြနိုင်သော ခံစားမှုတရပ် ကျွန်တော့်ရင်ကို ၀င်ရောက်လာလေပြီ။
အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ၏ ပါးစပ်တွင် ငုံကာစုပ်ပေးနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 'အန်ကယ်.... မလုပ်ပါနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုငရဲမပေးပါနဲ့' ကျွန်တော်အလန့်တကြား တောင်းဆိုလိုက်သည်။
'ဘာမှ ငရဲမကြီးပါဘူးကွာ ပြီးမှ မင်းငရဲမကြီးအောင် အန်ကယ်ပြန်ပြီး လုပ်ပေးမှာပေါ့။'
ကျွန်တော်နားမလည် အန်ကယ်ကျော်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဘာပဲပြောပြော ဒီအချိန်မှာတော့ ဘယ်သူလာတားတား ကျွန်တော် ဂရုစိုက်တော့မည်မဟုတ်တော့ပေ။ အန်ကယ်ကျော်လုပ်ပေးသမျှ ငြိမ်ခံနေမိတော့၏။
ပထမတွင် ငြင်သာစွာ အာငွေ့ပေးပြီး ဖြေးညင်းစွာ စုပ်ပေးနေသော်လည်း တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကျွန်တော့်ငပဲအား ဂွင်းတိုက်သလိုမျိုး သူ၏လက်အစုံဖြင့် လုပ်ပေးနေသည့်အပြင် သူ့ပါးစပ်ထဲတွင် တပ်လျှက်ဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်အတံအားလည်း အဆက်မပြတ် အားပြင်းစွာ စုပ်ယူပေးနေလေသည်။
ကျွန်တော်သည် ကာမအရာသာ၏အထွဋ်အထိပ်ဆုံးဖြစ်သော ပုလွေမှုတ်ပေးခြင်းခံရသည်ကို အဦးဆုံးစတင်ခံစားရမိခြင်းဖြစ်လေသည်။ အပြာဇာတ်လမ်းများကိုကြည့်ဖူး၊ ကောင်မလေးတွေနဲ့ တွဲဖူးပေမဲ့ လက်တွေ့ဘယ်တုန်းကမှ မစမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ပေ။ ရှက်သည်ရော ကြောက်သည်ရောကြောင့်ထင်ပါရဲ့။
အခုများတော့ ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းဆိုသည့်စိတ်ကြောင့်ရော၊ ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုသည့် မသိစိတ်ကြောင့်ရော ပါသည်ထင့် အန်ကယ်ကျော်ပြုသမျှကို အသာတကြည်လိုက်ပါသွားမိတော့သည်ပင်။
အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော့်ငပဲအား အချက် ၂၀ခန့်အားကုန်စုပ်လိုက် ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက် လုပ်ပေးသောအခါ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ် လုံး ဓာတ်လိုက်သလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီး ဆီးသွားလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဖြူပစ်ပစ်အရည်များ အန်ကယ့်ပါးစပ်တွင်းသို့ ပန်းထွက်သွားလေ တော့၏။
'မင်းကိုချစ်လို့လုပ်ပေးတာနော်။ အဲဒါကိုပုလွေမှုတ်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ် သားညီရ။အဲဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်ရင် ဘယ်ကောင်မှ မခံနိုင်တော့ဘူး။ မင်း ဦးငယ်ဆိုရင် ညဘက်အန်ကယ်ကျော် ပုလွေမှုတ်ပေးမှ ကျေနပ်ပြီး အိပ်ပျော်သွားတတ်တာ။'
'ဘာခုမှ နားရှက်စရာလဲ...ခုနကတော့ တဟင်းဟင်း တဟဲဟဲနဲ့'
အန်ကယ်ကျော် သိမ်းသွင်းစပြုလေပြီ။ ကျွန်တော့်မှာ အတွေ့၊ ပြီးတော့ ထပ်မံစူးစမ်းချင်စိတ်၊ ဘာတွေထပ်ပြီး ခံစားရဦးမလဲ စတာတွေပါဝင်တဲ့ ကွန်ယက်မှ ရုန်းမထွက်နိုင်ဘဲ ငြိတွယ်သက်ဆင်းရပြီပေါ့။
ရဲမွန်ကရော ဒါတွေ ဘာကြောင့် သိရသလည်း။ သူပြောတဲ့စကားများက တဖြည်းဖြည်းမှန်လာလေပြီ။
နောက်တနေ့ မနက်ခင်းအရောက်မှာတော့ မနက်ကော်ဖီသောက်ချိန်ကို တမင်လွှဲပြီးမှ ထသည်။ ဦးငယ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာ ရှိန်းနေသလိုပင်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းပိတ်တာကို အကြောင်းပြပြီး အိပ်ယာထ နောက်ကျပစ်သည်။
ရဲမွန်လာနှိုးတော့မှ မထချင်ထချင်နဲ့ အိပ်ယာထဲကထွက်သည်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ရဲမွန်ကျွန်တော့်ကို စကားသိပ်မပြော။ ထားလိုက်ပါ ဒီကောင် ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး။
သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတွေ လှမ်းခေါ်လို့မြို့ထဲလျှောက်သွားတော့လည်း ခါတိုင်းလို သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘဲ မနေ့ညက အတွေ့အကြုံကို တောင့်တနေမိသည်ပဲလေ။
'သားညီ.....ဦးငယ်ရုံးခန်းကို ခဏလာဦး' ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဒိန်းကနဲဖြစ်သွားတာပဲ။ သိများသိသွားသလားမသိ။ သူ့ပါတနာကို ကျွန်တော်က လုတာမှမဟုတ်တာဘဲနော်။
ပက်ကင်ပေပါ လှလှတွေနဲ့ ထုပ်ပိုးထားပေမဲ့ အထဲမှာ ဘာတွေပါသည်ဆိုသည်ကိုတော့ ရိပ်မိသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်သုံးဖို့ Lube တွေ၊ ကွန်ဒုံးတွေကို ၀ယ်လာခြင်းဖြစ်မည်။ ကျွန်တော်ကရော ဒါတွေမသိနိုင်ဘူးလို့ ဦးငယ်ထင်ထားသလားမသိ။ ဒီလိုမှမဟုတ်.....။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ တိတ်ဆိတ်လို့ ဒရိုင်ဘာတို့ မာလီတို့ ခြံထဲမှာ သူ့အလုပ်နှင့်သူ။ ရဲမွန်လည်း ကျောင်းကမပြန်လာသေးဘူး ထင်ပါရဲ့။ အဲဒီကောင်က အဝေးသင်တက်နေတာ ဒီနေ့စာစဉ်သွားတင်တာလေ။
ရေမိုးချိုး ကျောင်းကစာတွေလုပ်၊ အန်ကယ်ကျော် နားထောင်ခိုင်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်တဲ့ စီဒီတွေနားထောင်၊ အားလုံးပြီးသွားတော့ တစ်ခုခုကို တောင့်တမိသလိုပါ။ ထမင်းစားပြီး တစ်မျိုးလိုပြီထင်ပါရဲ့။
အန်ကယ်ကျော်တို့ အခန်းဘက်ကို သွားကြည့်ဦးမှပါ။ 'ဟင်အခန်းတံခါးကို စေ့ရုံပဲစေ့ထားပါလား။' အခန်းတံခါးကိုခါတိုင်းဆို သော့ခတ်ထားတတ်ပါသည်။ အထဲမှာ တော်တော်သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်နေသလိုပဲ။ ဦးငယ်တစ်ယောက်တည်း နေတုန်းကလိုမဟုတ် မွှေးကြိုင်အေးမြလို့။ တီဗီစင်နားမှာလည်း စီဒီတွေ၊ ဒီဗီဒီခွေတွေ အများကြီး...ဘာခွေတွေရှိလည်း။ Frozen Flowers တဲ့ Brokeback Mountain တဲ့...ဟိုကားတွေ။ အားပါးပါး... ဘာခွေတွေလည်း ဘော်ဒီလှလှ ငနဲတွေရဲ့မပေါ့တပေါ်ခွေတွေ၊ ဆူးလေပလက်ဖောင်းနားက ခွေဆိုင်မှာတွေ့ဖူးတဲ့ M2Mလို့ရေးထားတဲ့ ကားတွေပါလား။
ကိုရီးယားကားကို စက်ထဲထည့်ပြီး ကြည့်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ပြကွက်တွေက စိတ်လှုပ်ရှားစရာအပြည့်။
နောက် M2M အခွေတွေ လျှောက်မွှေကြည့်တော့ ဘော်ဒီတော်တော်မိုက်တဲ့ ဘရာဇီး သရုပ်ဆောင်တွေပါတဲ့ အခွေအားစက်ထဲထည့်ရင်း စတင်စူးစမ်းဖြစ်ပါတော့သည်။ဇာတ်ကားစာတန်းထိုးကတည်းက သရုပ်ဆောင်တွေ အကုန်လုံး ရေကူးကန်မှာ ပါတီလုပ်နေကြသည်။ ဘော်ဒီတွေက တော်တော်မိုက်သည်မှာ ကျွန်တော်တောင် သူတို့လိုဖြစ်ချင်လာသည်။ သူတို့ရင်အုပ်၊ ဘယ်လီကြွက်သားတွေပြီးတော့ တင်ပဆုံတွေက လုံးကျစ်လှပနေကြသည်မှာ စိတ်ထဲတစ်မျိုးတမည်ဖြစ်ကရော့။
ဇာတ်လမ်းတစ်ခန်းနှစ်ခန်း အရောက် သူတို့တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်စပြုလာပြီ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အား...လက်တွေက အောက်ပိုင်းကို ရွေ့လာပြီး အားလံးကိုချွတ်ချလိုက်တာ....၀ိုး....ဒစ်တွေက ထွားလိုက်တာ ရွှေငှက်ပျောသီးတွေ ကြနေတာပဲ။ ပြီးနောက် ဇာတ်ဆောင်တစ်ယောက်က တခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ဒစ်ကို နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာဖြင့်ညှပ်ဆွဲရင်း လျှာနဲ့ကစားနေတာ ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားသည် သံချောင်းကဲ့သို့မာကြောလာပြီးလျှင် ၄င်းတို့ကဲ့သို့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စပ်ယှက်ချင်စိတ်များ တားမရဆီးမရဖြစ်နေလေတော့သည်။
အန်ကယ်ကျော်နဲ့ ဦးငယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြသလည်း။ ဒီဇာတ်ကားထဲကအတိုင်းများလား။ တွေးရင်းပြုရင်း မနေ့ညကအဖြစ်ကို ပြန်သတိရမိလာခြင်းနဲ့အတူ လက်ကလေးနဲ့ခပ်ဖွဖွကစားမိရပေါ့။ ထောင်ထောင်ထလာသော ညီဘွားကို ဘောင်းဘီတိုထဲ လက်လျှိုရင်း ဂုတ်ချိုးပေးနေရတာလေ။
'ကျွိ' အာ....အခန်းတံခါးရုတ်တရက် ပွင့်လာမှ တံခါးလော့ခ်မချမိတာကို သတိရမိခြင်းနှင့်အတူ အန်ကယ်ကျော်ဝင်လာတာကို မြင်လိုက်ရသည်။ ဇာတ်ကားကိုလည်း မပိတ်မိ ဘောင်းဘီထဲ လက်လျှိုထားတာကိုလည်း မရုပ်သိမ်းမိ သူ့ကိုကြောင်အမ်းအမ်းနှင့် သူခိုးလူမိ အကြည့်ဖြင့်ကြည့်မိရတော့သည်။
'ကောင်သူခိုးလေး....လူမိသွားပြီဟေ့...ဘာမှမလုပ်တတ်သလိုလိုနဲ့ အခန်းထဲလာ တီဗီကြည့်ရင်း ဂွင်းတိုင်နေတာပေါ့လေ။' အန်ကယ်ကျော်ရဲ့ ပွင့်လင်းသောအပြောကြောင့် ကျွန်တော့်မျက်နှာမထားတတ်အောင်ဖြစ်နေမိသည်။ 'ဟာဗျာ....အန်ကယ်ကျော်ကလည်း' 'ဒါမထူးဆန်းပါဘူးကွ...ယောက်ျားလေးဆိုတာ ဒီလိုမှပေါ့။ မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုးလိုနေရင်သာ အန်ကယ်မကြိုက်တာ။ ဟား...ဟား'
ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် ဦးငယ့်ပါတနာဆိုတာကိုလည်း သတိမရတော့ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းလည်းသိပ်မရှိတော့။ သွေးသား အဆူဆုံးအရွယ်နှင့် မဲမဲမြင်သမျှ ပြေးခွေ့ချင်နေသော နွားရိုင်းပျိုကဲ့သို့ပင်...။
'အန်ကယ်ကျော်...ကျွန်တော့်ကို ချစ်နည်းသင်ပေးမယ်ဆို' ကျွန်တော်မရဲတရဲ စလိုက်၏။ အန်ကယ်ကျော်က ဘာမှမပြောသေးဘဲ အဓိပ္ပာယ်ပါသော အကြည့်ဖြင့်ကြည့်ကာ အခန်းတံခါးလော့ခ်ကို သွားချလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ရင်တွေခုန်လာသည်မှာ တဒိတ်ဒိတ်နှင့်။ အသစ်အဆန်း စတင်ကြုံရတော့မည်မဟုတ်လား။
'ကောင်ကလေး...ခဏစောင့်ဦး အန်ကယ်ရေသွားချိုးလိုက်ဦးမယ်' စိတ်ထဲမရိုးမရွဖြစ်သွားရသည်။ ရေချိုးဦးမတဲ့လေ။ အ၀တ်တွေကို တစ်လွှာခြင်းချွတ် တဘက်တစ်ထည်ကို ခါးမှာပတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတာ။ တင်ပါးတွေက စွင့်ကားပြီး အိစက်နေတဲ့ပုံ။ 'ဂလု' တံတွေးများပင် မျိုချမိရတော့သည်ပေါ့။
ဇာတ်လမ်းဘက်ကို အာရုံစိုက်မိပြန်တော့ ဒီတစ်ခါ Falcon Studio ကထုတ်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်နေသည်။ သရုပ်ဆောင်တွေက ဘော်ဒီအတောင့်စားကြီးတွေ ခဏနေကကြည့်တဲ့ Bel Ami ကလိုမဟုတ်။ အား...ဒီတစ်ခါနောက်က အပေါက်ကို လျှာဖျား လေးနဲ့ကလိနေတာ။ ဘယ်လိုဖီးလ်ရှိလည်း မသိ အလျှက်ခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကတော့ တရှီး...ရှီးနဲ့ ကော့ကော့တက်နေတာ။
ရေချိုးခန်းတံခါးသံမကြားရဘဲ ခေါင်းလျှောက်ရည်နံ့ သင်းသင်းလေးရတော့မှ အန်ကယ်ကျော်ရောက်နေမှန်း သတိထားမိတော့သည်။ သူ့ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက သံချောင်းကို စိုက်ကြည့်နေတာမို့ မျက်နှာပူကနဲဖြစ်သွားရသည်။
သူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် ပတ်ထားသော ရေချိုးခန်းတဘက်သည် လျော့တိလျော့ရဲ။ ဘော်ဒီက တော်တော်ကိုလှသည်။ဇာတ်ကားထဲက သရုပ်ဆောင်တွေလောက်မထွားပေမဲ့ လို့ပြောရမည်လားမသိ တော်တော်ဖြစ်သည်ပဲ။ သူ့ပေါင်ကြားတွင် ကျွန်တော့်လိုပဲ ထောင်မတ်နေသော လှံတံတစ်ချောင်းက မတ်မတ်ထောင်လျှက်။
အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ရှိသော ကုတင်စောင်းတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်ပြီးလျှင် ကျွန်တော့်အား ဒူးထောက်ထိုင်ရန် ပါးစပ်ကမပြောဘဲ မျက်ရိပ်ပြလေသည်။ ကျွန်တော်သည် အိပ်မက်ထဲတွင် လမ်းလျှောက်နေရသူပမာ အန်ကယ်ကျော်ခိုင်းသမျှကို တသွေမတိမ်းလိုက်လုပ်နေမိ၏။ ကိုယ်တုံးလုံးဖြင့် ကုတင်စောင်းတွင် ထွားကျိုင်းသောပေါင်တံအစုံအား ကားကာ အမွှေးနုလိမ်ကောက်ကောက်ကလေးများ ဖုံးနေသော ရွှေငှက်ပျောသီးကို ရှေ့သို့အနည်းငယ်ကော့ကာ ထိုင်နေသော အန်ကယ်ကျော်ပေါင်ကြား၌ ကျွန်တော်ဝင်ထိုင်လိုက်မိ၏။ အန်ကယ့်ရွှေငှက်ပျောသီးသည် ကျွန်တော့် နှာခေါင်းဝနှင့် လက်မအနည်း ငယ်မျှသာ ကွာတော့သည်။ ညှီစို့စို့ မွှေးအီအီအနံ့သည် ကျွန်တော့်နှာခေါင်းဝသို့တိုးဝင်လာလေသည်။ အန်ကယ်သည် ကျွန်တော်၏ ခေါင်းကို ငြင်သာစွာ ကိုင်လျှက်ဆံပင်တို့အား ထိုးဖွပေးနေလေသည်။
၄င်းနောက် အန်ကယ်ကျော်က ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို သူ၏ရွှေငှက်ပျောသီးစီသို့ ဆွဲယူလိုက်လေသလား၊ ကျွန်တော်ကပဲ မျက်နှာအပ်လိုက်လေသလားမသိ ကျွန်တော်သတိထားမိချိန်တွင် အန်ကယ်ကျော်၏ ငှက်ပျောသီးအား လျှာဖျားလေးနဲ့ တို့ကာ တို့ကာ မျှော့သွေးစမ်းမိတော့သည်ပဲ။
တဖြည်းဖြည်းထောင်မတ်လာသော သူ့အချောင်းကို ဟိုကားတွေထဲကအတိုင်း စမ်းသပ်ပြုစုပေးတော့ အန်ကယ်ကျော့်ခမျာ တအင်းအင်းတအဲအဲဖြင့် အရသာအတွေ့ကြီးတွေ့နေလေတော့သည်။
အချိန်အနည်းငယ်ကြာတော့ အိပ်ယာပေါ်ကို အသာမှောက် တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို အသာဆွဲဖြဲရင်း အထာပေးပြန်တော့ ကျွန်တော်လည်း တတ်သိပညာမနေသာဆိုသလို လျှာဖျားလေးကို ထိုးထိုးကျွေးရင်း တစ်ခါတစ်ခါ ကလော်လိုက်ရင်း ပညာကုန်ပြတော့သည်။
'အား....အ...အ တော်တော့ အရမ်းကို မရိုးမရွဖြစ်နေပြီ ခုလောက် နှူးရ၊ စုပ်ရရင် တော်ရောပေါ့ကွာ...ဒီမှာ အန်ကန်ကျော် ခံချင်လှပြီ။'
အန်ကယ်ကျော့်စကားသံကြားမှ ကျွန်တော်သတိဝင်လာလေတော့၏။ ထိုစဉ်အခါက မိန်းမတစ်ယောက် ခံချင်လာအောင် နှူးနှပ်တတ်ပေမယ့် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ခံချင်လာအောင် မဆွတတ်သေးပေ။ ပန်းနုရောင် အပေါက်လေးက သန့်ရှင်းပြီး လျှက်ကောင်းကောင်းနှင့် လျှက်မိနေခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။
'အင်..ဒါဆိုရင် အန်ကယ်ကျော်ကို သားညီဘာထပ်လုပ်ပေးရမှာလဲ။'
'ဟာကွာ...သားညီကလည်း ခေတ်လူငယ်မဟုတ်တာကျနေတာပဲ မင်း..ဦးငယ် အန်ကယ့်ကို ညတိုင်းလိုးသလို လိုးပေးရမှာပေါ့ ...ရှင်းပြီလား။'
'လိုးပေးရမယ်' ကျွန်တော် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ဘယ်လို လိုးရမယ်မှန်း ကျွန်တော်မသိသေးပေ။ ဘယ်ထဲထိုးထည့်ရမည်မသိ။
'ဘယ်လို လိုးပေးရမှာလည်း ဘယ်ထဲထိုးထည့်ရမှာလဲ။' ကျွန်တော်အန်ကယ်ကျော်ကို ပြန်မေးလိုက်သောအခါ ကျွန်တော့်အား သနားစရာ သတ္တ၀ါကိုမြင်လိုက်ရသူတစ်ယောက်ပမာ 'အင်း....မင်းကလေးကလည်း ဒုက္ခ။ ကဲ..ကိုယ်တော်ချော ကျွန်တော်မျိုးကပဲ မင်းကလေးကို ပညာကုန်သင်ပေးပါတော့မယ် ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်အိပ်တော်မူပါ။'
အန်ကယ်ကျော်ပြောသလို ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်အိပ်ချလိုက်သောအခါ ခုတင်ခေါင်းရင်းခြင်းထဲမှ ကွန်ဒုံးအားယူလျှက် တစ်ခုဖောက်ကာ ကျွန်တော့်ဒစ်ပေါ် အသာစွပ်ချလိုက်သည်။ နောက်ပြီး ချောဆီများလူးပေးလိုက်ရာ ကျွန်တော့်ဒစ်သည် မိုးပေါ်သို့ထောင်မတ်လျှက် အကြောများပြိုင်းပြိုင်းထကာ နဂိုရှိရင်းစွဲထက် နှစ်ဆခန့်ပိုကြီးနေသလို ထင်လိုက်ရသည်။
အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော့်ပေါ်သို့တက်ကာ ကားယားခွလျှက် ထိုင်လိုက်သည်မှာ ကျွန်တော်၏ကိုယ်လုံးကိုအုပ်မိုးလျှက် လက်နှစ်ဘက်...ဒူးခေါင်းနှစ်ဘက်ကို အားပြုလျှက်ထိုင်ပြီး သူ့အပေါက်ကို ချောဆီနည်းနည်း ထပ်စွတ်ကာ ခပ်ဖြည်းဖြည်းထိုင်ချလိုက်ရာ ကျွန်တော်၏ဒစ်ထိပ်ဖျားသည် ကျင်ကနဲ ကျင်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားလေသည်။
'အား...အား ကျင်တယ် အန်ကယ်ရ'ဟု ကျွန်တော်ညည်းတွားမိ၏။
'ဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးဦးမှာ'ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် သူ၏လက်တွင်ကိုင်ထားသော ကျွန်တော့်ဒစ်အား သူ့အပေါက်ဝတွင် တေ့လျှက် ဆတ်ကနဲထိုင်ချလိုက်လေသည်။ လိင်ဆက်ဆံသည့်အတွေ့အကြုံသိပ်မရှိသော ကျွန်တော်သည် အန်ကယ်ကျော်ရဲ့ စီးပိုင်နေသော အပေါက်အတွင်းသို့ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းဝင်သွားရသော အရသာကိုအခုထိမမေ့နိုင်သေးပေ။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ၀င်ရောက်သွားသော ကျွန်တော့်လူပျိုအသစ်စက်စက် ဒစ်ကြီးသည် တစစနှင့် အရင်းထိတိုင် ၀င်ရောက်သွားလေတော့သည်။ ထိုအခါ အန်ကယ်ကျော်သည် လှုပ်ရှားမှုသိပ်မလုပ်တော့ဘဲ ဖင်ကိုနှဲ့၍သာ ကစားနေလေသည်။
ကျွန်တော့်မှာဖော်မပြနိုင်လောက်အောင် အရသာတွေ့နေလေတော့တာ....ကျွန်တော့်နည်းတူ အန်ကယ်ကျော်သည်လည်း မျက်စိစုံမှိတ်ကာ အဆက်မပြတ်နှဲ့ရင်း ပါးစပ်ကလည်း တဟင်းဟင်းတဟဲဟဲနှင့် အဆက်မပြတ်မြည်တမ်းနေတော့သည်။ သူ့ရင်အုပ်ထွားထွားပေါ်က နို့သီးခေါင်းလေးကို ကိုင်၍ ကိုင်၍ဆွပေးသောအခါဝယ် အန်ကယ်ကျော်သည် ဘယ်ညာရိမ်းထိုးလျှက် သူ့စိတ်ကြိုက် အားကုန်ဆောင့်လေတော့သည်။
အချက်နှစ်ဆယ်လောက်ဆောင့်ပြီးချိန်မတော့ ကျွန်တော်အားမရတော့ပါ။ သူ့လိုပဲ ကျွန်တော် အပေါ်မှနေ၍ဆောင့်ချင်လာမိသည်။ 'ကျွန်တော်လည်း ဆောင့်ဦးမယ်ဗျာ....' ကျွန်တော်အားမလိုအားမရပြောလိုက်မိရသည်။
အန်ကယ်ကျော်ကလည်း အားကျမခံ'ဒီကလည်း အောက်ကနေ အားရပါးရ ခံချင်နေတာ'လို့ပြောရင်း ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် ကျွန်တော့်ပေါ် ကားယားခွထိုင်၍ ဆောင့်ပေးနေရာမှ ဆင်းပြီးနောက် ကုတင်စောင်းတွင် လေးဘက်ထောက်ကာ သူ့တင်ပါးအစုံကို ကော့ပြီးလျှင် ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကို လက်ပြန်ကိုင်၍ အပေါက်ဝကိုတေ့ပြီး 'သားညီ....အန်ကယ့်ကိုအားမနာနဲ့နော်..အားကုန်သာဆောင့်ချက်ပစ်လိုက် နာနာလေးသာဆောင့်ချပစ်လိုက်..'
ထိုစဉ်အခါက ကျွန်တော်သည် ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သည့်အပြင် အားအင်အပြည့်ဝဆုံးအချိန်လည်း ဖြစ်၏။ ဖင်ကိုလည်း ချဖူးစအချိန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အသက်ကိုဝအောင်ရှူကာ ရှိသမျှအားကိုစုစည်းလျှက်တပ်ပေးထားသော အပေါက်ဝအတွင်းသို့ အားကုန်ဆောင့်ချလိုက်လေ တော့သည်။ 'ရှီး....အားလားလား ရှီး....ဟင်းဟင်း ကောင်းလိုက်တာ သားညီရယ် အန်ကယ်ကျော်က အဲဒီလိုမျိုး ခံချင်နေတာ မင့် ဦးငယ်က ငြင်ငြင်သာသာနဲ့ အချိန်အကြာကြီးဆွဲနေတာ ဖင်ပူတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ မင်းလိုမျိုး အားနဲ့ မာန်နဲ့မှကြိုက်တာ။ အရှိန်ကိုရောမေလျှော့လိုက်နဲ့နော်။....အင့်..အင့် ဆောင့်ဆောင့်' အန်ကယ်ကျော်သည် အံကြိတ်လျှက် နောက်သို့ပြန်ဆောင့်ကာ စည်းချက်ညီညီ အလိုးခံလေသည်။
ခုတင်ထက်တွင် ကျွန်တော်သည် ကိုင်စရာမရှိသဖြင့် သူ့ကိုအားကုန်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာသည် ယိုင်၍ယိုင်၍ သွားလေသည်။ ဒါကိုသိသော အန်ကယ်ကျော်က 'သားညီ ယိုင်မသွားအောင် အန်ကယ့်ဆံပင်တွေကို နောက်ကနေ စုဆွဲထားလိုက် ဒါမှမြင်းစီးသလိုမျိုး ဟန်ချက်မပျက်မှာ။' သူ၏စိတ်သဘောထားကို ရှင်းရှင်းပြောပြလာတော့ ကျွန်တော်လည်း အားမနာတော့ပါ။ နောက်မှနေ၍ မြင်းဇက်ကြိုးကို စုပ်ကိုင်သကဲ့သို့ လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်လိုက်ပြီး ဇာတ်ကနဲဆောင့်ဆွဲ၍ ကျွန်တော့်ငပဲအား အရှိန်ပြင်း ထန်စွာထိုးထည့် အချက်ပေါင်းများစွာပြင်းထန်စွာ ဆောင့်နေမိတော့သည်။ ကျန်လက်တစ်ဖက်ကလည်း အန်ကယ်ကျော့်တင်ပါးအစုံအား မြင်းနှင်တံနှု့်တို့သည့်အလား တဖြန်းဖြန်းနှင့် ရိုက်ပေးနေမိတော့သည်။ ဖြူဖွေးသော တင်ပါးအစုံမှာ ကျွန်တော်၏ လက်ငါးချောင်းရာများ သည် အထင်းသားဖြစ်နေလေတော့သည်။
ဒါကိုနာရကောင်းမှန်းမသိသော အန်ကယ်ကျော်သည် 'နာနာလေးရိုက်လိုက်စမ်းပါ သားညီရဲ့ ဆက်ဆောင့်လိုက်စမ်းပါဦး ဒီမှာ အန်ကယ်ကျော် ဖီးလ်အရမ်းမြင့်နေပြီ'
ကျွန်တော်အလွန်အံ့သြသွား၏။အန်ကယ်ကျော်သည် ကာမဆက်ဆံရာတွင် Pain Feeling ကိုအဓိကထား၏ နာကျင်မှုမှ ဖီလင်အပြည့်ယူသော လူမျိုးပင်ဖြစ်တော့သည်။
ကျွန်တော်သည် အန်ကယ်ကျော့်အပြောများကြောင့်ရော အပေးကောင်းမှုကြောင့်ရော ညှတာမှုကင်းမဲ့စွာ ဆောင့်ချက်ကို အရှိန်မြှင့် ခါးကို စက်သေနတ်ပပစ်သလို အဆက်မပြတ် ဆောင့်မိလေတော့သည်။
သူကလည်း အားကျမခံ ကျွန်တော့်ဆောင့်ချက်တွေကိုခံယူရင်းလက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူ့ငပဲကိုဆော့ကစားနေတာကလည်း အရှိန်ပြင်း ပြင်းပေါ့။ 'အား...အား အ သားညီရယ်ကောင်းလိုက်တာ....ရှီး' လို့ပြောကာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားရင်း အိပ်ယာပေါ်ကို မှောက်လျက် အိပ်လိုက်လေတော့သည်။ သူ့ကိုယ်ပေါ်သို့ အလိုက်သင့်မှောက်ချလိုက်ပြီး နောက်မှနေ၍ လေးငါးဆယ်ချက်ခန့် ဆောင့်လိုက်သော အခါဝယ် ကျွန်တော့်ရွှေပြွန်မှ အရည်များသည် ရေပြွတ်နှင့်ပန်းသည့်အလား ပန်းထုတ်မိတော့သည်။ အတန်ကြာစိမ်ထားရင်း ဖင်မှ ချွတ်လိုက်ကာ ကွန်ဒုံးအားလည်း အမှိုက်ခြင်းထဲ အသာထည့်လိုက်ရတော့သည်။
အဲဒီညနေခင်းတစ်ခင်းလုံး နှစ်ဦးသားတက်ညီလက်ညီ ပြိုင်ပွဲဝင်လိုက်တာ မောပန်းပြီး အိပ်ပျော်သွားကြရော။ အိပ်ယာကနိုးလာတော့ ညနေစောင်းနေပြီ။ အန်ကယ်ကျော်နဲ့အတူ ရေမိုးချိုးပြီး ကျွန်တော့်အခန်းဘက် ခပ်သွက်သွက်ပြန်လာကာ အ၀တ်အစားလဲရတော့ သည်။ ဦးငယ်ပြန်လာတော့မည် မဟုတ်လား။
နောက်နေ့များမှာတော့ ကျောင်းတက်လိုက်၊ အလုပ်သွားလိုက်၊ သွားစရာမရှိရင် အိမ်ကိုအချိန်မှန်ပြန်ဖြင့် ပုံမှန်လည်ပတ်ဖြစ်သည်ပဲ။ အခုတော့ ကျွန်တော်သိပြီ ယောက်ျားလေးချင်းလည်း ချစ်လို့ရသည်ဆိုခြင်းကို။
မနက်ခင်းတိုင်း ထမင်းစားပွဲမှာ သုံးယောက်သား ထမင်းအတူစားတိုင်း ဦးငယ်က ကျွန်တော့်ကိုဂရုစိုက်သလို အန်ကယ်ကျော်ကလည်း မလစ်ဟင်းစေရ။
ကဲ..... ဘယ်လိုပါလိမ့် ကျွန်တော့်ဘ၀ဟာ ပျော်စရာများကောင်းရော့သလား...မုန်းစရာများလား။
Posted by Alex Aung at 6:06 PM No comments:
အောင်အောင်သည် အခန်းထဲသို့အရောက်တွင် အင်္ကျီများ၊ ကျောင်းစိမ်းလုံချည်များ၊ အတွင်းခံများပါမကျန် အားလုံးကို ချွတ်ပစ်လိုကသည်။ တနေကုန်ကျောင်းတွင် ပင်ပမ်းလာသမျှ ရေချိုးလိုက်မှသာ လန်းဆန်းသွားပေရော့မည်။ သူသည် အိပ်ခန်းနှင့် တွဲလျက်ရှိသော ရေချိုးခန်းအတွင်းသို့ ဝင်လိုက်ရာ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်တွင်တွင်တွေ့ရသော သူ၏ခန္ဓာကိုယ်အား ကျေနပ်စွာ ကြည့်လိုက်မိသည်။ မနှစ်လောက်ကမှ စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာသော သူ၏ရင်အုပ်များ၊ လက်မောင်းအိုးများ၊ ကြွက်သားများ၊ ပြီးတော့ ကလေးဘဝတုန်းကနှင့်မတူ ပြောင်းလဲမှု့များစွာဖြင့် ပိုမိုသိသိသာသာ ကြီးထွားလာသော လီးကြီး။ နို့နှစ်ရောင်ကဲ့သို့ ဖြူနှစ်နေသော ဆီးခုံပေါ်တွင် မဲနက်သန်စွမ်းးစွာ ပေါက်နေသော လမွေးများသည် ကောက်ကွေးလျက်ရှိသည်။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနှင့်ပင် သဘောကျ ကျေနပ်မိသည်။
ရေချိုးဆပ်ပြာဗူးလွတ်ကျမှပင် သတိပြန်ဝင်လာသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဖီလင်တက်နေ၍ မဖြစ်တော့ပါ။ မကြာမီ သူ့အားဂိုက်လုပ်ပေးမည့် ဆရာသစ်ရောက်လာတော့မည်။ မကြာမီ သူ့အားဂိုက်လုပ်ပေးမည့် ဆရာသစ်ရောက်လာတော့မည်။ ယခု Scholarship ရသဖြင့် လန်ဒန်သို့ မမဖြူထွက်သွားရာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သော အောင်အောင်တစ်ယောက် အခက်တွေ့တော့သည်။ မေမေသည် အမေတစ်ခုသားတစ်ခု ဘဝတွင် အောင်အောင်လိုအပ်သည်မှန်သမျှ (ဖေဖေ နှင့် အစ်ကိုတစ်ယောက်မှလွဲလျှင်) လိုလေသေးမရှိအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်သည်ဖြစ်ရာ ဂိုက်ဆရာတစ်ယောက်ကို ချက်ချင်းရှာပေးသည်။ မမဖြူနှင့်ကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက မောင်နှမလိုနေလာသည်မို့ ကိစ္စမရှိ။
ဂိုက်ဆရာမရှာပေးလျှင် အောင်အောင်စိတ်ကစားမည်ဆိုး၍ ယောကျားင်္ဆရာကို တမင်ရှာပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မိခင်တစ်ယောက်၏ အတ္တမို့ အောင်အောင်နားလည်ပါသည်။ မေမေ့အမှားမှာ ရုပ်ရည်ချောမောသော၊ ဆွဲဆောင်မှု့ရှိသော ဆရာငယ်ငယ်လေးအား ရှာပေးမိခြင်းဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးများကို သူစိတ်မဝင်စားတတ်တာ မေမေမသိပါ။ ဒီ့အတွက်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပင် အံ့သြမိသည်။ အတန်းထဲမှ စန္ဒာစိုးအား ယောကျာင်္းလေးများ စိတ်ဝင်စားကြသည်။ အောင်အောင်ကတော့ ဘယ်လိုမှ ခံစား၍မရပါ။ စန္ဒာစိုးလှတာကိုတော့ လက်ခံပါသည်။ သို့သော် စိတ်ဝင်စား၍တော့ မရပါ။ တခါတုန်းကလည်း ဖြိုးမောင်မောင် အပြာပုံများပါသော စာအုပ်တစ်အုပ် ယူလာသည်။ အောင်အောင်သည် အပြာပုံများ အပြာကားများကို တခါမျှမကြည့် ဖူးသည်ဖြစ်ရာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် လုယူကြည့်ရှု့မိသည်။ သို့သော် မိန်းကလေးများ၏ ကိုယ်တုံးလုံးပုံများသာ ဖြစ်နေ၍ စိတ်ညစ်ခဲ့ရဖူးသည်။
ဆရာသည် သူ့ထက် ၅နှစ်သာ ပိုကြီး၍ အသက် ၂၁နှစ်သာရှိသေးသည်။ ဆရာ၏အသားအရေသည် အောင်အောင့်ကဲ့သို့ ဖျြူနှစ်မနေသော်လည်း အတော်အတန်အသားလတ်၍ ကြည်လင်နေသည်၊ ယောကျာင်္းပီသစွာချောမောသော ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်ပြီး နီထွေးနေသော နှုတ်ခမ်းပါးများမှာ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ တစ်ပတ်မျှသာ သင်ကြားရသေးသော ဆရာသစ်လေးအား ခိုင်မြဲစွာ သံယောဇဉ် ငြိတွယ်နေမိသည်။ ဆရာလာမည့် အချိန်အား စောင့်မျှော်နေမိသည်။
ဆရာရောက်လာလျှင်လည်း ညှို့ဓါတ်ပြင်းထန်သော ဆရာ့မျက်နှာအား ငေးကြည့်နေမိသည်။ ပုဆိုးကြားကွဲကြောင်းမှ ဖောင်းဖောင်းလုံးလုံးလေးဖြစ်နေသော ဆရာ့ငပဲအား ခိုးခိုးကြည့်ပြီးရင်ခုန်မိသည်။ Bio ပုံများဆွဲသောအခါ အောင်အောင်လက်အား အပေါ်မှထပ်ကိုင်၍ ဆွဲနည်းမှန်ကန်အောင် သင်ပေးခြင်းကို သာယာနေမိသည်။
" ဒေါက်.....ဒေါက်.....ဒေါက် "
တံခါးခေါက်သံကြားမှပင် သတိဝင်လာသည်။ ဆရာရောက်လာပြီထင်သည်။
"ဝင်ခဲ့ပါဆရာ...Lock ချမထားဘူး....ကျွန်တော်ရေချိုးနေလို့ "
အမြန်လက်စသက်ပြီး အပြင်ထွက်မည်အပြုတွင် ဒုက္ခတရပေတော့သည်။ ရေလည်းစရာ အဝတ်မယူခဲ့မိ။ ဆရာ့ကိုယူခိုင်း၍လည်း မဖြစ်ပြန်။ သူ၏ဗီဒိုထဲတွင် ချောမောလှပသော ယောင်္ကျားလေးမော်ဒယ်များ၏ underwear photo များရှိနေသည်။ လီးပေါ်သော အပြည့်ပုံများဟုတ်ပေမယ့် များပြားလှသော ယောင်္ကျားလေး ကိုယ်လုံးချွတ်ပုံများကို ဆရာတွေ့လျှင် အောင်အောင့်အား အထင်သေးသွားနိုင်သည်။ ယောင်္ကျာချင်းပဲမို့ မတတ်သာသည့်အဆုံး လက်နစ်ဘက်ကို ရှေ့သို့ အုပ်၍ ထွက်လာခဲ့ရသည်။ ဗီဒိုထဲမှ အင်္ကျီများအထုတ်တွင် သူ၏ခန၏ ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းသည် ဗလာကျင်းလျှက်ရှိသည်။
မသိမသာ ဆရာ့ကို ခိုးကြည့်မိလျှင် ဆရာသည် နုပျိုဝင်းမွတ် စွင့်ကားလုံးဝန်းနေသည့် ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းအား စိုက်ကြည့်နေသည်။ အောင်အောင်သည် ရှက်ရှက်နှင့်ပင် တွေ့ရာ ဘောင်းဘီတိုတစ်ထည်နှင့် ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကို ဆွဲယူလိုက်မိသည်။ ထိုစဉ်သူ၏ ပုခုံးနှစ်ဘက်ဆီမှ နုးညံ့စွာ ဆုပ်ကိုင်သော အထိတွေ့ကို ခံစားလိုက်ရသည်။
သူမှင်တက်အံ့သြမိနေစဉ်မှာပင် နွေးထွေးစိုစွတ်သော ဆရာ့၏ နှုတ်ခမ်းလွှာတို့သည် သူ၏လည်တိုင်ဆီသို့ ကျဆင်းလာသည်။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရပါလျှင် သူတိတ်တဆိတ် ရင်ခုန်ရသော ရုပ်ရည်ချောမောသည့် ယောင်္ကျားတစ်ဦး၏ အထိအတွေ့အပေါ် ငြင်းဆနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါ။ သူ၏ရင်အစုံတို့သည် တဒိန်းဒိန်းခုန်လျှက်ရှိသည်။ တစ်ပတ်မျှသာ သင်ကြားခဲ့သော ဆရာသစ်လေးသည် သူ့အားဤသို့ ပြုမူမည်ဟု မမျှော်လင့်ရဲခဲ့ပါ။ ဆရာသည် သူ့အား ကုတင်ပေါ်သို့ ညင်သာစွာ တွန်းလှဲလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းအစုံတို့ဖြင့် သူ၏နို့အား မထိတထိကိုက်လိုက် လျှာဖြင့်လျှက်လိုက်ဖြင့် ကလိနေသည်။ ဆရာသည် အတွေ့အကြုံရှိပုံရကာ ပါးနပ်ကျွမ်းကျင်သလောက် အောင်အောင်ခမျာ တဟင်းဟင်းငြီးလျှက် ထွန့်ထွန့်လူးနေတော့သည်။ နို့နှစ်လုံးကြားရှိ အချိုင့်အားလျှာဖြင့် စုပ်ယူသည်။ ထို့နောက် အောက်တည့်တည့်သို့ နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဆွဲစုပ်၍ ဆင်းလာရာ သူ၏ဗိုက်သားပြင်သည် ပင်လယ်ရေလှိုင်းပမာ တွန့လိမ်နေတော့သည်။ လမွေများအားလည်း ပြင်းထန်စွာ နမ်းရှု့ရာ လီးထိပ်မှ တဆစ်ဆစ် ဆာလောင်မှု့ကို ခံစားရသည်။ ဆရာသည် လီးကိုကျော်၍ သူ၏စအိုအပေါက်အား လျှာဖြင်ကလိတော့သည်။
ဆရာသည် လျှာဖြင့် အတန်ကြာ ကလိနေပြီးမှ လည်ကတုံးအင်္ကျီနှင့် ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုပါ ချွတ်ချလိုက်သော အခါ ဒစ်ကြီးလန်၍ အကြောများအပြိုင်းပြိုင်းထနေသော လီးကြီးကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သူ၏လီးထက် နှစ်ဆမျှကြီးပြီး သူ့ဖင်အားလိုးရန် အသင့်ဖြစ်၍ မာတောင့်နေသော ဆရာ့လီးကြီးအား ထိတ်လန့်စွဖြင့် ကြည်လိုက်မိသည်။
သူဆရာ့အား တွန်းဖယ်ပြီး ပြောလိုက်သည်။ “ အောင်အောင်ကလဲ လိမ္မာပါတယ်ကွာ....မနာပါဘူး...ဆရာချော့ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်းမှာပေ့ါ”
ဆရာသည် နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့၍ kiss ဆွဲပြီးချော့ပြောသောအခါ အချော့ကြိုက်သော အောင်အောင်တစ်ယောက် ဆက်လက်ငြင်းဆန်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ချေ။
ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော လီးကြီးအား ခေါင်းလိမ်းဆီသုတ်၍ နုညံ့သေးငယ်ကျဉ်းမြောင်းသော အောင်အောင်အပေါက်ထဲ ထည့်လိုးရန် ကြိုးစားနေသည်။ အောင်အောင်၏ ခြေအစုံတို့အား မိုးပေါ်သို့ ပင့်မြှောက်ပြီး ကွဲဟသွားသော ဖင်ကြားအပေါက်ဝသို့ လီးဒစ်အား အသာချော့၍ ထည့်လိုက်သည်။ ဝမ်းချုပ်သော အခါခံစားရသကဲ့သို့ စတင်ခံစားလိုက်ရသသည်။ လီးကြီးသည် တဆတဆတိုးဝင်လာပြီး နာကျင်မှု့အား စတင်ခံစားရသည်။ ဆရာသည် အောင်အောင်၏ နာကျင်မှု့ကို နားလည်ဟန်ရှိပြီး ချော့မော့၍ လီးအား အဆုံးထိ လိုးနေတော့သည်။ အစပိုင်းတွင်နာကျင်သယောင်ရှိသော်လည်း ခေါင်းလိမ်းဆီ၏အစွမ်းကြောင့်လား၊ ဆရာ့၏ကျွမ်းကျင်မှု့ကြောင့်လားမသိပါ လီးကြီးတစ်ခုံလုံးဝင်သွားသောအခါ ပြည့်တင်းတင်းကျပ်မှု့နှင့်အတူ ထူးခြားကောင်းမွန်သော ခံစားမှု့ကို ခံစားရသည်။ ခံစားမှု့မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်နှင့်အမျှ ဆရာအားလွတ်ထွက်သွားမည်ကို စိုးရွံသည့်အလား ပိုမိုးတင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားမိသည်။
ဆရာသည် အောင်အောင်ကောင်းမှန်းသိ၍ နဖူးတွင်ချွေးများရွဲ၍ မျက်နှာနီမြန်းကာ နထင်ကြောများထောင်နေသည် အထိ အစွမ်းကုန် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ထိုး၍ထိုး၍ လိုးနေတော့သည်။
“အောင်အောင် ညီလေး...ကောင်းလား....နာသေးလားဟင်... ”
အောင်အောင်သည် အားကိုးချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင်တုတ်ခိုင်သော ဆရာ့လက်မောင်းအားဆုပ်ကိုင်၍ အလိုးခံနေမိသည်။
ဆရာသည် အောင်အောင့်ဖင်ထဲရှိ ဘာမှန်းမသိသော ခိုးလိုးခုလု အရာတစ်ခုအား ချိန်၍လိုးနေပြီး အောင်အောင့်တွင် အောင့်တောင့်တောင့် ခံစားမှု့များကို ခံစားနေရပြီး ဆရာသည်လည်း လီးဒစ်ထိပ်မှ ထူးခြားသော ခံစားမှု့ကို ခံစားနေရသည်။
အောင်အောင့်ထံမှသာ မက ဆရာ့ထံမှပါ ငြီးသံများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိပြီး နှစ်ဦးသား လောကစည်းစိမ်ကို ခံစားနေကြသည်။ အချက်ပေါင်း မရေတွက်နိုင်လောက်အောင် လိုးပြီးနောက် ဆရာ့၏ ဖြူဖွေးချွဲပြစ်သော လရည်တို့သည် အောင်အောင့်စအိုအတွင်းသို့ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။ ဆရာသည် လရည်များပေကျံနေသော လီးကို ဖင်အတွင်းမှ ဆွဲထုတ်ပြီး ရေချိုးခန်းအတွင်းသို့ ဝင်သွားတော့သည်။ အောင်အောင်လည်း စိတ်မသန့်လှ၍ ရေချိုးခန်းအတွင်းသို့ လိုက်လာမိသည်။ ဆရာသည် အသန့်ကြိုက်သူတစ်ဦးဖြစ်ဟန်တူကာ လီးအားဆပ်ပြာဖြင့် ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဆေးကြောနေသည်။ သူလည်း အိမ်သာမှ ရေပန်းဖြင့် စအိုအား ဆေးကြောလိုက်ရာ စအိုတဝိုက် စပ်ဖျဉ်းကျိမ်းစက်သော ခံစားမှု့ကို ခံစားရပြီး ငိုချင်စိတ်ပင်ပေါက်လာတော့သည်။ ဆရာသည် အောင်အောင့်အား ကြင်နာစွာဖြင့် အိပ်ယာပေါ်သို့ တွဲခေါ်လာသည်။
“ဆောရီးပါ ကလေးရယ်....ဆရာနဲနဲကြမ်းသွားလို့ ကွဲသွားတယ်ထင်တယ်...စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ...”
ကြည်နူးစိတ်များကြောင့် အောင်အောင် အသက်ရှူရန်ပင်မေ့ရော့သွားသည်။ အဝတ်မဲ့သော ယောင်္ကျားပျိုနှစ်ဦးတို့သည် အိပ်ယာထက်တွင် အချိန်အတန်ကြာ long kissing ဆွဲနေကြသည်။ “ဆရာ့ကိုချစ်လားလို့ရော မမေးတော့ဘူးလား”
အောင်အောင်ထိတ်လန့်သွားမိသည်။ မိမိသဘောကျစွဲလမ်းနေသည်ကို ဆရသိသည်ဆိုပါလား.... “ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲဟင်” ပြုံးလိုက်လျှင် ပိုကြည့်ကောင်းသောဆရာ ပြုံးနေပါသည်။ အောင်အောင်သဘောကြနှစ်သက်စွာကြည့်နေမိစဉ် “ကလေးက ဆရာ့ပုဆိုး ပေါင်ကြားထဲကိုခဏခဏ ခိုးခိုးကြည့်တာကိုး။ ပြီးတော့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ကလေးတို့အရွယ်မျက်လုံးလေးတွေက ဖတ်ရလွယ်တယ်လေ” “ဒါကြောင့်ပဲ ဆရာက ဒီနေ့အတင့်ရဲတယ်ဆိုပါတော့ ။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဆရာလူဆိုး”
ကလေးတစ်ယောက်သဖွယ်ပြောနေသော အောင်အောင့်ကို ဆရာမြတ်နိုးစွာဖြင့် နမ်းလိုက်မိသည်။ ထိုညက ဆရာသည် အချိန်အတန်ကြာ ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးတွင် ထွေးပွေ့ထား အချိန်အတန်ကြာ ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးတွင် ထွေးပွေ့ထားပြီး ည ၈နာရီထိုးမှ ပြန်သွားသည်။ မေမေကတော့ ဘာမှမသိရှာပဲ ဆရာ့အားကျေးဇူးတင်စကားပင် ဆိုလိုက်သေးသည်။ အောင်အောင်တစ်ယောက်သာ အိပ်ယာထကတွင် ခေါင်းအုံးပိုက်ပြီး ကြည်နှူးနေမိသည်။ သူသိပ်ချစ်ရသော၊ သူ့အားချစ်သော ဆရာသည်ညနေ ၆နာရီတိုင်းတွင် သူ၏အခန်းလေးအတွင်းသို့လာပေလိမ့်မည်။
ကာယ၊စိတ္တ နှစ်ဖြာသောသုခနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။
(ဖွင့်ဟဝန်ခံသော သူငယ်ချင်း အောင်မျိုးမင်းအား ဤဇာတ်လမ်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါသည်။)
စာကြွင်း ။ ။ http://lulinnpyo.webs.com/index.htm မှရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Alex Aung at 4:00 PM No comments:
ကျွန်တော့်နာမည် စစ်အောင် ပါ။ နာမည် က ယောကျာ်း ဆန်ပေမယ့် နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံ က မိန်းမ အနည်းငယ်ဆန်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်မှာ ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့နာမည်က ဖိုးတေ ။ သူက ရန်ကုန်မှာနေတယ်။ ကျွန်တော် နေတာ တောင်ကြီး မှာ ။ ဖိုးတေ တို့ငယ်ငယ်တုန်း ကတောင်ကြီးမှာ အခြေချခဲ့တယ်။ သူ တောင်ကြီးက နေပြောင်းသွားတာ ဖိုးတေ ၁၂နှစ် လောက်ကထင်တာပဲ။ ဖိုးတေ ရဲ့ အမေ နဲ့ အဖေ က အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကွာရှင်းပြတ်စဲကြတယ်။ အဲ့ဒီ့ ကစပြီး ဖိုးတေ ကို သူ့အဖေက ခေါ်ပြီး ထွက်သွားလိုက်တာ အခု ကျွန်တော်နဲ့ ဖိုးတေ ပြန်ဆုံတဲ့အထိ ဆိုပါတော့။
ပြန်တွေ့တာက ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာသင်တန်းကို ရန်ကုန်မှာ လာတတ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့တာဗျ။ ကျွန်တော် က Networking တတ်နေတာ ။ သူကတော့ Graphic ။ သူနဲ့ကျွန်တော် ပြန်တွေ့ပုံက Corner တစ်ခုမှာတိုက်ပြီး ပြန်တွေ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။
အဲ့ဒီလို တွေ့တဲ့ပုံစံက လွန်ခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုစာအုပ်တွေထဲမှာပဲရှိတယ်လေ။
ကျွန်တော်က သင်တန်းတစ်ခု ရဲ့ ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတုန်း ကျွန်တော် ထိုင်တဲ့ခုံ ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ဖိုးတေ ထိုင်ခဲ့တယ်လေ။ ကျွန်တော့်ကို ဒီကောင် ကြည့်နေတာကြာပြီ။ တစ်ရက်တည်းမက တော့ဘူး။ ကျွန်တော် နဲနဲတော့ ဖြုံသွားတယ်။ ကျွန်တော့်ပုံစံက နွဲ့တဲ့တဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောတာကြားဖူးတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်ဖာသာ
ကိုယ်မလုံဘူး။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့ တွေ့ဖူးတယ်လို့ ထင်သား။ ကြောက်စိတ်ရှိတဲ့ကျွန်တော် ကဘယ်လိုမှ သွားမပြောရဲဘူး။ ကျွန်တော် ကလူကသာ နွဲ့နေတာစိတ်က ယောကျာ်းစိတ်ဗျ။ ဒါကလည်း ကျွန်တော့်ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ်ထင်တာလည်းနေမှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဘဲချောချောလေးကို တွေ့ရင်တော့ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တတ်တာ ကျွန်တော်အကျင့်လေ။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ကောင်မလေးတွေကိုလည်းကြည့်ပါတယ်။ ကောင်လေးတွေကို ကြည့်တာ ကတေ့ာခြွင်းချက်ပေါ့။
ကျွန်တော် ရုပ်မဖြောင့်တာလည်းပါတယ်။ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် အစ်ကိုကြီးတွေကို တွေ့ရင်အားကျ အကြည့်နဲ့ ကြည့်ခဲ့ မိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖိုးတေကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲပြန်ကြည့်မိတယ်။ ကျွန်တော် ထိုင်နေတုန်း ကျွန်တော့် အတန်းဖော်တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်နာမည်ကို အားပြဲပြဲနဲ့လှမ်းခေါ်တယ်။ ကျွန်တော် ဖိုးတေကို ကြည့်နေလို့ လန့်သွားတယ်။
` ဟေ့ကောင် . . . စစ်အောင် ´
` ဟ . . . ဂေါ့လ် ´ ဒါက ကျွန်တော် အကျင့်ပါနေတဲ့ယောင်နည်းတစ်မျိုးပါ။ လန့်သွားတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ထွက်လာတတ်ပါတယ်
ဘာကြောင့် ထွက်လာလည်းမသိဘူးဗျ။ ငယ်ငယ်ကတည်းကပဲ။ အိုးမိုင်ဂေါ့လ် ဆိုပြီးယောင်တတ်တဲ့ အလယ်တန်းက ဆရာကို ကျွန်တော် လိုက်လိုက်နောက်လို့ရလာတဲ့အကျိုးပဲထင်တယ်။ ကျွန်တော် ဖိုးတေကို ကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာမှာ အပြုံးတွေဝေလို့။ မှိုရတဲ့မျက်မှာမျိုးဆိုတာ ဒါမျိုးကိုပြောတာထင်တယ်။ ကျွန်တော် တော့မတွေ့ဖူးဘူဗျ။ မှိုရတဲ့မျက်နှာ ကို တွေ့ဖူးတဲ့လူရှိရင်ပြောပြကြပါဗျာ။ ကျွန်တော် တစ်ခါလောက်တော့ တွေ့ချင်သေးတယ်။ ဖိုးတေက ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ခုံကို လာတယ်။
`တောင်ကြီးမှာ ငယ်ငယ်တုန်းက နေဖူးလား ´
` ကျွန်တော် ကတောင်ကြီးက လာတာပါ´ မပြောမဆို ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို ကိုင်ပြီး ဆွဲမလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အားရပါးရ ဖက်ထားတော့တာပဲ။ ကျွန်တော် ဘာပြောရမှန်းကိုမသိဘူး။
` ဟေ့ကောင် . . . ရေစစ် . . . ငါ... ငတေ လေကွာ´ ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်။ ကျွန်တော် ဖိုးတေကို ပြန်ပြီး ဖက်ထားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ရေစစ် လို့ငယ်သူငယ်ချင်းတွေက ခေါ်တတ်ပါသည်။
` ငတေ . . . ´ ကျွန်တော် တို့ဖက်ထားတာ လိုတာထက်ပိုကြာသွားတယ်ထင်တယ်။ ဖိုးတေ က လက်တွေကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး
` ရေစစ် . . . ဘယ်တုန်းက ရောက်နေတာလဲ။ ပြောင်းလာတာကြာပြီလား။´
` အေးကွ. . . ၃ လ ၄ လ လောက်တော့ရှိတော့မယ်။...ငါ့သူငယ်ချင်းက ချောလာတယ်။ မှတ်တောင်မမှတ်မိဘူး´
`အေးပေါ့ကွာ. . . မင်း က ငါမင်းကို ခင်သလောက်မှမခင်တာ . . . ငါက မင်းမျက်နှာကို ၀က်ဝံကုတ်သွားတောင်မှတ်မိတယ်´ ခွေးစားသွားတယ်ဆိုလည်းစားသွားတယ်ပေါ့။ ဘာလဲဟ . . . ၀က်ဝံ ကုတ်သွားတယ်။ ရီရတယ်။
`မဟုတ်ဘူးကွ။ ကွန်ပျူတာသင်တန်းလာတက်တာ . . . ´
`လှည်းတန်းကအဆောင်တစ်ခုမှာနေတယ်´ ငတေ က ပိုခန့်ညားလာတယ်။အရင်လို ပိန်ခြောက်ခြောက်မဟုတ်တော့။ အရပ်လည်းမြင့်လာတယ်။ ကျွန်တော့်ထက် ၄ လက်မလောက်ပိုမြင့်မယ်ထင်တယ်။
` အဆောင်မှာနေတာဘယ်ကောင်းမလဲ ... ငါနဲ့လာနေ... ငါရယ် င့ါအဖေရယ် နှစ်ယောက်တည်း။ တစ်ပတ်တစ်ခါမှာ အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက်က အိမ်သန့်ရှင်းရေးလာလုပ်ပေးတယ်။ ယောကျာ်းသားနှစ်ယောက်ဆိုတော့လည်း အိမ်ဖော်ခေါ်လို့မရဘူးလေ။ ´
` ရပါတယ် ငတေ ရာ. . . ငါအခု နေရတာအဆင်ပြေပါတယ် ´
`ပြေပြေမပြေပြေ ကွာ။ ငါလည်းတစ်ယောက်တည်းပျင်းတယ်။ မင်းလာတော့ စကားတွေပြောလို့ရတာပေါ့။´
`အေးပါ . . . နောက်မှပြောကြတာပေါ့။´ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော် ငတေနဲ့ လိုက်နေချင်တယ်။ အဆောင်နေရတာ ဘာပဲပြောပြောသိပ်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ စရိုက်မတူတဲ့လူတွေ စုနေတော့လည်း ပြဿနာတော့ရှိတာပဲ။
` နောက်မှ မရဘူး . . . ဒီနေ့တစ်ခါတည်းပြောင်းလာနေ . . . အဖေ ကိုဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။ မင်းကို လည်းခင်နေတာပဲဟာ´
ငတေ အဖေ ကခင်ဖို့ကောင်းတယ်။ သဘောလည်းကောင်းတယ်။ ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော် နောက်နေ့မှာ ငတေ တို့အိမ်ကိုပြောင်းဖြစ်သွားတယ်။
ငတေတို့အိမ်က ရန်ကုန် တိုက်ခန်းတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အကျယ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ အခန်းငယ် နှစ်ခန်းတော့ရှိတယ်။ ငတေ့ အတွက် တစ်ခန်းရယ် သူ့အဖေ အတွက် တစ်ခန်းရယ်။ ငတေ့ အခန်းလေးက အရမ်းတော့မကျဉ်းဘူး။ ကုတင်နိမ့်နိမ့်လေး တစ်လုံးရယ်၊ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးရယ်၊ ဂစ်တာ တစ်လုံးရယ်။ ငတေ က ကျွန်တော့်ကို သူ့ကုတင်မှာ အိပ်ခိုင်းတယ်။ သူက ကုတင်ဘေးမှာ ဖျာခင်းပြီးအိပ်မယ်တဲ့။ ကျွန်တော် လက်မခံပါဘူး။ ကျွန်တော် က ဖျာမှာပဲအိပ်မယ်
လို့အတင်းပြောယူရတယ်။ ညနေရောက်တော့ ငတေ့အဖေ အလုပ်ကပြန်လာတယ်။ ငတေ့ အဖေက ကိုယ်ပိုင် ၀က်ရှော့ထောင်ထားတယ်။ ကားအင်ဂျင်တွေ ကို အဓိက ပြင်တယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါတစ်ခါဝင်လုပ်တယ်။ ငတေ့ အဖေ ကို ကျွန်တော် က အန်ကယ်လို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ပြောင်းလာမယ်ဆိုတာသိပြီးသားမို့ ၀မ်းသာအားရ ကြိုဆိုတယ်။
` သား . . . ရေစစ်လိုအပ်တာတွေကို လုပ်ပေးပြီးသွားပြီလား ´
` ပြီးပြီ အဖေ . . . ရေစစ်က အရမ်းအားနာနေတယ်။ သူလာနေတော့ ကျွန်တော် တို့အလုပ်ရှုပ်တယ်တဲ့လေ ´ ရေစစ်က သူ့အဖေနဲ့မတူဘူး။
အန်ကယ် က ရေစစ်လောက် ရုပ်မဖြောင့်ဘူး။ အသားက ညိုတယ်။ အရပ်က ရေစစ်ထက်တောင် နဲနဲမြင့်သေးတယ်။ လက်ဖျံတွေမှာလည်း အကြောတွေက ထောင်လို့။
Gym မှာ အမြဲတမ်းကစားထားတဲ့ပုံစံလို ခန္ဓာကိုယ်က တောင့်တောင့်တင်းတင်း။ ရင်အုပ်ကားကား နဲ့ ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ထားတာ အင်မတန်ကြည့်ကောင်းတယ်။ အသက်က ကျွန်တော့် အဖေထက်ငယ်ပုံရတယ်။ ၄၅ နှစ်ပတ်ဝန်း ကျင်လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ မုတ်ဆိတ်မွေး ပါးသိုင်းမွေးတွေက သူ့ရုပ်ကိုပိုပြီးယောကျာ်း ပီသစေတယ်။
ကျွန်တော် အန်ကယ့်ကို မင်သက်စွာကြည့်မိတယ်။ လိင်စွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ပဲ။
` ရေစစ် ... မင်းကဘာအားနာစရာလိုလို့လဲ . . . ဦးနဲ့ မင်းအဖေကလည်း သူငယ်ချင်းတွေပဲဟာ လိုတာရှိရင်ပြော ... ရေစစ် မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဆိုရင် ဦးကို ပြော ... ဟုတ်ပြီလား။ ´ အန်ကယ်က သဘောကောင်းတဲ့သူ ဆိုတာ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ကတည်းကသိသည်။ ငတေ အိမ်မှာ သွားကစားရင် ငတေနဲ့အတူ အရုပ်တွေဝယ်ပေးသည်။
` ဟုတ်ကဲ့ . . . ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အန်ကယ်´
` မင်းတို့နှစ်ယောက်စကားပြေကြအုံး ဦးရေမိုးချိုးလိုက်အုံးမယ် ´ ရေချိုးမယ်ဆိုရင်လည်းရေချိုးတယ်ပေါ့။ ဘာလဲ ရေ မိုး ချိုး လိုက်အုံးမယ်။
` ဟုတ်ကဲ့ ´
` ရေစစ် မင်းအိမ်မှာ ခဏစောင့်နေ ... ငါ ညစာ အတွက်ဟင်းသွားဝယ်လိုက်အုံးမယ်။ မင်း ဘာဟင်းနဲ့စားမလဲ ´
` ငါပါလိုက်ခဲ့မယ်လေ။ ဒီနေ့အတွက်ညစာကို ငါဝယ်ကျွေးမယ် ´
` နေပါ... ငါဝယ်ခဲ့မယ်။ မင်းအခုပဲရောက်တယ်။ နားအုံးပေါ့ ...ကဲ ဘာနဲ့စားမလည်းတာပြော ´
` မင်းတို့စားတဲ့ဟင်းပဲစားမယ်။ ငါ့အတွက်ထွေထွေထူးထူးမလိုပါဘူး။ ငါ ဘာနဲ့မဆို စားတတ်ပါတယ်ကွ´
`ဒါဆို လည်း ငါကြည့်ဝယ်ခဲ့မယ်။ အိမ်မှာပဲစောင့်နေတော့´ ကျွန်တော် ငတေ ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်မိတယ်။
`ငတေ ... ခဏ´
`ဘာလုပ်မလို့လဲ´ ကျွန်တော် မပြောမဆို ငတေကို သိုင်းဖက်ထားလိုက်တယ်။
` ရေစစ် ... ဘာဖြစ်တာလဲ´ ငတေက ကျွန်တော့်ကို အလိုက်သင့်ပြန်ဖက်ထားတယ်။
` ကျေးဇူးတင်တယ် သူငယ်ချင်းရာ´
` ငါလခွီးပဲ ... ငါကဘာများဖြစ်တာလဲလို့... ကဲ အိမ်မှာပဲစောင့်နေ ... ပြန်လာရင်ထမင်းစားကြတာပေါ့´
`အင်း . . . ´ ငတေ က ထိုကဲ့သို့ချစ်ဖို့ကောင်းသည်။ ကျွန်တော် ဧည့်ခန်းထဲမှာထိုင်နေရင်း မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်ကောက်ဖတ်နေလိုက်တယ်။
၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်နေတုန်း ... ကျွန်တော် ခေါ်သံကိုကြားနေတယ်။
`သား ... အဖေ့ အိမ်နေရင်းပုဆိုးယူပေးပါအုံး။ အဖေ့ကုတင်ခြေရင်းမှာတင်ထားတယ်။´ အန်ကယ်ရေချိုးခန်းထဲကအော်ခေါ်တယ်။ ငတေကလည်းထွက်သွားပြီ။ကျွန်တော်ကပဲ
` အန်ကယ်... ဖိုးတေ ... ထမင်းဟင်းသွားဝယ်တယ်။ ကျွန်တော်ယူခဲ့ပေးရမလား´
`အေး...ဦးက အရမ်းမေ့တတ်တယ်ကွ။ ဦးကုတင်ခြေရင်းမှာ ခရမ်းရောင်အကွက်စိတ်စိတ်လေး´
`ဟုတ်ကဲ့ အန်ကယ်။´ အန်ကယ့်အခန်းတံခါးက ဖွင့်ထားတော့ ကျွန်တော် အလွယ်တကူဝင်သွားတယ်။ ခရမ်းရောင်ပုဆိုးလေးက ကုတင်
ခြေရင်မှာ တင်ထားတယ်။ အန်ကယ် က တစ်ယောက်တည်းအိပ်တာတာပြေတယ်။ ကုတင်က နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်။ အန်ကယ့်အခန်းက ပိုကျယ်တယ်။ ကျွန်တော်ရေချိုးခန်းတံခါးကို ခေါက်လိုက်တယ်။
`အန်ကယ် . . . ပုဆိုးက ဒီမှာ . . .´ ကျွန်တော်လက်ကို တံခါးဝမှာပေးထားပြီးမျက်နှာကို အပြင်ကို လှည့်ထားတယ်။ ယောကျာ်းချင်းပဲဆိုပေမယ့် လေးစားရမယ်လေ။ အန်ကယ်က တံခါးကို ဟရုံတင်မဟပဲနဲ့ အကုန်ဖွင့်လိုက်တယ်။
` ကျေးဇူးပဲ ရေစစ်ရေ.. အန်ကယ်က အရမ်းမေ့တတ်တယ်။ ´ ကျွန်တော်က စကားပြောရာကို လှန်းကြည့်လိုက်တော့ အန်ကယ်က မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ခေါင်းကိုသုတ်နေတယ်။ ကျွန်တော့်လက်ထဲက ပုဆိုးကို အခုထိမယူသေးဘူး။ ကျွန်တော့် ကို အန်ကယ်က မကြည့်ဘူး။ ဒါကြောင့် စပ်စုတဲ့အနေနဲ့အန်ကယ့် အောက်ပိုင်းက ပစ္စည်းကို ကြည့်လိုက်တယ်။ အန်ကယ့် လီးက ပျော့နေတာတောင် ၃ လက်မ ခွဲလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ လုံးပတ်က ခပ်တုတ်တုတ်ပဲ။
ကျွန်တော် လန့်သွားတယ်။ Porn Movie တွေမှာသာ ဘိုတွေရဲ့လီးကို တွေ့ဖူးပေမယ့်အပြင်မှာ ကျွန်တော့်လီးက လွဲပြီးမတွေ့ဖူးဘူး။ ကျွန်တော် သိမ်ငယ်သွားတယ်။ကျွန်တော့်လီးဘာလို့သေးနေတာလဲ။ အပြည့်အ၀ ထနေတဲ့အချိန် တောင် ၅လက်မ ကျော်ကျော်လေးပဲရှိတယ်။ ကျွန်တော် ကြည့်ကောင်းတုန်းကြည့်နေမိတယ်။
ပုဆိုးလှမ်းတောင်းနေတဲ့အန်ကယ့်လက်ကိုတောင် ကျွန်တော် မမြင်ဘူး။ အန်ကယ် ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေတာ ကြာသွားပြီထင်တယ်။
` ရေစစ်... သား...´
` ဟုတ်... အ..န်...ကယ်... ပုဆိုးဒီမှာ . . .´ ကျွန်တော် လူမိသွားတဲ့သူခိုးလို ကြောက်သွားမိတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ရှက်လည်းရှက်တယ်။ ကျွန်တော် ခပ်သုတ်သုတ် အပြင်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ အန်ကယ် ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုထင်သွားမလဲ။ မသိ။ ကျွန်တော်ခုန က ဖတ်လက်စ မဂ္ဂဇင်းကိုပြန်ဖတ်နေလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ တဒုန်းဒုန်းနဲ့။ ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး။ စာကိုဖတ်နေပေမယ့် အန်ကယ့်လီးကြီးက တဖွားဖွားပေါ်လာတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်းအန်ကယ့် လီးကြီးတဒုတ်ဒုတ်နဲ့ထလာတာကို ကြည့်ချင်နေမိတယ်။ ကျွန်တော် ယောကျာ်းတွေကို စိတ်ဝင်စားနေပြီလား။ မမြင်ဖူးတဲ့အရာကို ဗြုန်းခနဲ မြင်လိုက်ရတော့ စိတ်လှုပ်ရှားသွားတာနေမှာပါလို့ ကိုယ့်ဖာသာပဲ ဖြေသိမ့်လိုက်ရတယ်။ အန်ကယ်အခန်းထဲကထွက်လာတော့ အင်္ကျီချက်ချင်းမ၀တ်သေးဘူး။ ပုဆိုးကိုလည်း
တိုတိုတုတ်တုတ်ပဲဝတ်ထားတယ်။ အန်ကယ်က ခုနက အကြောင်းဘာမှမပြောလို့တော်သေးတယ်။ ကျွန်တော် စာထဲမှာအာရုံစိုက်ထားလိုက်တယ်။ အန်ကယ် ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ထိုင်ခုံနောက်ကနေ မတ်တပ်ရပ်နေတယ်။
`ဟို... ကဗျာ ပါ အန်ကယ်´
` ဖိုးတေ မပြန်လာသေးဘူးလား။ ရေစစ်ကော ဗိုက်ဆာပြီလား။ ဒီကောင်က အပြင်တစ်ခါထွက်ရင် ဟိုလူတွေ့ဒီလူတွေ့နဲ့´
`ရပါတယ် အန်ကယ်.. ကျွန်တော်လည်းထမင်းမဆာသေးပါဘူး´ အန်ကယ် ကျွန်တော့်အရှေ့ခုံမှာလာထိုင်တယ်။ အန်ကယ်ဖြတ်လျောက်သွားတော့ ဆပ်ပြာနံ့က သင်းသင်းလေးရလိုက်တယ်။ရင်ထဲ တစ်မျိုးတမည်ဖြစ်သွားသလိုပါပဲ။
` ဒါနဲ့ ... ရေစစ် ... ဖိုးတေက ...သားအိပ်ဖို့ဘယ်လို စီစဉ်ထားလဲ´
` သူ့အခန်းထဲမှာပဲအိပ်လို့တော့ ဖိုးတေပြောတယ်´
အန်ကယ် က ညာဖက်ခြေထောက်ကို ဘယ်ဘက် ဒူးပေါ်တင်လိုက်တယ်။ ပုဆိုးက တိုတိုဝတ်ထားတော့ အောက်စ မသိမသာလွတ်သွားတာပေါ့။ ကျွန်တော် မသိမသာ ကြည့်လိုက်တော့ အန့်ကယ့်ရဲ့ ရွှေချောင်းလေး ရဲ့ထိပ်ဖူးလေးကို မြင်နေရတာ။
ကျွန်တော် မျက်လုံးကို လွဲလိုက်တယ်။ အန်ကယ် နောက်တစ်ခါမိသွားမှာကြောက်လို့။
` သူ့အခန်းက ကျဉ်းကျဥ်းလေးရယ်။ ဘယ်နေရာမှာသွားအိပ်မလဲ။ အန်ကယ် ကတစ်ယောက်တည်းပေမယ့် ကုတင်က နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်လေ... ရေစစ် အန်ကယ်နဲ့လာအိပ်လေ။ ဖိုးတေကိုတော့မအိပ်ခိုင်းရဲဘူး ။ သားက အအိပ်အရမ်း ကြမ်းတယ်။ တခေါက် သူ့အဒေါ်အငယ်လာလို့ ဦးအခန်းမှာလာအိပ်တာ ... ဦးကို ကုတင်ပေါ်က ကန်ချတယ်လေ... . အအိပ်က အရမ်းကြမ်းတယ်။ ရေစစ် ကောအအိပ်ကြမ်းလား . . .´
` ဟင်းအင်း . . .ကျွန်တော် အအိပ်မကြမ်းပါဘူး။ ´ ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုဖြေမိတာလဲ။ အမှန်ဆို...အအိပ်ကြမ်းတယ်လို့လိမ်ပြောလိုက်ရမှာ။လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ကုတင်မှာတူတူအိပ်ရင် ဘယ်လွပ်လပ် တော့မလဲ။
` ဒါဆို ဦးနဲ့လာအိပ်လေ။ ရေစစ်အခန်းမှာ အိပ်စရာနေရာလည်းမရှိဘူး။ ရေစစ် က သားကို သိပ်ချစ်တာကွ။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ ရေစစ်ကို အိပ်ခိုင်းတာပေါ့။´
` ရပါတယ် အန်ကယ်... ကျွန်တော် ရေစစ်အခန်းမှာပဲ အိပ်လိုက်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော် လာအိပ်ရင် အန်ကယ် အိပ်ရတာ စိတ်ကျဉ်းကျပ်နေ ပါ့မယ်´ အန်ကယ်ဘာလို့များငါ့ကို အတင်းသူ့အခန်းမှာအိပ်ခိုင်းနေရတာလဲ။ ငါကော ဘာလို့ဒီလိုမျိုး တွေးနေရတာလဲ။ ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို ဧည့်ဝတ်ကျေတာပဲလေ။
`အင်းလေ။ ဦး ကအတင်းမတိုက်တွန်းပါဘူး။ ဖိုးတေကိုပြောကြည့်အုံးပေါ့. . .ဟုတ်ပြီလား´
` ဟော ... သားတောင်ပြန်လာပြီ . . . လာ..ရေစစ် တစ်ခါတည်းစားကြတာပေါ့´
` ဟုတ်ကဲ့ အန်ကယ်´
ငတေက သူ့အဖေအခန်းမှာ ကျွန်တော် သွားအိပ်ဖို့သဘောမတူဘူး။ ကျွန်တော် အန်ကယ်မေးခိုင်းလို့ပြောတာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုတောင်စိတ်ဆိုးသေးတယ်။
` မင်းက ငါနဲ့မအိပ်ချင်ရအောင် ငါကမင်းကိုဘာလုပ်မှာမို့လို့လဲ´
` မဟုတ်ရပါဘူး ငတေ ရာ...မင်းအဖေ က ငါ့ကို ပြောလို့မေးကြည့်တာပါ။´ ငတေ စိတ်ဆိုးနေပုံကရယ်ရတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလှည့်မကြည့်ဘဲ စကားပြောနေတယ်။
`မင်းကုတင်ပေါ်မှာအိပ် . . . ငါ..ဖျာခင်းပြီးမင်းဘေးနားမှာအိပ်မယ်..´ ကျွန်တော့်ကို ကုတင်ပေါ်မှာပဲအတင်းအိပ်ခိုင်းပြန်တယ်။
`မရဘူး။ မင်းအိပ်ရာမှာမင်းအိပ်...ငါဖျာ နဲ့ပဲအိပ်မယ်... ´ ငတေ ဖျာကို ယူခင်းပြီး ကုတင်ဘေးမှာပက်လက်လှန်ပြီးလှဲလိုက်သည်။ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘဲ ငတေ ဘေးနားမှာအတင်းတိုးအိပ်လိုက်သည်။
` သွား . . . ဒါမင်းအိပ်ရာမဟုတ်ဘူး...လာမလုနဲ့။´
` ငတေ လိမ္မာပါတယ်...သွား .. .ကုတင်ပေါ်မှာသွားအိပ်ချည် ´ ကျွန်တော်အတင်း တိုးထုတ်လိုက်သည်။
` ကောင်းပြီလေ. . . မင်း . . .ငါပြောတဲ့စကားနားမထောင်ရင် ငါ့ဖားသားကြီးနဲ့သွားအိပ် ... ´ ငတေ တကယ်စိတ်ဆိုးနေပုံရသည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပါ။ ကျွန်တော်က ကုတင်မှာအိပ်ပြီး ငတေ့ကို အောက်မှာမအိပ်စေချင်ပါ။
` ဒါဆို ငါတို့ကုတင်ပေါ်မှာတူတူအိပ်မယ်လေ။´ ငတေ မျက်နှာတစ်ချက်ပြုံးသွားသည်။
` မင်း ငါ့ကို မကြောက်ဘူးလား´ ငတေ ခပ်ညစ်ညစ်လေး ထပ်ပြုံးသည်။
` ဟ . . . ဘာကြောက်ရမှာလဲ . . . ငါ ကမိန်းခလေးမှမဟုတ်တာ´
` ပြီးရော...ကုတင်ပေါ်မှာတူတူအိပ်မယ်။ မင်းပြီးမှကြောက်ပါပြီမလုပ်နဲ့´
` အေးပါကွာ . . . မောင့် သဘော... မောင့်သဘော . . .´ ငတေ အားရပါးရရီတယ်။ ကျွန်တော်အခုမှ လိုက်ရယ်နိုင်တော့တယ်။
` ခဏနေအုံး ... ငါ...အန်ကယ်ကို ပြောရအုံးမယ်. သူ့အခန်းထဲမှာမအိပ်တော့ဘူးလို့´
` အေး ပြီးရော´ ကျွန်တော် အခန်းပြင်ကိုထွက်သွားတော့ အန်ကယ် က TV ကြည့်နေတယ်။
` အန်ကယ်. . . ကျွန်တော် ဖိုးတေနဲ့ပဲတူတူအိပ်တော့မယ်´
` အဆင်ပြေပါ့မလား ရေစစ် . . . မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်အိပ်ကြမှာလဲ ... ကုတင်က တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်နဲ့´
` ဟို... ကုတင်ပေါ်မှာတူတူ အိပ်မှာပါ´
`ဟေ . . .´ အန်ကယ် မျက်နှာက ရယ်ချင်ပက်ကျိ ဖြစ်သွားတယ်။
`မင်း ဖိုးတေ ကုတင်ပေါ်က ကန်ချမှာမကြောက်ဖူးလား´ ကျွန်တော် အသံမထွက်ဘဲ ရယ်လိုက်သည်။
` ဟုတ်... ကြောက်တော့ကြောက်ပါတယ်။ ရပါတယ် ကိစ္စမရှိပါဘူး´
` အေးလေ . . . ဒီညတော့အိပ်ကြည့်ပေါ့ . . . အဆင်မပြေရင်ဦး အခန်းမှာလာအိပ် . . .ဟုတ်ပြီလား ..ကဲ..သွားအိပ်ရင်အိပ်တော့...´
ကျွန်တော် ငတေ့အခန်းထဲပြန်လာတော့ ငတေ ကုတင်ကို သေချာခင်းနေတယ်။
` လာ . . . ရေစစ် . . . ငါ ပြင်ပြီးသွားပြီ ..အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား´
` ဟဲ... အိပ်ဖို့ပါ´
`မင်း အပြင်ဘက်မှာအိပ် . .. ငါ နံရံနားကပ်အိပ်မယ်။ မင်း အအိပ်ကြမ်းတယ်လို့ အန်ကယ်ကပြောတယ်။ ငါ့ကို တော်ကြာ ကုတင်ပေါ်ကကန်ချနေအုံးမယ် ´
`အေးပါ ... မေ့သဘော မေ့သဘော ´
` ဟ . . . စော်ကားလိုက်ချည်လား . . . ငတေ မင်းတွေ့မယ်။´
` ကဲ . . .စကားမများနဲ့တော့ ကုတင်ပေါ်အရင်တက် ... ´ ကျွန်တော် ညအိပ်ဝတ်ဖို့ ဘောင်းဘီတိုလေးကို ထုတ်ဝတ်လိုက်သည်။ စွပ်ကျယ်ကတော့ ရေချိုးပြီးကတည်းက ၀တ်ထားသည့်အတိုင်းပင်။ ငတေ က ရေချိုးပြီးကတည်းက ဒူးပေါ်လောက်တာ ရှိတဲ့တိုနံ့နံ့ဘောင်းဘီတိုနှင့်။ အင်္ကျီကလက်တို ပါးပါးလေးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ကုတင် အတွင်းဘက် ကို ၀င်အိပ်သည်။ နံရံကို ကျောပေးပြီးအိပ်လိုက်သည်။ ငတေက
` ဟိုဘက်လှည့်အိပ် . . . ငါ့ဘက်မလှည့်နဲ့ ... တုတ်တုတ်ချင်း ဓားဓားချင်း ထိုးမိကုန်မယ်´
` ဘာလဲ မင်းက မျက်နှာချင်းဆိုင် အိပ်မလို့လား´
` မဟုတ်ပါဘူး . . . မင်း ဟိုဘက်လှည့်အိပ်လေ...ငါနံရံကို ကျောပေးပြီး အိပ်မယ်´
` အေးကွာ...ပြီးရော... ကတိတစ်ခုတော့ပေး ... မင်းငါ့ကို ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့။´
ဒီလိုနဲ့ငတေ ဟိုဘက်လှည်းပြီးအိပ်ပျော်သွားသည်။ တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်က ကျဉ်းပေမယ့် အခုလိုကျတော့ အိပ်လို့ဖြစ်သည်။ ငတေ ကို ငယ်ငယ်ကလေးကတည်းက ကျွန်တော် ခင်သည်။ ငတေ ကို ညီအစ်ကို ရင်းတစ်ယောက် လိုခင်သည်။ အစ်မ များသာ ရှိသော ကျွန်တော့်အတွက် ညီအစ်ကို တစ်ယောက်လို လိုချင်သည်။
` ငတေ . . . အိပ်ပြီလား´
` ငါ အခုလိုအိပ်တာ မင်းအတွက် အဆင်မပြေရင်ပြောနော်...ဘာမှ အားမနာနဲ့။ ´
` အေးပါ . . . မင်းသာ အဆင်မပြေရင်ငါ့ကိုပြော. . . ကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားပြီးနေ...ဟုတ်လား´
` ငတေ... ´
` ပြော . . ..´ ကျွန်တော် ငတေ့ကို သိုင်းဖက်လိုက်သည်။ ငတေ့ ခန္ဓာကိုယ်က ခလေးလေးတစ်ယောက် ရဲ့အနံ့ကိုရသည်။
` ဟေး. . . ရေစစ်... မင်းဒါဘာလုပ်တာလဲ . . .´
` ဘာလုပ်လို့လဲကွ . . . ငါမင်းကို ခင်လို့ဖက်ထားတာလေ´
` မလုပ်နဲ့လေ. . . ငါကြောက်တယ်။ ယောကျာ်းချင်းကြီးကို... ´
` ငါမင်းကို မထောက်ထားပါဘူး။ ငါဒီစိတ်တွေမရှိပါဘူး။ ငါ . . . straight ပါကွ။ မကြောက်ပါနဲ့´ ငတေ ကျွန်တော့် လက်တွေကိုဖယ်လိုက်ပြီးကျွန်တော့်ဖက်ကို လှည့်လိုက်သည်။
` ဒါဆို မင်းဟိုဖက်လှည့် . . . ငါလည်းမင်းလိုပဲ ခင်တယ်။ ငါ့ကို တဖန်ပြန်ခင်´
` အော်... မင်းက ငါ့ကို တဖန်ပြန်ခင်...တခါဖင်ခံ ခိုင်းတာပေါ့ ...ခွေးကောင်... ရမလားကွ´ ကျွန်တော့် ငတေ့ကို ကလိထိုးလိုက်သည်။
ငတေက ကလိ ထိုးခံရလျှင်အင်မတန်ကြောက်သည်။ သူ ကျွန်တော့်လက်တွေကို အတင်းဖယ်ပြီးကျွန်တော့်ကို အတင်းဖက်ထားသည်။ ငတေက ကျွန်တော့်ထက် အကောင်ကြီးသည်။ ကျွန်တော့်ကို မှောက်ရက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး အပေါ်က တက်ခွထားသည်။
` ရမလားကွရေစစ်...ငတေတဲ့ ...တတေထည်းရှိတယ်။ ကဲ..ဘာလုပ်လို့ရမလဲ´
` ငတေစုတ်...ငတေနာ...ငါ့ကို မဖိထားနဲ့ကွ...ဆင်းတော့´
` နေပါအုံးကွာ...ငါပြီးတော့မယ်...အား...ကောင်းလိုက်တာ´ ငတေ က သူ့ဖင်တွေကို မိန်းခလေးကို လိုးသလိုမျိုးရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်လိုက်သည်။ ဘောင်းဘီတိုလေးပဲဝတ်ထားတော့ ငတေ့ရဲ့ ငနဲက ကျွန်တော့် ဖင်ကြားထဲကို တည့်တည့် လာပွတ်နေသည်ကို ခံစားရသည်။ ကျွန်တော် အာခေါင်တွေခြောက်ကပ်လာသည်။ ငတေ တကယ့်ကို မိန်းမတစ်ယောက်ကို လိုးနေသည့်ပုံစံမျိုးလုပ်နေသည်။
` ဟေ့ကောင်.. ငတေ...မင်းတော်တော့နော်။ ငါစိတ်မဆိုးခင် ငါ့ပေါ်ကဆင်းတော့´
` မိန်းမ ကလည်း ... ခဏလေးနေပါအုံး . . . ငါကောင်းနေလို့ပါ´
` ငတေ... မင်းက ငါ့ကို ခေါ်အိပ်တာ ငါ့ဖင်ကိုချချင်လို့ပေါ့ . .. မင်း ယောကျာ်းကောစစ် သေးလား..ဟေ့ကောင်.. ဆင်းတော့...ငါနာလာပြီကွ
မင်းက အလေးကြီးပဲ´ ငတေ တကယ့်ကို မဆင်းသေး။ သူ့ ငနဲ က တဖြည်းဖြည်း မာလာသည်။ ပူနွေးနွေး အချောင်း တစ်ချောင်းနှင့်ပွတ်နေသလို ခံစားရသည်။
ကျွန်တော် တကယ့်ကို တုန်ယင်လာသည်။ အားတွေ မရှိသလိုလည်းခံစားရသည်။ ကျွန်တော် ပါးစပ်ကသာပြောနေသည်။ ကျွန်တော့် တကယ်တော့ ဒီလိုအရသာကိုမသိစိတ်က ခံစားချင်နေသည်။ ကျွန်တော်အားနဲ့ရုန်းလို့ရသည့်သားနဲ့မရုန်းပဲ ငြိမ်နေသည်။
` အေးကွ... မင်းဖင်က ကျစ်နေတာပဲ။ လိုးချင်စရာကြီး´
`ငတေ.. တော်တော့ကွာ။ မနောက်နဲ့တော့ ... မြင်လို့လည်းမကောင်းဘူး။ ´ ငတေ ဒီတစ်ခါ ပြောတော့ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပေါ်မှ တကယ်ဆင်းသွားသည်။ ကျွန်တော် မောပြီးကျန်ခဲ့သည်။ တစ်ခုခု ဟာ သွားလိုလဲဖြစ်မိသည်။
` ကျေးဇူးပဲ ရေစစ်... ဘယ်လိုလဲ ငါကျွေးတာကောင်းလား´
` ငတေ .. မင်းတကယ် ခြောက်သွားပြီလား ။ ဟေ့ကောင် .. ငါတကယ်မေးနေတာ´ ကျွန်တော်ကော ငတေပါ အခုပက်လက်လှန်အိပ်သည်။
` မဟုတ်ပါဘူးကွာ...ငါ မင်းကို မတွေ့တာကြာလို့နောက်နေတာ´
` မင်းနောက်တာကလည်း ကြောက်စရာကြီး. . . ငါတော့မယုံဘူး ... မင်း အခြောက်ကို ဖင်ချဖူးတယ်မလား´
` ဟဲ...ဟဲ... တစ်ခါတည်းပါ´ ကျွန်တော် လန့်သွားသည်။ ငတေ ဒီလို လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိသည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အခြောက်တွေကို မြင်ရင် အလွန်မုန်းသည်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်းအမြဲတန်းသတိပေးသည်။ ကျွန်တော် ကအစ်မတွေသာ များတော့ ကျွန်တော့်ကို မိန်းမလျာဖြစ်သွားမှာ ငတေ ကစိုးရိမ်သည်။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က သနပ်ခါးလိမ်းတာ ငတေ မြင်လျှင် ချက်ချင်းကို မျက်နှာသစ်ခိုင်းသည်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်းပြောသည်။ ကျွန်တော်အခြောက်ဖြစ်သွားလျှင် သူငယ်ချင်းလုံးဝ လုပ်မှာမဟုတ်ဟု အမြဲပြောတတ်သည်။ ကျွန်တော် သူပြောသလိုနေသည်။ ခက်တာက အခြောက်တွေကို အင်မတန်မှာရွံတဲ့ငတေ ... အခြောက်ဖင်ကို ချရတယ်လို့။
`မနောက်နဲ့ ကွ။ ငါ မယုံဘူး ´
`ငါမင်းကို မနောက်ဘူး ။´
` တကယ်...´ ကျွန်တော် ယုံကိုမယုံချင်ပါ။ ဒီကောင်နောက်နေတာပဲဖြစ်မှာပါ။
` ဒါဆို အစ အဆုံးပြောပြ..လံကြုတ် လုပ်ကြံတော့မပြောရဘူး´ ငတေ လေသံကတော့ အတည်ပုံစံပေါက်သည်။ ငတေ့မျက်နှာလိမ်လျှင် မသိသာတော်လည်း စကားပြောလျှင် အသံက လိမ်လို့မရပါ။ ရီချင်သလိုလို ...တုန်နေသလိုလို ဖြစ်တတ်သည်။
` တကယ်... အဲ့တုန်းက ငါမူးနေတာ ..။ ငါမှတ်မိတာက သင်္ကြန် အတက်နေ့ . . . ဖြစ်တာ ကအဲ့ဒီ့အခြောက် အိမ်မှာ..
ဘဲကြီးက ချမ်းသာတယ်။ ငါ အဲ့ဒီ လူကို ဖင်ခံမယ့်လူလို့လုံးဝမထင်ထားဘူး။ ဘော်ဒီက လည်း ခပ်တောင့်တောင့်ဘဲ။ ရုပ်ရည်ကလည်း မင်းသားတယောက်လိုပဲ။
ငါက မော်ဒယ် တစ်ယောက်တောင်ထင်တာ။ ငါ့သူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ ဘော်ဒါ..။ ဒီဘဲကြီးက တစ်ယောက်တည်း နေတာ။ အတတ်နေ့ ကားနဲ့လည်ပြီးအပြန်ငါတို့တွေ ဘီယာသွားသောက်ကြတယ်။ ငါ သောက်ကျင့်သိပ်မရှိတော့ မူးတယ်ကွ။ ငါ့အဖေသိမှာကြောက်လို့ သူငယ်ချင်းအိမ်ကဖုန်းဆက်ပြီး သူငယ်ချင်းအိမ်မှာအိပ်
မယ်လို့လိမ်ပြော။ တကယ်တမ်းကျတော့ အဲ့ဒီ့ ဘဲကြီးအိမ်မှာသွားအိပ်ဖြစ်တာ။ ´
`ဒါနဲ့ မင်းက ကျေးဇူးရှင်ကို ဖင်ချဖြစ်သွားတယ်ပေါ့´
` မဟုတ်ပါဘူးကွာ... အဲ့ဘဲကြီးက သူ့အိမ်ရောက်တာနဲ့ ရေချိုးခိုင်းပြီး သူ့အ၀တ်အစားတွေပေးဝတ်တယ်။ ပြီးတော့သူ့ကုတင်မှာအိပ်ခိုင်း တယ်။ ကုတင်က နှစ်ယောက်အိပ်။ ငါလည်းရိုးရိုးသားသားအိပ်ပါတယ်။ သူက သာရိုးရိုးသားသားမအိပ်တာ ´
` ဟုတ်လို့လား´ ကျွန်တော် ပြောပြီးထထိုင်လိုက်တယ်။ ငတေ့ ဘောင်းဘီကြားမှာ ငတေ့ညီလေးက ခေါင်းထောင်နေတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုပွတ်ထားတဲ့အရှိန်ကြောင့်လား။ ဒါမှမဟုတ် သူအခုပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာကြောင့်လား။
` ငါ အိပ်ပျော်ခါစပဲရှိအုံးမယ်ထင်တယ်။ ငါ့အသားကို တခုခု ထိနေတယ်ထင်လို့ငါမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တာ ... ဘဲကြီးရဲ့ ခေါင်းက ငါ့ပေါင်ကြားထဲမှာရောက်နေတယ်။ ငါ့ လီးကို စုပ်ပေးနေတာ ။ ငါ ကြောင်နေပြီး သူ့ခေါင်းကို တွန်းထုတ် လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ့မှာ သူက ငါ့ကို အတင်းဖက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ Gay တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ။ သူ့ကိုသနားဖို့ ... ငါ့ကို မြင်မြင်ခြင်း ကြိုက်တဲ့အကြောင်း။ စကားတွေအမျာကြီးပြောပြီးချုပ်တော့တာပဲ။ ငါက နဂိုတည်းကမှ အခြောက်ဆို
ရင် ရွံတဲ့ကောင်။ ငါ ထပြီးပြန်မယ်လို့လုပ်တော့ ငါ့ကို ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ . . .သူ့မှာ ငါ့လီးကို စုပ်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံရှိတယ် တဲ့။ ငါက မယုံဘူးပေါ့။ သူ ကင်မရာကို ယူပြီးထုတ်ပြတယ်။ ပုံထဲမှာ ငါ့မျက်နှာက ထင်းနေတာပဲ။ Vedio အပိုင်းလေးလဲ ရိုက်ထားသေးတယ်။ ငါသူ့ဆီကလုတယ်။ မရဘူးကွ။ သူငါ့ကို တောင်းပန်တယ်။
ငါသူ့ကို ဒီညလိုက်လျောရင် ငါ့ပုံတွေအကုန်ဖျက်ပေးပါ့မယ်တဲ့။ ငါလည်း ပထမ ဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့။ ယောကျာ်းလေးပဲ ။ နောက်ပြီး ငါက နိုင်ငံကျော်လည်းမဟုတ်ဘူး။
မိုးဟေကို လိုလည်း ကြည့်ချင်စရာမှမကောင်းတာ..။ ဒါပေမယ့် ...ငါပြန်စဉ်းစားတယ် ... တစ်အချက် . .. အဖေသိသွားရင် အသေသတ်မှာ။ မိန်းမနဲ့မရှုပ်ဘဲ အခြောက်တစ်ယောက်နဲ့ရှုပ်နေတယ်ဆိုတာသိရင်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်တစ်ချက် က ဒီပုံကို ငါချစ်နေတဲ့ ကောင်မလေးသိသွားရင်...သွားပြီ။ ငါအဲ့ဒါကို အကြောက်ဆုံးပဲ။
ဒါနဲ့...ငါလိုက်လျောခဲ့တယ်။´ ကျွန်တော် ထင်ထားတာမမှားပါဘူး။ ငတေ က ဒီလိုလူစားမဟုတ်ပါဘူးလို့။ ဒီကောင် ခြိမ်းခြောက်တာကို ခံလိုက်ရတာပါ။
`ဟေ့ကောင်...ငါ့အနားမကပ်နဲ့တော့ ..ငါကြောက်တယ် .. AIDS တွေဘာတွေရှိနေပြီလားတောင်မသိဘူး။´
` ငါလခွီးမှပဲ...ငါကွန်ဒုံးသုံးပါတယ်ကွ။ ဒီဘဲကြီးက ဖင်သိပ်ခံဖူးသေးပုံမရဘူး။ တော်တော်သွင်းယူရတယ်´
` ဒါကြောင့်မင်းက ဖင်ကို ကြိုက်နေတယ်ပေါ့´
` မဟုတ်ပါဘူးကွာ... ငါ ... မိန်းကလေးတွေကိုပဲကြိုက်တာပါ။ ဖင်ချမယ်ဆိုရင်တောင် မိန်းမဖင်ကိုပဲချမယ်´
` အေးပါ... ကဲအိပ်တော့။ ကောင်းကောင်းအိပ်..။ မအိပ်ရင် ငါ့ မင်းအဖေနဲ့သွားအိပ်မှာ´
` ချီးပဲ...ဘယ်သူအရင်စတာလဲ...ဟေ့ကောင်ရေစစ်....မင်းပဲ တစ်နေကုန်ငါ့ကိုလာလာဖက်နေပြီးတော့..သွား...ငါ့အဖေနဲ့သွားအိပ်...
အဖေ က...မိန်းမ ငတ်နေတာ . . . မင်းကိုဖင်ချလွတ်လိမ့်မယ်´
` ငတေ...လျှောက်မပြောနဲ့ . . . အန်ကယ် ကြားသွားရင်မကောင်းဘူးကွ ... တော်ပြီ..အိပ်တော့´
` ဟုတ်ကဲ့ပါ..ဟုတ်ကဲ့ပါ..´ ကျွန်တော် ငတေ့ကို ကျောပေးပြီးအိပ်လိုက်သည်။ ငတေလည်း ကျွန်တော့်ကို ကျောပေးပြီးအိပ်သည်။ သို့သော်နှစ်ယောက်စလုံးဖင်ချင်းပေါက်နေသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေဘာဖြစ်နေမှန်းမသိပါ။ ရင်တွေတုန်နေသည်။ အာခေါင်တွေလည်းခြောက်နေသည်။ ကျွန်တော် တကယ့်ကိုခြောက်နေပြီလား။ မသိပါ။ ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော် အိပ်ပျော်သွားတယ်။
ကျွန်တော် နိုးတော့ငတေ ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာမရှိတော့ဘူး။ ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီမှာ စီးကပ်နေတယ်။ အိပ်မက်မက်ပြီးလရည်တွေထွက်သွားပုံပဲ၊ ကျွန်တော် ပုဆိုးတစ်ထည်ယူပြီးလဲထားလိုက်တယ်။ အခန်းပြင်ထွက်လိုက်တော့ ငတေက ဧည့်ခန်းထဲက ထိုင်ခုံမှာ အိပ်နေတယ်။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၆ နာရီပဲရှိသေးသည်။ ကျွန်တော် လရည်စိုသွားတဲ့ ဘောင်းဘီကို ယူပြီးရေချိုးခန်းမှာ သွားလျှော်လိုက်သည်။ လျှောက်ပြီးထွက်လာမှငတေ့ကို နိုးပြီး သူ့အိပ်ရာမှာပြန်သွား
အိပ်ခိုင်းသည်။ ငတေ အိပ်ချင်မူးတူးနှင့်ထသွားသည်။ ငတေ ဘာကြောင့်ခုံပေါ်မှာလာအိပ်နေသလဲဆိုတာ သူနိုးလာမှမေးရ အုံးမည်။ ကျွန်တော် ပြန်အိပ်လို့မရတော့။
အခန်းထဲရောက်နေတဲ့သတင်းစာလိပ်လေးကို ဖြန့်ဖတ်နေလိုက်သည်။ အန်ကယ့်အခန်းတံခါးဖွင့်သံကြားရသည်။
` ရေစစ် ... အစောကြီးထ နေပြီလား...´
` ဟုတ်ကဲ့ အန်ကယ်... ကျွန်တော် ဒီအချိန်ဆိုရင် နိုးတတ်ပါတယ်။´ အန်ကယ့်ကိုသတိထားကြည့်မိတော့ ဆံပင်စုတ်ဖွားနှင့်။ မုတ်ဆိတ်မွှေးနှာခမ်းမွှေးတို့က ပိုပြီးမည်းနက်နေသည်။ ဖြစ်သလိုဝတ်ထားသောပုဆိုးအောက်မှာ ခပ်ဖောင်းဖောင်း ပုံစံ အန့်ကယ့် ပစ္စည်းကြီးကို သတိထားမိသည်။ ကျွန်တော်အန်ကယ်နဲ့တွေ့တိုင်း ဒါကိုပဲ မျက်စိကျ နေသည်။
` ဘာလဲကွ... ဖိုးတေ ညက မင်းကို ကန်ချလို့လား´
` မကန်ပါဘူး အန်ကယ်...ကျွန်တော်က အထဲမှာအိပ်တာပါ။ ခုနလေးတင်မှ ဖိုးတေကိုအခန်းထဲပြန်သွားအိပ်ခိုင်းရတယ်။ သူဒီခုံပေါ်မှာလာအိပ်နေတယ်လေ... ´ အန်ကယ် ပုဆိုးကိုပြင်ဝတ်လိုက်သည်။
` ဟုတ်လား....ကြည့်ရတာ ဒီကောင် ကုတင်ပေါ်က လိမ့်ကျတယ်ထင်တယ်။ ဦးပြောသားပဲ...အိပ်ရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့...ဒီည ဦးအခန်းထဲမှာလာအိပ်... ဖိုးတေကိုလည်း ဦး ပြောထား မယ်။...ရေစစ်ဘာမှ အားနာစရာမလိုဘူး။ ဦးကုတင်က အကျယ်ကြီး..။ ဦး ကုတင်ပေါ်ကပြုတ်ကျစရာ အကြောင်း
လည်းမရှိဘူးလေ။ ´ ကျွန်တော် ဘာကြောင့်ဦးနဲ့သွားအိပ်ဖို့ လက်ခံလိုက်မိမှန်းမသိပါ။
` ဟုတ်ကဲ့ အန်ကယ်... ကျွန်တော် က အန်ကယ်အိပ်ရတာ မလွပ်လပ်မှာကြောက်လို့ပါ´
` ဟေ... ဦးက ဘေးနားမှာလူရှိလည်းအိပ်တတ်ပါတယ်... ဘာလဲ မင်းက ဦး ကိုကြောက်လို့လား´ အန်ကယ်ဘာသဘောနဲ့ထိုမေးခွန်းကိုမေးမှန်းကျွန်တော် မသိပါ။
`အားနားစရာ ဘာလိုလို့လဲကွာ...မင်းတို့နဲ့ငါတို့က လူရင်းကြီးတွေပဲ။ တောင်ကြီးလာရင် ဦးလည်းမင်းအိမ် မှာလာနေမှာပေါ့ကွ..ဟုတ်ပလား´
`ဟုတ်ကဲ့...ကျွန်တော် ဒီည အန်ကယ့်အခန်းမှာအိပ်ပါ့မယ်။´
`ok ဦး မျက်နှာသွားသစ်လိုက်အုံးမယ်...တအောင့်လောက်မှ ဖိုးတေကို နှိုးပြီး မနက်စာသွားစားကြတာပေါ့´ မျက်နှာပဲသစ်တာလား။ သွားကောမတိုက်ဘူးလား။ လူတွေက မျက်နှာသစ်လိုက်မယ်ပဲပြောနေမှန်းမသိပါ။
` ဟုတ်ကဲ့ ဦး´ သူ့ကိုသူ တစ်ဦးထဲ ဦးနေသော ဖိုးတေအဖေကို ကျွန်တော် ဦး ဟုပဲခေါ်တော့မည်။ ဦး ထွက်လာ တော့ကျွန်တော့်ကို ဖိုးတေကိုသွားနှိုးခိုင်းသည်။ ကျွန်တော် ငတေ အခန်းထဲဝင်သွားတော့ ငတေက ပုဇွန်ကွေးကွေးပြီး အိပ်နေသည်။ နံရံဘက်ကို မျက်နှာပေးထားသည်။ ငတေ့ ဘောင်းဘီကတိုသောကြောင့် ကွေးကွေးလေး နေလိုက် သည့်အတွက် ငတေ့ ဖင်တစ်ဝက်လောက်ကျွတ်နေသည်။ ကျွန်တော် အကြံတစ်ခုရလိုက်သည်။ ငတေ့အနားကို ဖြေးဖြေးချင်းကပ်သွားပြီး တ၀က်နီးပါးကျွတ်နေသော ငတေ့ ဘောင်းဘီးကို ထပ်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေး ချွတ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ဖိထားတော့ တော်တော်နှင့်ချွတ်မရ။ ခုနထက်စာရင်တော်တော်တော့ကျွတ်သွားသည်။ ငတေ့ ရဲ့ ရွှေဥ နှစ်လုံးကို နဲနဲမြင်ရသည်။ ကျွန်တော်ဆက်မချွတ်ဘဲ စားပွဲပေါ်က ဘောပန်ကိုယူပြီး ငတေ့ ဖင်ကြားထဲ ထိုးထည့် လိုက်သည်။ စအိုထဲထိုးခြင်းမဟုတ်။ ဖင်ကြားထဲက ဖြည်းဖြည်းလေးထိုးထားလိုက်သည်။ ပြီးမှ ငတေ့နား နားကပ်ပြီး ခေါ်လိုက်သည်။
` ငတေ... အိပ်ပုတ်..ထတော့´
` အဖေ ကလည်း အစောကြီးရှိသေးတယ်။´ ငတေ လက်က ဘောပန်ကို စမ်းမိသွားသည်။ ဘောပန်ကို ယူပြီးကျွန်တော့်ဖက်လှည့်ကြည့်သည်။
` ခွေးကောင်... ရေစစ်... ငါ့ဖင်ကို ဘောပန်နဲ့လာထိုးတယ်...သွားပါပြီကွာ...ဘောပန်တော့ညစ်ပတ်ပါပြီ´
` ထတော့ ကွ...မင်းအဖေ breakfast စားဖို့စောင့်နေတယ်။ .. ´
` အေးပါကွာ... ရေစစ် မင်းနာမယ်... ငါက မင်းလို ဘောပန်နဲ့မထိုးဘူး ...ဟောဒါကြီးနဲ့ထိုးမှာ´ ငတေက ခါးကော့ပြသည်။ ဘောင်းဘီကြားထဲက ငတေ့ လီးကြီးက ခေါင်းထောင်နေသည်။ ဘောင်းဘီပေါက်ထွက် မတတ်ခေါင်းထောင်နေသည်။ ကျွန်တော် သူ့ လီးကို လက်နဲ့ဆွဲညစ်လိုက်သည်။ ငတေရုန်းသည်။
ကျွန်တော် တော်တော် နှင့်မလွတ်ပေး။
` ဟေ့ကောင်...နာတယ်ကွ... လွတ်... ´
` ဘာလို့လွတ်ရမှာလဲ . . . မင်းကို မှတ်လောက်အောင်ပညာပေးမှ´
`လွတ်ပါရေစစ်ရာ... လက်ရောင်လိုက်သွားပါအုံးမယ်...မင်းကိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်အေးဆေးပေးကိုင်မယ်။ ဒီလိုတော့ မညစ်ထားနဲ့ကွ´
` အစုတ်ပလုတ်...မင်းဟာကို ပဲငါကကိုင်ချင်လို့ကိုင်တယ်လို့မင်းထင်တယ်... ကဲဟာ´
ကျွန်တော် အားနဲ့ညှစ်လိုက်သည်။ ငတေ့ လီးက ကျွန်တော့်ထက်ကြီးသည်။ ပြောရမှာလည်းရှက်သည်။ တော်တော့်ကို ကြီးသည်။ လုံးပတ် ကတော်တော့်ကိုတုတ်သည်။ ကိုင်ရသူအဖို့ အားရစရာဖြစ်သည်။ရှည်လည်းရှည်သည်။ ခြောက်လက်မတော့ အသာလေးကျော်သည်။ ကျွန်တော် အားနဲ့ညှစ်လိုက်သော်လည်း တကယ်တန်း ငတေ မနာပါ။ ဒီကောင် ဟန်လုပ် နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်လွတ်ပေးလိုက်သည်။
` ငါ့ ညီလေး သနားပါတယ်။ မနက်စောစော လည်ပင်းလာညှစ်သူနဲ့တိုးနေတယ်။ ညီလေးဘာဖြစ်သွားလည်းမသိဘူး။´ ပြောပြောဆိုဆို ငတေက သူ့ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြီး ထောင်မတ်နေသောလီးကို လက်နဲ့ဂွင်းတိုက်သလိုလုပ်ပြသည်။ အရှက်မရှိတဲ့ကောင်။
` စောက်ရှက်လည်းမရှိဘူး... ´
` ဘာရှက်ရမှာလဲကွ...မင်းတောင် အရှက်မရှိငါ့ညီကို ကိုင်သေးတာပဲ..အခု ကိုင်ချင်သေးလား´ ခါးထပ်ကော့ပြသည်။ ငတေ့ လီးက နီညိုရောင်ထနေသည်။ အကြောတွေ ကလည်း တဒုတ်ဒုတ်နှင့်။ လီးက မိန်းကလေးတွေနှင့် အခြောက်တွေ စွဲမက်ချင်စရာကောင်းသည်။ ငတေ ဖင်လိုးခဲ့တဲ့အခြောက်တော့ ကံကောင်းသည်။ ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါတော့ မကိုင်တော့ပါ။
` တော်ပြီ... ငါမင်း နဲ့ မဆော့တော့ဘူး ...သွား ... မျက်နှာသွားသစ်...ငါ အ၀တ်အစားလဲလိုက်အုံးမယ်။´
` ကောင်းပါပြီတဲ့ခင်ဗျာ...ကျွန်တော်မျိုး မျက်နှာသစ်လိုက်ပါအုံးမယ်´ ငတေ ထွက်သွားတော့မှ ကျွန်တော် အ၀တ်အစားလဲလိုက်တယ်။ အပြင်ကိုထွက်လာတော့ ဦးက အ၀တ်အစားလဲပြီးနေပြီ။ ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်စောင့်နေတယ်။
` ရေစစ်...လာ...ထိုင်စောင့်အုံး...ဖိုးတေက တော်ရုံနဲ့ ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ မျက်နှာသစ်တာတောင် နာရီဝက်လောက်ကြာတယ်´
` ဟုတ်ကဲ့ ဦး ´
ကျွန်တော် တို့ဖိုးတေ ထွက်လာတော့ မုန့်သွားစားကြတယ်။ ဦးက သူ့အလုပ်သွားတယ်။ ဖိုးတေနဲ့ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာ သွားတယ်။ ကျွန်တော် လမ်းမှာ ဖိုးတေကို မေးတယ်။ ည ကဘာလို့ ထိုင်ခုံမှာသွားအိပ်တာလဲလို့။ သူပြောတော့ ကုတင်ပေါ်က လိမ့်ကျတာတဲ့။ ကျွန်တော် သူ့အဖေ ပြောတာကိုပြောပြတော့ဒီတစ်ခါ သဘောတူတယ်။ ငတေ ကြည့်ရတာ ည က ကောင်းကောင်းအိပ်လို့ မပျော်ဘူးထင်တယ်။ မျက်တွင်းတွေမဲ နေတယ်။ ကျွန်တော် ဒီည ငတေ့အဖေနဲ့ တစ်ကုတင်ထဲအိပ်ရမှာကို ကျွန်တော် တွေးပြီးရင်တွေခုန်နေတယ်။ ကျွန်တော်တကယ့်ကို မိန်းမစိတ် ဖြစ်နေပြီလား။ ကျွန်တော် ထိုကဲ့သို့အတွေ့အကြုံကိုခံစားကြည့်ချင်တယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိ။ ကျွန်တော် ကမ္ဘာကျော် ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေကိုသဘောကျတယ်။ Brad Pitt, Colin Farrel, Hugh Jackman, Keanu Reeves, Heath Ledger,Jake Gyllenhaal ...ပြောရင် ပြီးမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ သူတို့တွေလို ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းအပြင် စွဲဆောင်မှုက ကြောက်ခမန်းလိလိ။ ကျွန်တော်မြန်မာမင်းသားတွေထဲမှာဆိုရင် ဦးဇော်လင်းတို့လို ၀င်းဦးတို့လို လူကြီးတွေကိုသဘောကျတယ်။
သူတို့တွေက အသက်ကြီးပေမယ့် စွဲဆောင်မှုက အပြည့်။ ခက်တာက သူတို့တွေ လူ့ပြည်မှာမရှိတော့ဘူး။ ကျွန်တော် နှမြောမိတယ်။ မင်းသမီးတွေထဲမှာတော့ ကျွန်တော် ထွေထွေထူးထူးကြိုက်တယ်ဆိုတာသိပ်မရှိဘူး။ ကျွန်တော် ဘယ်အချိန်ကစပြီး ယောကျာ်းတွေကို စိတ်ဝင်စားမှန်းမသိ။ ကျွန်တော် လူကသာအနည်းငယ်နွဲနေပေမယ့် စိတ်က ယောကျာ်းစိတ်ဆိုတာကို ပါးစပ်က တစ်ဖွဖွပြောနေပေမယ့် တကယ်တမ်းကျွန်တော်ဟာ ၀ံပုလွေအရေခွံ ခြုံထားတဲ့ သိုးတစ်ကောင်ပါ။ ၀ံပုလွေတွေရဲ့ အစားခံရဖို့အတွက်မသိစိတ်က အမြဲတွေးနေတဲ့သိုးတစ်ကောင်ပေါ့။
ညက အိုမင်းရင့်ရော်လာသည်။ ထမင်းစားသောက်ပြီး ကျွန်တော် ငတေ အခန်းထဲမှာ ခဏနေပြီးစကားတွေပြောသည်။ ရောက်တတ်ရာရာစကားတွေပြောသည်။ ငတေ့ကို ကျွန်တော်ခင်သည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ထက်ပိုသည်။ ချစ်သည်ဟုပြောလို့ရပေမယ့် သူငယ်ချင်းချစ်လိုမျိုးရိုးရိုးသန့်သန့်ချစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ စကားတွေကောင်းနေတုန်း ဦးက တံခါးလာခေါက်သည်။ ငတေ တံခါးသွားဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
`ရေစစ်... မအိပ်သေးဘူးမလား...သားအိပ်ချင်ရင်..ဦး အခန်းထဲလာအိပ်လေ။ ဦး ဘေးမှာ ခေါင်းအုံးနဲ့စောင်တစ်ထည်ချထားတယ်´ ဦးက ကျွန်တော့်ကို အိပ်ဖို့စောင့်နေပုံရသည်။ ကျွန်တော်က
` ကျွန်တော်လည်းအခုပဲအိပ်တော့မှာဦး ... ငတေ...ငါသွားအိပ်တော့မယ်..မင်းလည်းအိပ်တော့..´
`ဟုတ်ကဲ့ပါ....ဟုတ်ကဲ့ပါ...ကျွန်တော် အိပ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ´ ငတေက အရွှန်းဖောက်သည်။
` နောက်မှာဆက်ပြောကြတာပေါ့ ဟုတ်လား´
`သွား... အသစ်တွေ့တော့ အဟောင်းမေ့ပြီပေါ့´ ကျွန်တော် ကြည့်လိုက်တော့ ဦးက သူ့အခန်းထဲရောက်သွားနှင့်ပြီ။ ငတေ ပြောတာကိုကြားသွားပုံမ ပေါ်။ ငတေ ပြောတာကြားသွားလျှင် မလွယ်။ ကျွန်တော် နေရထိုင်ရပိုခက်သွားမည်။
` အေးပါကွာ..ငါနောက်တာပါ..သွားအိပ်တော့ ´
` good night ´ ကျွန်တော် တံခါးဝရောက်တော့ ငတေက
` ဟေ့ ...နေအုံး...မင်း တခုကျန်ခဲ့ပြီ´
`ခွေးကောင်...မင်းကိုယ့်ကို သုံး...ငါမလိုဘူး ´ ကျွန်တော် ဆက်မပြောတော့ပဲထွက်လာခဲ့သည်။ အခန်းထဲဝင်သွားတော့ဦးက ပက်လက်လှန်ပြီးအိပ်နေ သည်။ ညအိပ်မီးမှိန်မှိန်လေးထွန်းထားသည်။ ကျွန်တော် ဦးဘေးနားမှာဖြေးဖြေးလေး ၀င်အိပ်သည်။ ကျွန်တော် ဦးဖက်ကို ကျောပေးပြီးအိပ်သည်။ ဦး အိပ်ပျော်နေပုံရသည်။ ကျွန်တော် ဘာကိုမှ မစဉ်းစားဘဲ အိပ်ပစ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော် စိတ်ထဲတွင်တော့ ဦး ကျွန်တော့်ကို ဖက်ပြီးအိပ်စေ ချင်သည်။ ကျွန်တော် ဦးကို ချစ်မိနေပြီလား။ အိပ်ပျော်နေတုန်း ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်ကို တစ်စုံတစ်ခုတင်ထား သလိုခံစားရသည်။ အိပ်မက် ဟုထင်ပေမယ့် တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်အနောက်ကနေ ပွတ်သပ်နေသည်။ ကျွန်တော် မျက်လုံးအသာဖွင့်ကြည့်သည်။
အိပ်မက် မဟုတ်တာသေချာသွားသည်။ ဦးက ကျွန်တော့် နောက်ဖက်နေသိုင်းဖက်ထားပြီး သူ့ခြေထောက်ကြီးများက ကျွန်တော့်ကို ခွထားသည်။ အခုမှ ကျွန်တော့် ဖင်ကြားထဲတွင်ပူနွေးနွေး အချောင်းတစ်ချောင်းထောက် ထားမှန်းခံစားရ သည်။ ကျွန်တော်ရင်တွေခုန်လာသည်။ ကျွန်တော် လိုချင်တာဒါပဲမဟုတ်လား။ ဦးက ဒီတိုင်းခွထားတာမဟုတ်။ ကျွန်တော့်ဖင်ကြားထဲကို သူ့လီးကြီးနဲ့ပွတ်နေသည်။ ဦးမအိပ်သေးဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် အိပ်မက်မက်နေတာလား။ ကျွန်တော် အသာ ငြိမ်နေလိုက်သည်။ ဦး ရဲ့အသက်ရှုသံတွေမြန်လာသလို ဦးရဲ့လီးကြီးကလဲ မာပြီး ကြီးလာသည်။ ကျွန်တော် အလိုက်သင့် ဖင်ကို ဦးဘက်ကို ပေးလိုက်သည်။ ဦး လက်တွေက ကျွန်တော့်ကို အတင်းဖက်ပြီး အသက်ရှုသံတွေပိုပြင်းလာသည်။ ဦး ဖင်ရဲ့စောင့်ချက်တွေက ပိုပိုပြင်းလာသည်။ နောက်...ဦး တစ်ခုခုကိုရေရွှတ် နေပုံရသည်။ ဟုတ်သည်။ နာမည်တစ်ခုကိုခေါ်နေသည်။ ကျွန်တော် သေချာနားထောင်လိုက်သည်။
`ခင်... ခင်... အား... ´ ဦးဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ကို ခေါ်နေသည်ပဲ။ ကျွန်တော် ထိုကဲ့သို့ဆက်နေလျှင်ကောင်းမလား။ ဦးကို နှိုးလိုက်ရင်ကောင်းမလား။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော် ဦးရဲ့ လီကြီးကိုလိုချင်နေမိသည်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ကျွန်တော် အခုမှ ကျွန်တော့်ဘ၀ကို ကျွန်တော် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရသည်။ ကျွန်တော်ဟာ ဂေးလ် တစ်ယောက်
ပဲ။ ဒီ့ထက် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောလျှင်...ဖင်ခံချင်တဲ့ အခြောက်၊ဂျီပုန်း၊ မိန်းမလျာ ၊ဂျော်လကီး .. . Queer, faggot, ဟူး ... ၊ ကျွန်တော် ဦးဘေးနားက ဖြေးဖြေးချင်းခွာလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဦးကို အလိုက်သင့် နှိုးလိုက်သည်။
` ဦး ... ဦး ... ဘာဖြစ်တာလဲ...နေမကောင်းလို့လား´ ဦးက မျက်လုံးဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာသည်။
` ဘာဖြစ်လို့လဲ ...ရေစစ်..´
` ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး. . . ဦး က အဖျားတတ်သလို စကားတွေ ကယောင်ချောက်ချားပြောနေလို့ပါ´ ကျွန်တော် ပြောချင်တာ တစ်ခု တစ်ကယ်တမ်းကျွန်တော် ပြော လိုက်တာကတစ်ခုဖြစ်နေသည်။ အမှန်ဆိုရင်...ဦးက ကျွန်တော့်ဖင်ကို ပွတ်နေလို့...ကျွန်တော်အိပ်လို့မရလို့ပါလို့ပြောရမှာ။ ဦး မျက်နှာပျက်သွားသည်။ ပြီးတော့
` ရေစစ်...sorry...ဦး ကအိပ်မက်မက် ရင်အဲ့ဒီလိုပဲ... ရေစစ် စိတ်မဆိုးဘူးမလား´ ဦးဘာကို ဆိုလိုနေမှန်းကျွန်တော်သိသည။်
` ရပါတယ် ဦး ။ ကျွန်တော် စိတ်မဆိုးပါဘူး။ ဦးကို ကျွန်တော် နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။´
`ကျေးဇူးပဲ သား ... ဒါနဲ့ ဖိုးတေကို သွားမပြောပြနဲ့အုံး´
` ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပြပါဘူး၊´ ကျွန်တော် ဦးကို ပြောချင်သည်။ ဦး ဆက်ပြီးပွတ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်... တကယ့်လက်တွေ့ လုပ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဆင်သင့်ပါပဲလို့ ပြောလိုက်ချင်သည်။ ကျွန်တော် ရင်တွေတအားခုန်နေသည်။
` ဦး တစ်ယောက်တည်းအိပ်ရင်တော့ ဒီလိုဖြစ်မဖြစ်မသိဘူးရေစစ်... ဦးက မင်းကို ပြောပြဖို့မေ့သွားတယ်။ တခေါက်က ဦး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လာအိပ်လည်းဦး အခုလိုမျိုးလုပ်မိတယ်။ သူငယ်ချင်း ဆိုတော့နားလည်ပေးတယ်လေ။ နောက်ပြီး ဦး ကအိပ်မက် မက်နေတာဆိုတော့ ဦးကို ခွင့်လွတ်ပေးတယ်။ ဒါတောင် မနက်ရောက်မှ ဦး သိရတာ...
ဦး အဲ့ဒီ့ကိစ္စကို မေ့နေလို့ပါ´
` ရပါတယ် ဦး... ကျွန်တော် စိတ်မဆိုးပါဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘာမှဖြစ်မသွားဘဲ၊ ကျွန်တော့်ကို ဘာမှအားနာစရာမလိုပါဘူး´
` ဦး ဒီလိုထပ်ဖြစ်ရင် ဦးကို နှိုးလိုက်နော် သား... အားမနာနဲ့... ဦး ကအိပ်မက်ထဲမှာ ဦး မိန်းမကို မက်နေလို့ကွ...ရှက်ဖို့တောင်ကောင်းတယ်´
` ဟုတ်ကဲ့ပါဦး... ´
` ကဲ...သား လည်းအိပ်တော့ ... ဘာမှစိတ်ထဲမထားနဲ့၊ ဟုတ်ပြီလား´
` ဟုတ်..´ ကျွန်တော် အရင်လိုပဲ ဦးဘက်ကို ကျောပေးပြီးအိပ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော် အာခေါင်တွေခြောက်လာသည်။ ရင်တွေ တုန်နေသလိုမျိုးဖြစ်နေသည်။
ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဆက်ပြီးအိပ်လို့ရမလဲ။ ကျွန်တော် နှိုးလိုက်မိတာမှားသွားပြီလား။ ကျွန်တော် ဒီလိုပဲ အလိုက်သင့် နေသင့်သည်။ ထားလိုက်ပါတော့။ ကျွန်တော် ဆက်မတွေးဘဲရင်ခုန်စွာနဲ့မရရအောင် ဆက်အိပ်လိုက်သည်။ မနက်မိုးလင်းခါနီးဖြစ်ပုံရသည်။ ကျွန်တော် နိုးတော့ ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ ဦးက အိပ်နေတုန်း။ ခြေရင်းနားက နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့၅ နာရီခွဲပဲရှိသေးသည်။ ကျွန်တော် ဦးကို ကြည့်လိုက်တော့ ပက်လက်လှန်အိပ်နေသည်။
ဦးပုဆိုးက ပေါင်ရင်းနားထိလိပ်ပြီး တက်နေသည်။ ဦး၏ တောင့်တင်းသော ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြားက ကျွန်တော် မြင်တွေ့ ချင်သော ရွေှ့လီးကြီးက ခေါင်းထောင်နေသည်။ ကျွန်တော် တော့်တော့ကို ဖြုံသွားသည်။ လီးကြီးက အနဲလေး ၈ လက်မလောက်ရှိမည်။ မိုးပေါ်ကို မတ်နေ သည်။ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်က ဖြေးဖြေးချင်းဆင်းလာလိုက်သည်။ ကုတင် ခြေရင်းနားသွားပြီး ပေါင်ရင်းနားလိပ်တက်နေသော ပုဆိုးကို လက်နှင့်အသာဟလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ရင်တွေ
တကယ့်ကို တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ခုန်နေသည်။ အားပါးပါး..။ အကြောတွေ တထောင်းထောင်းထနေသောရွှေလီးကြီး ကိုမြင်ရသည်။ ဦး ရဲ့အသားရောင်အတိုင်း ညိုပြီး လုံးပတ်ကလည်းတုတ်သေးသည်။ ကျွန်တော် ကိုင်ချင်စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားသည်။ ပုဆိုးကို အသာ ပြန်ချပြီး ကျွန်တော် ဦးဘေးနားမှာ ပြန်လှဲနေလိုက်သည်။ ဦး ရဲ့ဘက်ကို ကျွန်တော် ဖင်နှင့်တမင်တကာ တိုးလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီတိုကို ဖင်တ၀က်ရောက်သည်အထိ အသာလျှောထားလိုက်သည်။ ကျွန်တော် တိုးလိုက်တော့ ဦးက ကျွန်တော့်ကို ညက အတိုင်းသူ့ ပေါင်လုံးကြီးတွေကိုအားယူပြီး လာခွသည်။
ကျွန်တော် အမှန်ပင်ပျော်သွားသည်။ ဦးရဲ့ လီးကြီးက ဖင်ကြားတလျှောက် ထိပ်ဖူးကြီးက ထောက်ထားသည်။ ကျွန်တော် အလိုက်သင့် ဖင်ကို နောက်ကိုထပ်တိုးပေးလိုက်သည်။ တအောင့်လောက်ကြာတော့ ဦးရဲ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ကို ဖက်လိုက်သည်။ ခွထားသော ခြေထောက်တွေကို ပိုပို ပြီးခွထားလိုက်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ ဦးရဲ့လီးက ကျွန်တော့် ဖင်ကြားတလျှောက်အတိုင်း ထိမိနေသည်။ ဦး စတင်ပြီး ပွတ်တော့သည်။ ကျွန်တော် လည်းအလိုက်သင့် ဖင်ကို တိုးတိုးပေးလိုက်သည်။ မနက်မိုးလင်းခါနီးမက်တဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်ပုံရသည်။ ဦး ကဖင်တလှုပ်လှုပ်ဖြင့် ကျွန်တော့် ဖင်ကြားထဲကို သူ့လီးကြီးထည့်ပြီးပွတ်နေသည်။ ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီကို မသိမသာ ချွတ်ချလိုက်သည်။ ခက်တာ ကဦးရဲ့ ပုဆိုးကခံနေ သည်။ ကျွန်တော် အသားချင်းထိကပ်ချင်သည်။ ကျွန်တော် ဦးဘက်ကို မလှည့်ဘဲ လက်ကို နောက်ပို့ပြီး ပုဆိုးစကို ဆွဲလှန်လိုက်သည်။ ပထမတော့ မရ၊ ဦးရဲ့အရှိန်က ပြင်းလာသည်။
နောက်တခေါက်ခေါင်းကို အသာလှည့်ကာ ကြည့်ပြီး ပုဆိုးကို လှန်တင်လိုက်သည်။ အခုမှ ဦးရဲ့ရွှေလီးကြီးက ကျွန်တော့် ဖင်ကြားထဲကို အသားကုန်ပွတ်တော့သည်။ ကျွန်တော် ရင်တွေတုန်လာသည်။ လီးကြီးကို ဖင်ထဲထည့်ထားချင်စိတ် တွေတိုးလာသည်။ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်။ ကျွန်တော် အခုတော့ ဒီလိုပဲအလိုက်သင့် ဖင်ကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးသည်။ ဦး အသံတွေထွက်လာသည်။ တအင်း အင်း နှင့်။ ကျွန်တော် မျက်လုံးစင်းပြီး ဖီးလ်ဝင်နေတုန်း
` သား.... sorry... တကယ့်ကို sorry ...´
` သားက ဦးကို လည်းမနှိုးဘူး ၊ ´ ဦးက ပုဆိုးကို ကဗျာကယာ ဆွဲချလိုက်သည်။ ကျွန်တော် လည်း ဘောင်းဘီကို ဆွဲတင်လိုက်သည်။ ကျွန်တော် လုပ်ပုံကို ဦး ရိပ်မိသွားလားမသိ၊
`ဦး အိပ်ရေးပျက်သွားမှာစိုးလို့ပါ´ ဦးက သူ့လီးကို လက်နဲ့ကိုင်ထားရင်း
` သား...ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ... နာသွားလား´
`မနာပါဘူး ... ´ ဦးက သူ့လီးကို ဂွင်းတိုက်သလိုလုပ်နေသည်။
` ဒီညတောင် သားဦးနဲ့အိပ်ရဲပါ့မလား၊ တော်ကြာဦးကို တမျိုးထင်ဦးမယ်။´
` မထင်ပါဘူးဦး၊ ´ ပြောရင်းနဲ့ ကျွန်တော် ဦးရဲ့ လီးကြီးကို ကြည့်မိသည်။
` ဦး ပစ္စည်းက ထပြီးရင် တော်တော်နဲ့မကျဘူးကွ၊ ငတ်နေတာလဲပါတယ် ... သား စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် ..သား ကိုဦးတောင်းဆိုစရာတစ်ခုရှိတယ်´
`ရပါတယ်...ပြောပါဦး´ ကျွန်တော် ရင်တွေခုန်နေသည်။
` ဦး ခုနလိုပဲ နေချင်တယ်´ ဦးဘာကိုဆိုလိုမှန်းကျွန်တော်သိသည်။ ကျွန်တော် ပျော်လွန်းလို့ မရယ်မိအောင်သတိထားရသည်။
` သားအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် . . . ´
`ပြေပါတယ် ဦး ´ ကျွန်တော် ဦးဘက်ကို ကျောပြန်ပေးလိုက်သည်။ ဘောင်းဘီကို ဒူးအောက်ရောက်အောင် လျောချ လိုက်သည်။ ကျွန်တော်အခုမှ အသိအလင်းခံစားရတော့မည်။ ဒီကိစ္စ ဖိုးတေ သိသွားလျှင် ဘာတွေဖြစ်လာအုံးမည်မသိပါ။
`ကျေးဇူးပဲသား ... ဖိုးတေကို မပြောနဲ့အုံး။ သားဂတိတည်တယ်ဆိုတာ ဦးယုံပါတယ်´ ဦး ကစကားနဲ့ ပါအပြီ ချုပ်နေသည်။ ဒီတစ်ခါ ဦးက ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော် ဖင်ကြားထဲကို ပူနွေးနွေး အသားချောင်း ကြီးက လာထောက်သည်။ ပြီးမှ ဖင်နှစ်လုံးကြားထဲက အကြောင်းကြားထဲကို မရမက ထိုးထည့်လိုက်သည်။ တချက်တချက် ဦး ဒစ်က ကျွန်တော့် စအိုဝလေးကို လာလာထောက်သည်။ ကျွန်တော် လည်ချောင်းတွေခြောက်ကပ်ပြီး လက်တွေတုန်လာသည်။ ကျွန်တော် အလိုက်သင့်နေပေးသည်။
` သား... ဦး ပစ္စည်းကို သား ပေါင်ကြားထဲထည့်လို့ရလား´
` ရပါတယ်ဦး ... ဦး အဆင်ပြေသလိုလုပ်ပါ´ကျွန်တော် ဦးမျက်နှာကိုမကြည့်ရဲသေး။
` ဒါဆို သား မှောက်ပေးပါလား´ ...ကျွန်တော် လန့်သွားသည်။ ငါ့ဖင်ကို ဦးတကယ်ချမလို့ အစပြိုးနေတာလား။ ကျွန်တော် မှောက်ပေးလိုက်သည်။ မျက်နှာကို ခေါင်းအုံးနှင့်ကပ်ထားလိုက်သည်။ ဦးက ကျွန်တော့်အပေါ်တက်ခွသည်။ အရပ်လည်းမြင့် လူကောင်လည်းကြီးတဲ့ဦးက တော်တော်လေးသည်။
` သား . . . ပေါင်နှစ်ချောင်းကို တင်းတင်းစေ့ထားလိုက်´
`ဟုတ်ကဲ့ဦး´ ဦးလီးကြီးက ဖင်နှစ်လုံးနှင့် ပေါင်ကြားထဲကို တိုးဝင်လာသည်။ စစချင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်တော့ ကျွန်တော့် ဥတွေကို ဦးရဲ့ဒစ်နဲ့ထိုးမိသည်။ ရုတ်တ ရက်ဆိုတော့ ကျွန်တော်နာသွားသည်။
` သား...နာသွားလား .. ဒါဆို သားပေါင်အောင်မှာခေါင်းအုံးကို ခုထားပါလား´
` ဟုတ်ကဲ့´ ဦး လိုချင်တဲ့ပုံစံက ဖင်လေးကိုကော့ပေးစေချင်သည်။ အခုမှ ဦးလီး က ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားထဲ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေသည်။ အသားချင်းပွတ်နေတာနဲနဲကြာတော့ပူလာသည်။ ဦး ရဲ့လက်က ကုတင်ဘေးနားက အံဆွဲထဲကိုနှိုက်သည်။ ဘူးတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်သည်။
`ဆီမရှိတော့ သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့...ဒါက ဆီတော့မဟုတ်ဘူး။ လိင်ကိစ္စတွေ အတွက် သုံးတဲ့ ရေပါတဲ့ အဆီတစ်မျိုးကွ။ KY Jelly ဆိုလား၊ ဦးသူငယ်ချင်း နိုင်ငံခြားကနေလာတုန်းပေးထားတာ ၊ ´ ပါးစပ်ကလည်းပြောရင်း ပုလင်းထဲက jel တွေကို ကျွန်တော့် ဖင်ကြားထဲလောင်းထည့်နေသည်။ စစချင်းအေးခနဲဖြစ်သွားသည်။ ဦး က သူ့လီးကြီးကို ပေါင်
ကြားထဲက ပြန်ထုတ်ပြီးမှ ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထည့်လိုက်သည်။ ဒစ်ခေါင်းက ကျွန်တော့်စအိုကို လာထိုးမိသည်။ ကျွန်တော် အဖျားတတ်သလိုညည်းမိသည်။
` အား .......ဟင်း......´
` သား . . .ဖြစ်ရဲ့လား´
` ဟုတ်...ဖြစ်ပါတယ်ဦး ...´ ဦးက ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားကို မိန်းမတစ်ယောက်၏ စောက်ဖုတ်ကို လိုးသလိုမျိုး လုပ်သည်။ ကျွန်တော် ဦး၏ လီးကြီးကို ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ် ထဲကို သွင်းထားချင်သည်။ ဦး လုပ်နေရင်း အရှိန်တတ်လာသည်။
`သား... ပေါင်ကို ပိုပြီး ကပ်ထားပေး...ဦးပြီးတော့မယ်´
`ဟုတ်..´ ပေါင်ကို ပိုပြီးခပ်တင်းတင်းစေ့ပေးလိုက်သည်။ ဦး၏လီးလုံးပတ်က တုတ်လို့သာ ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ ရသည်ဟုထင်သည်။ မဟုတ်လို့ကတော့ ချောင်ကျနေမှာအမှန်ပင်။ သိပ်မကြာလိုက်ပါ။ ပစ်ခဲပြီး ချွဲပျစ်နေသော ဦးရဲ့ သုတ်ရေတွေ တရစပ်ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ ဦး က ဂွင်းထုသလိုလုပ်ပြီး ကျွန်တော့် ဖင်ပေါ်မှာ ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ ပူနွေး
သောအရသာ က ဖင်ကြားထဲကနေ လိမ့်ဆင်းသွားသည်။ jel ရဲ့ ချွဲပစ်ပစ်နှင့်ရောသွားကာ ကျွန်တော့် ဖင်ကြားတစ်ခုလုံးစီးပိုင်နေသည်။
` ကျေးဇူးတင်တယ်သား... ဖိုးတေ ကိုကျေးဇူးပြုပြီးမပြောပါနဲ့သား´
` ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦး...ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဘူးလို့ကတိပေးပါတယ်´ ဦးက သူ့ပုဆိုးကိုယူပြီး ကျွန်တော့်ဖင်ကြားထဲကို သုတ်ပေးသည်။
` ရပါတယ်...ဦး လုပ်ပေးမယ်။ သားဒီအတိုင်းနေ...ပြီးမှ ရေချိုးလိုက်ပေါ့´ ကျွန်တော့်ဖင်နှစ်မွာကို ဖြဲချလိုက်ပြီး ပုဆိုးကို သွင်းကာ သုတ်ပေးသည်။ ဦး ကျွန်တော့်
ဖင်ကို ဖြဲပြီးကြည့်နေသည်ဟု ထင်သည်။ တချက်တချက် ဦး လက်ခလယ်က စအိုဝလေးကို မသိမသာ ပွတ်ဆွဲလိုက်သေးသည်။
`ရပြီ ဦး...ကျွန်တော် ရေသွားချိုးလိုက်တော့မယ်´
` ကောင်းပြီသား´ ကျွန်တော် ကို သား . . သား နှင့်ကိုခေါ်နေတော့သည်။ ဦးရဲ့လီးကို ကြည့်လိုက်တော့ အနည်းငယ်ပျော့သယောင်ရှိသော်လည်း တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ကြီးရှိတုန်းပင်။ အကြောတွေက ထနေသေးသည်။ ဒစ်ဖျားမှာသာ လရေတွေကြောင့်ဝင်းနေသည်။ ကျွန်တော် ဦးရဲ့လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ချင်သည်။ ကျွန်တော့်မှာ ထိုကဲ့သို့လီးမျိုးရှိရင် နေ့တိုင်းဂွင်းထုမိနေမလားမသိ။ ကျွန်တော့်အတွေးကိုဖြတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်လိုက်သည်။ ရေချိုးနေရင်း ခုနက မြင်ကွင်းကိုမြင်ကာ ဂွင်းထုလိုက်သည်။ မရေမတွက်နိုင်သော အကြိမ်တွေထဲမှာ ဒီတစ်ခါဂွင်းထု သည်က ပိုပြီး ကောင်းသည်။ ကျွန်တော် ဒီနေ့ည ဦးနှင့်အိပ်ဖို့ကိုမျှော်နေမိသည်။ အချိန် ရယ်...ကုန်တာနှေးလိုက်တာ။ ည အိပ်ဖို့ကိုသာ မျှော်နေမိသည်။
ကျွန်တော်ဟာ အစားခံရဖို့ ကျားရဲတစ်ကောင်ရဲ့ အရှေ့ကို ရဲရဲ ထိုးကျွေးဝံ့တဲ့ သိုးငယ်တစ်ကောင်ဖြစ်နေတော့သည်။
ညက မီးပျက်တာနှင့်အပြိုင် မည်းချင်တိုင်းမည်း မှောင်ချင်တိုင်းမှောင်နေတော့သည်။ ငတေ တို့အိမ်တွင် LED မီးအိမ်လေးပဲရှိသည်။ အခန်းတခုလုံးကို အရမ်ကြီးလုံ လောက်အောင်မလင်းပါ။ စူးရှပြီးမျက်စိကို ပြာဝေတတ်သော ထိုမီးရောင်ဖြင့်ကျွန်တော် စာမကြည့်ဖြစ်ပါ။ ကျွန်တော်နှင့်ငတေက ထုံးစံအတိုင်း ညမအိပ်ခင်စကား တွေတ၀ကြီးပြောနေသည်။
ဒီနေ့ပြောသည့်အကြောင်းအရာကနဲနဲထူးဆန်းသည်။ ငတေက ကျွန်တော့်ကို သူ့အဖေနှင့်အိပ်ရတာအဆင်ပြေလား ဟုမေးသည်။ ငတေ့ မေးနေသောအမူအယာမှာ နဲနဲထူးခြားနေသည်။
ကျွန်တော်နှင့်ဦး အကြောင်းတွေကို ငတေ သိသွားလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် သူ့အဖေအကြောင်းကိုသူသိလို့လား။ စကားလမ်းကြောင်းကိုသာကျွန်တော် မရမက လွှဲလိုက်သည်။
` ငတေ... မင်း mp3 ထဲမှာ လေးဖြူသီချင်းရှိလား´
` အေး ... ရှိတယ်...ယူမလို့လား...ယူသွားလေ..ဓာတ်ခဲကတော့ကုန်ခါနီးပြီ ...´
` မယူတော့ပါဘူး။ ငါပြန်ခါနီးမှCD ခုတ်ခိုင်းမလို့´
` အေးပါကွာ..ငါမင်းကို သီချင်း CD တွေကော porn DVD တွေကောအားရပါးရခုတ်ပေးလိုက်မယ်´
` တယ်တော်ပါလား ငါ့အကြိုက်ကိုသိသားပဲ´
` သိတာပေ့ါကွာ..ငတေပဲ...မင်းဘာကြိုက်လဲအကုန်သိတယ်။ ငတေပဲ...လေ...၊ ရေစစ်ဆိုတဲ့မင်းက အောကားကြည့်ရင်တောင် ဆော်ချောဖို့ထက် ဘဲချောချောကိုပိုကြည့်တာမဟုတ်လား´ ကျွန်တော် လန့်သွားသည်။ ငတေ ကျွန်တော် ဂေးလ်တစ်ယောက်ဆိုတာသိသွားပြီလား။
` မဟုတ်ပါဘူးကွာ....မင်းထင်လို့ဖြစ်မှာပါ။ ငါ..က ဆော်ချောချောလေးကိုပဲကြည့်တာပါ။´ ငတေ က ခစ်ခနဲ ခနဲ့တဲ့တဲ့ရယ်သည်။
` လာဖြီးမနေနဲ့။ this man နဲ့ this man ဘာမှာညာလို့မရဘူး...´
` ဘာလဲငတေ...မင်းကငါ့ကို ဂေးလ် လို့ပြောချင်တာလား´
` မသိဘူးလေ။ ´
` တော်ပြီ...ငါသွားအိပ်တော့မယ်´ ကျွန်တော်ထပြီးအခန်းအပြင်ထွက်မယ်လုပ်မှ ငတေက လှဲနေရာကထပြီးကျွန်တော့် အနောက်ကနေ ခါးကိုလာဖတ်ထားတယ်။
` စိတ်မဆိုးဘာနဲ့ကွာ...ငါကချစ်လို့စတာပါ..မင်းပုံစံက စိတ်ဆိုးရင် အပျိုဖော်ဝင်စကောင်မလေး စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံစံနဲ့ တူလို့ပါ´ ငတေ က ကျွန်တော့်ထက်အရပ်နည်းနည်းပိုမြင့်ပေမယ့် ငတေ့ရဲ့ ညီလေးက ကျွန်တော့်ဖင်ကိုထောက် ထားတယ်။ ငတေ ဒူးကွေးပြီးဖက်ထားပုံရသည်။ ကျွန်တော် မရုန်းဘဲ နေလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ပါးတွေ နွေးခနဲ စိုသွားမှ
အသိပြန်ဝင်လာသည်။ ငတေ ကျွန်တော့်ညာဘက်ပါးကို နမ်းလိုက်သည်။
` ခွေးကောင်...ညစ်တီးညစ်ပတ်´ ပါးတွေကို လက်ဖျံနှင့်အတင်းပွတ်ပြလိုက်သည်။ အခုထိ မရုန်းမိသေး။
`လာကွာ...´ ဆိုပြီး အီတီတီ အသံနှင့်အတူ ကျွန်တော့်ကို မြောက်တတ်သွားအောင် ခါးက ဖက်ပြီးချီလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကို ပစ်တင်လိုက်သည်။ ကျွန်တော် ပက်လက် အနေအထား ကုတင်ပေါ်ရောက်သွားတော့ ငတေက အပေါ်ကနေတက်ခွပြီး ကိုယ်ပေါ်ကို အလျားလိုက်မှောက်အိပ်လိုက်သည်။
` ဟေ့ကောင်...ထ ...ငါဒါတွေစိတ်မ၀င်စားဘူး´
` မသိပါဘူးကွာ...မင်းကဒီလိုမျိုးကိုကြိုက်တယ်ထင်လို့...´ စကားပြောပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မှဆင်းသွားသည်။
` မင်းလွန်ပြီ ငတေ...မင်းဒီနေ့တညနေလုံးငါ့ကို စကားတွေနဲ့ဖဲ့နေတယ်။´
` မင်းက ဘာနဲ့အဖဲ့ခံချင်လို့လဲ´ အခုလိုပြောနေပုံက ညစ်တစ်တစ်နိုင်သည်။
` တော်ပြီ...မင်းသိအောင်ပြောမယ်။ ငါ မင်းထင်သလို ဂေးလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ရင်တောင် မင်းနဲ့တော့ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ဘူး ´
` အိုး... လာလာချည်သေး... အေးပါ ရေစစ်ရာ...ငါက သူငယ်ချင်း ချင်းချစ်လို့စတာ... ငါလည်းမင်းကို မလုပ်ရက်ပါဘူး´
`အခုမှ ၉နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်။ ငါနဲ့နေပါအုံးကွာ...စိတ်မဆိုးပါနဲ့..စကားထပ်ပြောကြမယ်´
` စိတ်မဆိုးပါဘူး။ ငါအိပ်ချင်လာလို့ပါ။ နောက်ရက်တွေရှိသေးတာပဲ´
အမှန်တော့ ကျွန်တော် ဦးအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးအိပ်ချင်နေသည်။ ဒီနေ့တော့ ရေချိုးပြီးကတည်းက စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်တစ်ထည်နဲ့ အိမ်နေရင်းပုဆိုးခပ်ပါးပါးလေးကိုသာဝတ်ထားသည်။ ကျွန်တော် က အိပ်ချင်ထာထက် ဒီနေ့မနက်ကလိုမျိုး ဦးဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုသိချင်နေသည်။
` အေးပေါ့လေ...အသစ်တွေ့တော့ အဟောင်းမေ့တာပေါ့´ ကျွန်တော် တော်တော် ပေါက်သွားသည်။ ငတေ က ကလေးမဟုတ်လူကြီးမဟုတ် ပြောတဲ့စကားတွေက တစ်ဖက်
သားကို ဘယ်လောက်ထိ ထိခိုက်မှန်းသူမသိပါ။ ဂေးလ် တစ်ယောက် (များသော အားဖြင့် ကျွန်တော့်ကဲ့သို့ ပုန်းနေသော ဂေးလ်လိုလူ) ကို အခြောက် လို့သွယ်ဝှက်ပြီးဖြစ်စေ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ ထိုသို့စကားမျိုးတွေကို လုံးဝ သည်းမခံနိုင်ပါ။ မိမိ ကိုယ်ကိုယ် ယောကျာ်းစစ်စစ် တစ်ယောက်ဟု သိစိတ်ကတော့ ခံယူထားမမြဲဖြစ်သည်။
` ဟုတ်တယ် ကွ..´ ရွဲ့ပြီးပြောလိုက်သည်။
` ငါ့ အဖေ က ပိုကောင်းတယ်ပေါ့´
` ဟုတ်မယ်... ဦးက မင်းထက် ပိုကောင်းတယ်။ မင်းလို မမိုက်ရိုင်းဘူး´
` ဟ... ဘလိုင်းကြီးပါလား´
` ....´ ကျွန်တော် ဆက်မပြောဘဲ အခန်းထဲက အပြီးထွက်လာခဲ့သည်။ ငတေ နှင့် ကျွန်တော် က ငယ်ငယ်ကတည်းက ဒီလိုပဲ။ ငတေ က ကျွန်တော့်ကို အမြဲလိုလို စိတ်ဆိုး အောင်စသည်။ပြီးမှ ပြန်ချော့မည်။ တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်သော ငတေ့အဖို့ အဖော်မက်သည် မှာမဆန်း။ အခန်းထဲဝင်သွားတော့ ဦး က လှဲနေသည်။ ဘယ်ဘက်ကို ကိုယ်တခြမ်းစောင်းလေး
ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် အိပ်မည့်ဘက်ကို ကျောပေးထားသည်။ ကျွန်တော် ညစ်သွားသည်။ ဦး တကယ်အိပ်ပျော်နေပြီလားမသိ။ ကျွန်တော် ခြေထောက်ကိုခပ်ဖော့ဖော့နင်းပြီး ကျွန်တော် အိပ်မည့်ဖက်
အခြမ်းကိုသွားသည်။ ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်တဲ့အခါ ကုတင်လှုပ်သွားလို့လားမသိ။ ဦး နှိုးလာသည်။
` ဦး..ကန်တော့ ...ကျွန်တော် လုပ်လို့နိုးသွားပြီ။´
` ဦး ကမအိပ်သေးဘူးကွ... သားကိုစောင့်နေတာ´
`ဗျာ´ ဦးပြောပုံစံက ယောကျာ်းက သူ့ဇနီးကို အိပ်ဖို့စောင့်နေသလိုမျိုးကြီး။ ကျွန်တော် အမှန်ပင်ပျော်သွားတယ်။
` ဟို... သားကိုပြောရမှာ အားလည်းနာတယ်။ ဦး ကိုယ့်ဖာသာလည်း...ပြောမထွက်လို့´
` ရပါတယ်ဦး...ကျွန်တော့်ကို သားအရင်းတစ်ယောက်လိုသဘောထားပြီးပြောနိုင်ပါတယ်...အားနာစရာမလိုပါဘူး´
` ဦး...ပထမ ဆုံး မနက်က ကိစ္စကိုတောင်းပန်ချင်တယ်။ ဦး စဉ်းစားကြည့်တော့ ဦးလုပ်ရပ်တွေက မကောင်းဘူး... အိမ်မှာလာနေတဲ့ဧည့်သည်ကို ဒီလိုမျိုးမဆက်ဆံသင့်ဘူးလေ။ နောက်ပြီး...ရေစစ်က သားသူငယ်ချင်း..၊ ဦး သူငယ်ချင်းဆိုရင်လည်းထားဦး၊ နောက်..ဦးက ရေစစ် အဖေထက်နဲနဲပဲငယ်တယ်။ ရေစစ် ဦးကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါကွာ´
` ရပါတယ်ဦး... ကျွန်တော် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ကူညီနိုင်တာကိုပဲဝမ်းသာလှပါပြီ။ ကျွန်တော်လိုက်လျောပေးလို့ရတာ အကုန်လိုက်လျောပေးပါ့မယ်´
ကျွန်တော် ရေလာမြောင်းပေး လုပ်နေသည်။ ဘာကြောင့် ကျွန်တော် ဒီလိုဘ၀ကို ရောက်ရတာလဲ။ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ်ရထားတဲ့ဘ၀ကို စိတ်ပျက်မိသည်။ ယောကျာ်းစစ်စစ်တစ်ယောက်က သူ့စိတ်ကိုအာသာဖြေရန် အပျော်မယ် (ပြည့်တန်ဆာ) တစ်ယောက်ကို ပိုက်ဆံပေးပြီး လုပ်လို့ရသည်။ ကျွန်တော် ဆိုတဲ့ ဂေးလ် တစ်ယောက်ဟာစိတ်အာသာ ဖြေဖို့ဘယ်သူ့ကို ခေါ်လို့ရမှာလဲ။ ကျွန်တော် ကြားဖူးတာ က တစ်ချို့ ငွေကို ရေလိုသုံးနိုင်တဲ့ ဂေးလ်တွေကတော့ ခပ်မိုက်မိုက် ဘဲတွေကိုငွေနဲ့ပေါက်ပြီးပျော်ကြတယ်။ ကျွန်တော် ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကို ခံစားကြည့်ချင်သည်။ ဘာလို့များဖင်ခံချင်စိတ်၊ လီးစုပ်ချင်စိတ်တွေ ထနေမှန်းမသိ။ ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ကောင်မလေးတွေ။ ခါးသေးရင်ချီ ကောင်မလေးတွေက ကျွန်တော်လိုလူမျိုးအတွက်မဟုတ်သည့်အတွက် ကျွန်တော် လူဖြစ်ရှုံးသလို ခံစားရသည်။
` ကျေးဇူးပဲသား... ဦးက သား စိတ်ဆိုးနေပြီး ဖိုးတေ နဲ့သွားအိပ်ပြီလားလို့´
` မအိပ်ပါဘူး။ ငတေနဲ့စကားခဏသွားပြောတာပါ´
` ရေစစ် မှာ ရည်းစားရှိလား´
` ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်´ ငါ ဘာလို့ဦးကိုလိမ်လိုက်မိတာလဲ။
` မဟုတ်ဘူး ၊ ဂျပန်မှာကျောင်းသွားတတ်တယ်´
`တော်တယ်ကွ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကျောင်းတတ်ရတာ လွယ်တာမှတ်လို့´
` ဟုတ်တယ် ဦး...သူက ကျွန်တော့်ထက်အများကြီး စာတော်တယ်။ မှတ်ဥာဏ်လည်းတအားကောင်းတယ်´ ဆက်ပြီးလိမ်နေမိသည်။ ဦး နဲ့ကျွန်တော် ကုတင်မှာထိုင်ပြီး မျက် နှာတွေကို မကြည့်ဘဲ စကားပြောနေသည်။ ကျွန်တော် မသိမသာ ဦးကို ကြည့်လိုက်တော့ ဦးက ကျွန်တော့်ကို ပြန်ကြည့်သည်။ ဦး ပုံစံက ကျွန်တော့်ကို ပြောစရာရှိသေးပုံပင်။
` ဦး ပြောစရာရှိရင်ပြောလေ... ကျွန်တော့်ကို အားမနာနဲ့´
` ဟို... ဦး ... ပြောရင် ကောင်းမကောင်းတွေးနေတာ´
` ပြောပါဦး ...အားမနာပါနဲ့´
` သား... စိတ်မဆိုးရင်... သား မနက်က ပုံစံ အတိုင်းနေပေးပါလား´ ဟိုက်ရှားပါး ...ရေခဲတွေပျော်တာထက် အဆ ၁၀၀ လောက်ပိုပြီး ပျော်သွားသည်။
` ရပါတယ် ဦး..ကျွန်တော့်အတွက်အပန်းမကြီးပါဘူး´ ကျွန်တော်ပြောပြီး ခေါင်းအုံးကို ခါးအောက်မှာခံပြီး ဖင်ကို ကော့ထားပေးလိုက်သည်။
` ဦး... ဒီနေ့အလုပ်မှာ တစ်နေကုန် မနက်က အကြောင်းကို တွေးလိုက်တိုင်း ဦး ငပဲကြီးက ထ လာတယ်။ တစ်နေကုန် ထ နေတယ်။ ဦး ဒီလိုမဖြစ်တာ နှစ်နဲ့တောင်ချီပြီ။
ဦး ပထမ ဒီနေ့ ရှောခ်ဘိ သွားမလို့ပဲ။ ဦး ရောဂါတွေကူးမှာကို တွေးမိလိုက်လို့။ ´
` နောက်...ည သန်းခေါင် ဦးစိတ်ရူးထလို့ သားကို နောက်ကနေညှောင့်မိရင်..သား အိပ်ရေးပျက်မှာလည်းစိုးတယ်´
` ကျွန်တော် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ဦး လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပါ´
` သား...ကို ဦးတကယ်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ ´ ပြောပြီးတော့ ကျွန်တော့် ဖင်နှစ်လုံးကို လက်နဲ့နယ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ ကျွန်တော့်ပုဆိုးကို လှန်တင်လိုက်သည်။ မနက်ကလို
KY jel ကို ဖင်ကြားထဲ ညှစ်ထည့်လိုက်သည်။ စအိုဝ လေးကို ထိသွားတော့ အေးခနဲဖြစ်သွားသည်။ ဦး မနက်လို ချက်ချင်း သူ့လီးကြီးကို ထိုးမထည့်။ သူ့လက်ချောင်းတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် ကြီးတွေ
နဲ့ဖင်ကြားထဲကို ပွတ်ပေးနေသည်။ ကျွန်တော် ခေါင်းထောင်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဦးက သူ့ရွှေချောင်းကြီးကို ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ဂွင်းတိုက်နေတယ်။ ညာလက်က ကျွန်တော့်ဖင်ကြားထဲမှာ။
စအိုဝ လေးကို လက်ချောင်းထိပ်ကလေးနဲ့ကလိနေတယ်။ ကျွန်တော် ဘာပြောလို့ရမှာလဲ။ မပြောရင်ကော ဦးက ကျွန်တော့်ကို ဂေးလ် စစ် ပါလို့ထင်သွားမှာပေ့ါ။ ခက်တယ်။ လက်ချောင်းက ဂျယ်အကူအညီနဲ့ စအိုဝ ထဲကို ဖြည်းဖြည်းထိုးထဲ့တယ်။ မ၀င်ဘူး။ ကျွန်တော် ဘာမှမပြောတော့ဘူး။ ဦးကို ကျွန်တော် ပြောပြီးသွားပြီပဲ။ ဦးလုပ်ချင်သလိုလုပ်ပါ လို့။ မျက်လုံးမှိတ်ပြီးအသာနေပေးလိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခါပွတ်နေတာက နေအားနည်းနည်း ပိုသုံးတယ်။ တစ်ခါမှ ဖင်မခံဘူးပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်ဖင်ပေါက်က လက်ချောင်းလောက်ကိုတော့အားနဲ့သွင်းတော့ ၀င်သွားတယ်။ တော်တော်နာ
` ဆောရီး...သားနာသွားလား...ဦး က သား ရဲ့ အပေါက်သေးသေးလေးကိုမြင်ပြီး ကလိချင်သွားလို့ပါ...သားနာတယ်ဆို.ဦးမလုပ်တော့ဘူး´ ဦးလက်ကပြန်ထုတ်လိုက်သည်။
` ဗြုန်းခနဲမို့ လန့်သွားလို့ အော်လိုက်မိတာပါဦး... ´ လုပ်ပြန်ပြီ၊ ဦးနေရာမှာ ကျွန်တော်ဆိုရင် ဒီကောင်ဂေးလ် ဆိုတာသေချာသိပြီ။ ယောကျာ်းစစ်စစ်တယောက်က
` ဦး မနက်က အတိုင်းပဲလုပ်တော့မယ်။ ဦး က သား ဖင်လေးကို ပွတ်နေရင်း ဦး ဇနီးကိုသတိရသွားလို့။ သား ဆိုတာကို လည်း မေ့သွားတယ်´
` ရပါတယ်ဦး... ဦး အဆင်ပြေသလိုလုပ်ပါ။ ကျွန်တော့် အဆင်မပြေရင်ပြောပါ့မယ်။´ အခုလိုပြောလိုက်တာက ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်သလိုတော့ဖြစ်သည်။
` ကျေးဇူးပဲသား´ ဦးက မနက်ကလိုပဲ သူ့လီးကြီးကို ပေါင်ကြားထဲထိုးထည့်သည်။ ပြီးတော့ စပြီး မိန်းမကိုလိုးသလို လိုးနေတော့သည်။ ကျွန်တော့် ကို အတင်းဖက်ထားသည်။
ကျွန်တော်ကလည်းပေါင်ကို တင်းတင်းစေ့ထားသည်။ မောသွားလို့လားမသိ။ ခဏ နားသည်။ လီးကိုလည်း ပေါင်ကြားထဲက ပြန်ထုတ်သည်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်ကတော့ မဆင်းသေး။ ပေါင်ကြားထဲ
ကထုတ်ပြီး ဖင်ကြားထဲ ထဲ့ထားသည်။ ကျွန်တော် ထိုကဲ့သို့နေတာကို ပိုကြိုက်သည်။ ဒါမှပဲ လီးရဲ့ပွတ်သပ်မှုက ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံးကို ဖီးလ်ဖြစ်စေသည်။ တောင့်တင်းမာကြောနေသော လီးက
ဖင်ကြားထဲမှာရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်သည်။ တချက်တချက် စအိုဝကို ထောက်ထားသည်။ အားနဲ့လည်း စအိုဝကို တေ့ပြီးစောင့်သည်။ တုတ်ကြီးကြီးနဲ့ထိုးသလိုမျိုးအောင့်တောင့်တောင့်ဖြစ်သွား
သည်။ စအိုထဲကို အတင်းထိုးထည့်နေပုံရသည်။ အာခေါင်တွေပိုခြောက်လာသည်။ အကြောတွေလည်း တုန်ခါသွားသည်။
`ဦး ... ဖြစ်ရဲ့လား´
` အေးကွယ်... ဦး တော်တော်နဲ့မပြီးဘူးဖြစ်နေတယ်။ သား ကိုလည်းအားနာလှပြီ၊´
` မရိုမသေ...ဦးကို သား ဂွင်းတိုက်ပေးရမလား´ ကျွန်တော် ဖြစ်ချင်နေတာ ဦးရဲ့လီးကိုအားရပါးရကိုင်ချင်သည်။
` သား ... အဆင်ပြေပါ့မလား´
`ပြေပါတယ်... ကျွန်တော်လည်း လုပ်နေကျမို့ပါ´
` အေးလေ... စမ်းကြည့်တာပေါ့´ ဦးက ကိုယ်ပေါ်က ဆင်းပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ပေးသည်။ ဦးလီး မှာအကြောတွေ ထောင်းထောင်းထနေသည်။ ဒစ်ကြီးမှာလည်း
လန်နေသည်။ နီညိုရောင်ထနေသော ဒစ်ခေါင်းကြီးက စုပ်ချင်စရာကောင်းသည်။ ထိပ်ဖူးအရည်ပြားက ရှည်ပုံရသည်။ ဒစ် အောက်ခြေနားမှာထူထူလေးဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော် ထထိုင်ပြီး လီးကြီးကိုကိုင်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့် လက်ညှိုးနဲ့ လက်မ ကောင်းကောင်းမထိချင်။ ကျွန်တော် ပထမတော့ဖြည်းဖြည်း ထုပေးသည်။ အရည်ပြား အောက်ကို ရောက်သွားတိုင်း ဒစ်ခေါင်းကြီးက ပြောင်တင်းသွားသည်။ နွေးနေသော လီးကို စုပ်ပေးချင်သည်။ ကျွန်တော် မလုပ်ရဲပါ။ ၅ မိနစ်လောက်ကြာသွားသည်ထင်။ လက်တောင်ဘယ်ညာပြောင်းပြီးသွားသည်။ ဦးက မပြီးသေး။ အသက်ကြီးလို့ကြာတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသောက်ထားလို့လား။
` သား . . . လက်ညောင်းနေပြီလား။ ဦး ဒီနေ့မှာကြာတယ်ကွာ... ဖြစ်နိုင်ရင် သား ဦးကို ထုပေးတုန်း သားရဲ့ဖင်တွေကို ပေးကိုင်ပါလား ..ဦး ဒါဆိုရင် မြန်မြန်ပြီးမယ်ထင်တယ်´ ဦးက ကျွန်တော့်ကို သူလိုရာကို ပြောနေသည်။
` ဟုတ်ကဲ့ဦး ။ ရပါတယ်။ ´
` သား ပြောင်းပြန်မှောက်အိပ်လိုက်ပါလား´
` ဦး ကိုယ်ပေါ်မှာလား´
` မဟုတ်ပါဘူး။ ငရဲကြီးမှာကြောက်လို့ပါ´ 69 ပုံစံနေခိုင်းစေချင်သည်။ ဒါဆို တောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးက ဦးရင်ဘတ်ပေါ်ကို ထောက်ထားမှာပေါ့။မသိချင်ယောင်ဆောင်
` ငရဲမကြီးပါဘူး။ သားက မိန်းကလေးမှမဟုတ်တာ´
` ဟုတ်ကဲ့ဦး´ ကျွန်တော် ဦးပြောတဲ့အတိုင်းနေပေးလိုက်သည်။ ဒီလိုနေပေးလိုက်တော့ ကျွန်တော့်က ဦးထက် အရပ်ပုတဲ့အတွက် ဦးလီးကြီးက ကျွန်တော့်မျက်နှာနဲ့ အပ်နေပေမယ့် ကျွန်တော့် ဖင်တွေက ဦး ရင်ဘတ်ကျော် ကျော်မှာပဲရှိနေသည်။ လီးကို အနီးကပ်ကြည့်လို့ရသွားသည်။ ဂျယ်တွေကြောင့်ပါပြောင်လက်နေတဲ့ လီးကြီးက ဘာအနံမှမရှိ။ ဦးသေသေချာချာဆေးထားပုံရသည်။ တချက်တချက် ပါးနှင့်အပ်မိသည်။ ဦးက ကျွန်တော့်ဖင်နှစ်မွာကို လက်နဲ့အားရပါးရညှစ်သည်။ နို့တွေကိုညှစ်သလိုမျိုးညှစ်သည်။ ညှစ်လို့အားရပြီးမှ လက်ချောင်းထိပ်က
ဖင်ကြားထဲကို လျှောသွင်းကာ ပွတ်နေသည်။ လက်ညှိုးဖြစ်ပုံရသည်။ စအိုဝတည့်တည့်ကို အားနဲ့ဖိလိုက်သည်။ ခုနကလို လက်တစ်ဆစ်လောက်ဝင်သွားသည်။ ချီးပါချင်လာသလိုလိုဖြစ်လာသည်။
ဒီတစ်ခါမအော်မိတော့။ မနက်တိုင်း ၀မ်းကို အားရပါးရသွားတတ်သည့် အကျင့်ကြောင့် အိမ်သာမပြေးချင်။ လက်ချောင်းကပိုထိုးထည့်လိုက်သည်။ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖြစ်သွားသည်။ ဖင်ရဲ့ကြွက်သားများကို ပိုညှစ်ပေးလိုက်သည်။ နောက်ကို ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး ထုတ်ချည်သွင်းချည်လုပ်နေသည်။ ကျွန်တော်လည်း ဦးရဲ့လီးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ထုပေးလိုက်သည်။
`သား... အား...ဦး ပြီးတော့မယ်။ ...အား...သားခေါင်းကို ဖယ်ထား။ ပေကုန်လိမ့်မယ်´ ပြောသာပြောနေသည်။ ဖင်ထဲမှာ ၀င်နေသော လက်ညှိုးကို မထုတ်သေး။ ကျွန်တော်အရှိန်ပြင်းသလို လိုက်ပြင်းပြင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်သည်။ ပြီးတော့မယ်သာပြောသည်။ ၁၀ ချက်လောက်ပုံမှန်ထုပေးသော်လည်းမပြီးသေး။ ဖင်ထဲက လက်ကို ထုတ်လိုက်သည်။
`အား...´ ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော် အော်ရသည်။ ဦး ရက်စက်သည်။ လက်ချောင်းကို နှစ်ချောင်းပူးပြီးထိုးထည့်လိုက်သည်။ KY jel ကြောင့်လားမသိ ၀င်သွားသည်။ ဖင်ထဲလည်းပြည့်ကျပ်ကျပ်ဖြစ်သွားသည်။ ဦးက` အား... ထွက်ပြီ´ ပစ်ခဲပူနွေးသော လရည်များတပြွတ်ပြွတ်နဲ့ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ ညှီစို့စို့အနံ့နဲ့အတူ ကျွန်တော့် လက်တွေပေသွားသည်။ နှုတ်ခမ်းနားမှာလည်း တချို့အစက်တွေစင်သွားသည်။ ဖင်ထဲက လက်နှစ်ချောင်းပူးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ဟာ ခနဲဖြစ်သွားသည်။ နှုတ်ခမ်းမှာ စင်ထားသော လရည်စက်ကို ဦးမမြင်အောင် လျှာနှင့်သပ်လိုက် သည်။ ငံကျိကျိ အရသာ ရှိသည်။ ( စာအုပ်တွေထဲက ဖတ်ဖူးလို့ ရေးလိုက်ပါသည်။တကယ်ငံရဲ့လားမသိပါ)။ ကျွန်တော်ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် လိင်တူကို စိတ်ဝင်စားမှန်းမသိ။ သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လျှင် အင်မတန်ရွံဖို့ကောင်းသည်။ ဦး ကိုယ်ပေါ်က ထပြီး ပုဆိုးပြန်ဝတ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲသွားဆေးကြောသည်။ ဦးက မောပြီး ပက်လက်လှန်ကာ ကျန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့တောင်နေသောလီးကို ဂွင်းတိုက်လိုက်သည်။ ဒီလိုဆိုရင်မလွယ်။ ကျွန်တော် ငတေ တို့အိမ်တွင်ဆက်နေ သင့်သလား။ ဦး နဲ့ ဒီလို ဆက်သွားရင်တော့ ဒီ့ထက်လွန်တာတွေပဲဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ တွေးရင်းနဲ့ကြောက်လာသည်။ ငတေ့ကို ဖွင့်ပြောရင်တော့ ဂတိမတည်သော လူ ကျွန်တော် ဖြစ်မည်။ ကျွန်တော် အခန်းထဲပြန်ဝင်လာတော့ ဦး က ထိုင်နေသည်။
` သား ... ကျေးဇူးပဲ´
` ဦး ... သွားဆေးကြောလိုက်အုံးမယ်´ ခေါင်းသာ အသာပြန်ညိမ့်ပြလိုက်သည်။ ဖင်ထဲက အခုမှ ကျိမ်းစပ်စပ်ဖြစ်လာသည်။ ဘာလို့များ ဘုရား က ကျွန်တော်တို့လို လူမျိုးတွေဖန်ဆင်းပေးထားတာလဲ။ ကုတင်ပေါ်မှာလှဲရင်း စဉ်းစားမိသည်။ ကျွန်တော် ဂေးလ် တစ်ယောက်ဟု ဦးကို ဖွင့်ပြောလိုက်ရမှာလား။ ဒါဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။ ကျွန်တော် မပြောတတ်။
တကယ်တမ်း ဒီ အိမ်က ထွက်သွားရင်ကော... ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှပျော်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော် ချစ်သော သူငယ်ချင်းနှင့် သူ၏ အဖေကို မခွဲနိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့် ဦးကို ကျွန်တော် ချစ်နေမိသည်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော် အိပ်ပျော်သွားသည်။
မိုးစင်စင်လင်းတော့မှ ကျွန်တော်နိုးတော့သည်။ ခါတိုင်းလို ခပ်စောစော မနိုးတော့။ ဘေးနားမှာ ဦး မရှိတော့။ ဒီနေ့ ည ကျွန်တော် အရင် အခန်းထဲ ၀င်အိပ်မှဖြစ်မည်။
ဒါမှမဟုတ် ငတေ့ အခန်းထဲမှာသွားအိပ်မည်။ ဒီနေ့ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းပိတ်သည်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ။ နောက်တော့ ငတေ တို့အိမ်နားက အင်တာနက်ဆိုင်သွားသုံးဖြစ်သည်။ ဆိုင်ထဲတွင်လူသိပ်မရှိသေး။ ဆိုင်ရှင် အစ်ကိုကြီးက အသားက ခပ်ညိုညို။ ကုလားမင်းသားတွေနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်။ ဖြောင့်တန်းနေသော နှာတံက သူ့ရုပ်ကို ပိုပြီးအားဖြည့်ပေးထားသည်။
ဆိုင်ထဲက ထိုင်ခုံတွေ က ထိုင်လိုက်ရင် နံရံကို သာကျောပေးထားသဖြင့် ကြိုက်ရာဖွင့်ကြည့်လို့ရသည်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော် ယောကျာ်းချင်းလိင်ဆက်ဆံပုံတွေကို ကြည့်ချင်နေမိသည်။ ဟိုးအရင်တုန်းက တော့ သင်တန်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဓာတ်ပုံပေးဖူးသည်။ vedio တော့ မကြည့်ဘူးသေး။ google ထဲမှာ search လိုက်သည်။ gtalk ထဲက ဂေးလ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို တစ်ခြားတစ်ယောက် ကမေးသည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်မေးလိုက်သည်။ bananalover ဆိုတဲ့ Nick name လေးနဲ့ ဂေးလ်က လိပ်စာတွေပေးသည်။ ကျွန်တော် ဟိုလျှောက်ဖွင့်ဒီလျှောက်ဖွင့်ကြည့်သည်။ ကြည့်သည့်အထဲတွင်www.uknakedmen.com ဆိုတဲ့ website လေးကို ခိုက်သွားသည်။ web ထဲက gay porn star တွေက ရုပ်တွေက မင်းသားတွေအရှုံးပေးရလောက်သည်။ တောင့်သည်။ ဖြောင့်သည်။ နွဲ့နွဲ့လျလျပုံစံမျိုးတွေ လုံးဝ မတွေ့ရ။ ဒီထဲက model တချို့ကို ခိုက်သွားသည်။ လီးတွေကို အားရပါးရစုပ် နေပုံတွေ။ ဖင်ထဲကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသွင်းထားပုံတွေမှာ ရင်တွေခုန်ပြီး ရေတွေငတ်လာသည်။
air-corn က အေးပေးမယ့်ရင်ထဲတွင် ပူနေသည်။ video အစမ်းလေးတွေကို ကြည့်မိသည်။ ပိုက်ဆံရှိရင် ထိုခွေတွေကို ကျွန်တော် online က၀ယ်ချင်သည်။ ကြည့်နေရင်း ခုနက ဆိုင်ရှင်အစ်ကိုကျွန်တော့် နားကို ဘယ်လိုရောက်နေမှန်းမသိ။ window ကိုပိတ်တာမမှီ။ သူမြင်သွားပုံရသည်။ ကျွန်တော် အခုမှ ရှက်လာပြီး အကုန်ပိတ်ခါ ပိုက်ဆံသွားရှင်းသည်။
` 1200 ကျပါတယ်´ ကျွန်တော်သုံးတာ တော်တော်ကြာသွားသည်။ 2000 ပေးလိုက်သည်။
` 800 ပါ။ ညီ နောက်လည်း လာသုံးပါ။ ညီ့အတွက်နေရာကောင်းကောင်းစီစဉ်ပေးထားမယ်´ သူဘာသဘောနှင့်ပြောမှန်းမသိ။
` အင်း ...´ ပြုံးရုံသာပြန်ပြုံးပြလိုက်သည်။ သူ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြုံးပြသည်။ ငါ မင်းဘာကောင်လဲဆိုတာ ငါသိတယ် လို့ပြောနေသလိုပင်။ ဒီလို စိတ်ပျက်စရာတွေကို ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်အထိများတွေ့ရအုံးမည်နည်း။ ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ငတေ ရှိသည်။ ကျွန်တော့်ကို သော့အပို တစ်စုံပေးထားသည့်အတွက်ဘာမှ စိတ်ပူစရာမလို။ အိမ်ပေါ်ရောက်ရောက်ခြင်း ငတေက
` ရေစစ်... ဘယ်တွေလျှောက်လှိမ့်နေတာလဲ...´
` မင်းပြန်လာတာအတော်ပဲ ... ငါ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖုံးဆက်လာလို့... သွားတွေ့မလို့´
` အေးပါ..ငါ ဘယ်မှသွားစရာမရှိတော့ဘူး။ စိတ်ချလက်ချသွား´
` အဖေ ပြန်လာရင် ငါ နောက်ကျမယ်လို့...ညစာဝယ်ရင်ငါ့ကို မစောင့်နဲ့လို့´
` မင်းကော စားပြီးပြီလား´ ငတေ က ဂရုစိုက်တတ်သည်။
` အေး... စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်သွား... ´
` မင်းပျင်းရင်း စာအုပ်တွေရှိတယ်။ မီးလာရင် ခွေတွေလည်းရှိတယ်..ကြည့်ပေါ့ ´
`အေးပါ... ´ ငတေ အပြတ်ကို ရှိုင်းထားသည်။ သူငယ်ချင်းက ယောက်ျားလေးတော့မဖြစ်နိုင်။ မိန်းခလေးတောင်မှ ရိုးရိုးသူငယ်ချင်းမဖြစ်နိုင်။
တံခါးကို ပိတ်ပေးလိုက်သည်။ မီးက လာသည်။ ငတေ့ အခန်းထဲက ခွေတွေကို မွှေနေလိုက်သည်။ ကျွန်တော် ကြည့်ချင်သော ဘာကားတွေရှိမလဲ။ ဟိုးအရင်က ကြည့်ဖူးတဲ့အကြိုက်ဆုံးဇာတ်လမ်း Brokeback Mountain လိုမျိုးကြည့်ချင်သည်။ ဂေးလ်တွေအကြိုက်ဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည်။ သည်ကားကို ပြန်ကြည့်တိုင်း ငိုချင်သည်။ သေသွားတဲ့ ချစ်သူရဲ့ အင်္ကျီကို နမ်းရှုပ်နေတဲ့ အခန်းကို ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ဂေးလ် ဇာတ်လမ်း တော်တော် များများကြည့်ဖူးသည်။ ဇာတ်လမ်းနာမည်လေးတွေကို ပြောချင်သည်။ စာဖတ်သူစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ လည်း ထင်သည်။ ကြည့်ဖူးပြီးသားရှိသလို မကြည့်ဖူးတာလည်း ရှိမည်။ ပထမဆုံးကြည့်သော ဂေးလ်ဇာတ်ကားမှာ.. MAURICE (James wilby, Hugh grant, Rupert graves) ဖြစ်သည်။
The merchant ivory collection က ထုတ်လုပ်သည်။ ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို အခြေခံထားသည်။ brokeback mountain နဲ့အပြိုင်ကို ကောင်းသည်။ နောက် a.k.a ဇာတ်လမ်းကရှုပ်သည်။ ကျွန်တော် မကြိုက်ပါ။ ဒီခွေတွေက BC (British Council Library) က ရှာတွေ့ပြီးငှားကြည့်ဖြစ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီက ပဲ နောက်နှစ်ကားရှိသေးသည်။ သိပ်မမှတ်မိတော့။
The beautiful laundry သိပ်မကောင်းပါ။ ဘိုးတော်ဘုရားက ဂေးလ်ကားဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းဆက်တိုက်ကြည့်ဖြစ်တာတွေကောင်းသည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲတွင် Queer as Folk ကတော့ကောင်း
သည်။ Bangkok Love Story ထိုင်းနိုင်ငံက ဇာတ်လမ်း။ ကျွန်တော် ကြိုက်သည်။ No Regret ရယ် Forzen Flower က ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေ။ ကောင်းသည်။ နှစ်ကားစလုံးကောင်းသည်။
Eternal Summerက ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံက ဇာတ်လမ်း၊ အကြိုက်ကြီးတော့မဟုတ်။ ရိုက်ချက်တွေကတော့ကောင်းသည်။ ဇာတ်လမ်းဖွဲ့စည်းပုံကောင်းသည်။ Antique ကလည်း ကိုရီးယားဂေးလ်ဇာတ်လမ်း။
ကြည့်ရတာတော့မဆိုး။ ကိတ်မုန့်လုပ်တာနဲ့ ဂေးလ်ရဲ့အကြောင်းကို ဇာတ်လမ်းက လျှို့ဝှက်စွာရိုက်ထားသည်။ Aai no Kotodama က ဂျပန်ဇာတ်လမ်း။ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကနေ ချစ်နေတဲ့ပုံစံရိုက်ထားသည်။ မင်းသားတွေက ပိန်လွန်းအားကြီးသည်။ ဇာတ်လမ်းက မြန်မာပြည်အနေနဲ့တောင်ရိုက်လို့ရနိုင်သည်။ တချို့ကြည့်ဖူးတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကား တွေက သိပ်မမှတ်မိတော့။ ရှိသေးရင်လည်းကျွန်တော့်ကို အီးမေးလ်နဲ့ ပြောပြနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အထူးတင်ပါသည်။Lan Yu ကိုတော့ မကြည့်ရသေး။ ဟောင်ကောင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ရှာလို့မတွေ့။ မြန်မာပြည်အင်တာနက် နှုန်းနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှကြည့်ဖြစ်မည်မဟုတ်။ နောက်အခု အရမ်းကို ကြည့်ချင်နေတဲ့ နှစ်ကားရှိသေးသည်။ တစ်ကားက စပိန်က ဖြစ်ဖို့များသည်။ နောက်တစ်ကားက ဟောင်ကောင် က ရိုက်သည်။ Permanent Residence (HongKong)နဲ့ Cover Boy (စပိန်ဖြစ်ဖို့များသည်)။ ငတေ ၀ယ်ထားတဲ့ကားထဲက Knowing ဆိုတဲ့ကားကို ထုတ်ကြည့်လိုက်သည်။ ဇာတ်လမ်းက အရှိန်တတ်နေတုန်းတံခါးလာခေါက်သည်။ ငတေ တော့မဖြစ်နိုင်။ တံခါးသွားဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
` ဦး...´ ၃ နာရီလောက်တာရှိအုံးမည်။
` ဦး ... ဒီနေ့ အလုပ်က စောစောပိတ်တယ်လေ။ ´ ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေဆိုတာကို မေ့နေသည်။
` ဦးကို ငတေ ကမှာထားတယ်။ ည စာကိုသူ့အတွက်မ၀ယ်ထားပါနဲ့တဲ့... သူငယ်ချင်းနဲ့သွားစားမလို့တဲ့´ ဦး က ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်သည်။
` သားကိုကော မခေါ်ဘူးလား...သားပျင်းနေမှာပေါ့´
` ဟို...သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့သီးခြားတွေမှာ မို့လို့ပါ´ ဦးက ချွေးတွေကို လက်ဖျံနှင့်သုတ်လိုက်သည်။ ရှ ပ်အင်္ကျီÐကိုလည်း ချွတ်လိုက်သည်။
` အေးလေ... သားက ခွေကြည့်နေတာကိုး...ကြည့်...သားဘာသာ ဆက်ကြည့် ...ဦးရေချိုးလိုက်အုံးမယ်။ ည စာကို ဦးနဲ့သားအပြင်ထွက်စားကြတာပေ့ါ´
`ဟုတ်ကဲ့ ဦး..´ ဦး သူ့အခန်းထဲဝင်သွားသည်။ ဘာကိုမှ မစဉ်းစားဘဲ ဆက်ကြည့်နေလိုက်သည်။ ဇာတ်လမ်းထဲတွင် နစ်မြူပ်နေလိုက်သည်။ နောက်နေ့မှ ခွေဆိုင်တွင် Shinjuku Incident သွားဝယ်အုံးမည်။ Jackie Chan ကားအသစ်။ ရန်ကုန်မှာက အကုန်အဆင်ပြေသည်။၀ယ်ချင်တာတွေဝယ်လို့ရသည်။ ခွေက ဇာတ်သိမ်းခါနီးပြီ။ ဦးက အခန်းထဲမှထွက်လာသည်။ ရေလဲပုဆိုးကို ခပ်တိုတိုဝတ်ထားသည်။
` သား ကော ရေချိုးပြီးပြီလား´
` မချိုးရသေးဘူးဦး . . . ဦးချိုးပြီးမှပဲချိုးတော့မယ်´ ပွယောင်းယောင်းရှိနေတဲ့ဆံပင်တွေထဲကို ဖွလိုက်ပုံမှာ စွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသည်။
` ဦး နဲ့တူတူချိုးမလား...။ ´ ကျွန်တော် ပြာသွားသည်။ ဒီတိုင်းဆိုရင် ငတေ့ ဖေဖေ က ဂေးလ် တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဂေးလ် စစ်စစ်မဟုတ်ရင်တောင် ဂေးတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာကို နှစ်သက်တဲ့ gay lover တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်ဘာပြန်ဖြေရမလဲ။ ငတေနဲ့တောင် ရေတစ်ခါမှတူတူချိုးဖူးတာမဟုတ်။ ခက်တော့သည်။
` ဟို... ဦးပြီးမှပဲချိုးတော့မယ်လေ´
` လာပါ...ဦးကို ရှက်မနေပါနဲ့ ... သားအကြောင်းဦးမသိတာကျနေတာပဲ´ ကျွန်တော်ပိုလန့်သွားသည်။ ကျွန်တော့်အကြောင်းသိနေသည်။ ဂေးလ် တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိနေသည်။ ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်သည်။ဦးက လည်း ငယ်ရာကကြီးလာတာပဲမဟုတ်လား။ ကျွန်တော် ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ။ ဒီနေ့ ငတေ မရှိတော့ ကိစ္စတော့မရှိ။ ကျွန်တော် မငြင်းမိဘဲ မေးခွန်းတစ်ခုသာမေးဖြစ်သွားသည်။
` ဦး က ကျွန်တော့်အကြောင်းဘာသိလို့လဲ´
` ဒါလား...ရေချိုးခန်းထဲရောက်မှပြောပြမယ်...ဦးအထဲက စောင့်နေမယ်´ အခု မှပြဿနာ.။ ဦးက အပြီကိုချည် နေတော့သည်။ ဘာကိုမှဆက်မတွေးဘဲ ဘောင်းဘီတိုလေးကိုသာချန်ထားပြီး အားလုံးချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ရင်တွေလည်း ခုန်နေသည်။ ရေချိုးခန်းထဲဝင်တော့ဦးက မွေးကာစကလေးတစ်ယောက်လို။ လီးကတော့ မတောင်သေး။
` သား ... လာ..´
` ဦး ပြောမယ်ဆို´
` အော်...ဒါလား... ဦးနဲ့သား မနေ့ညက ဖြစ်တာတွေကိုပြောတာပါ။ သားအကြောင်းဦးသိတာက သားကအသန့် ကြိုက်တယ်လေ။ ဦးနဲ့ ဟို...ဟာ လုပ်ပြီးတာနဲ့ရေချိုးခန်းထဲပြေးဝင်တာပဲမဟုတ်လား...ဒါကြောင့်အခုထဲက သားကိုခေါ်လိုက်တာ´ ဘုရား...ဘုရား...။ တော်တော်လည်း ကာမမီး တောက်နေတဲ့ ငတေ့အဖေပါလား။ အခုမှ ရင်ဘတ်က အလုံးကြီး ပြုတ်ကျသွားသည်။ ရယ်ဖို့တော့ကောင်းသည်။ သိုးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ၀ံပုလွေအဖြစ် ဟန်ဆောင်ရတဲ့ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ တကယ်တော့ပင်ပန်းလှသည်။ ဦး က ဒီထက်လွန်တာတွေလုပ်လာရင်ကော ..ကျွန်
တော်လိုက်လျောရမှာလား။ မနေ့ကညတောင် လက်နှစ်ချောင်းပူး ဖင်ထဲထိုးထည့်ပြီးပြီပဲ။ ဟူး..။ ကျွန်တော် တံခါးကိုဆွဲပိတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ တံခါးဘက်မျက်နှာလှည့်နေလိုက်သည်။
`သား ... ဖြစ်ရဲ့လား...´
` ဖြစ်ပါတယ်။ ငတေ သိသွားမှာကိုပဲကြောက်နေတာပါ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်ကယောကျာ်းလေးဆိုတော့ ..´
`သားကို ဦးက ယောကျာ်းလေးဖြစ်လို့ပဲ ဒီလိုလုပ်မိတာပါ။ မိန်းခလေးဆိုရင် မုဒိန်းမှုမြောက်မှာပေါ့..။ သားက လည်း ဦးကိုလိုက်လျောလို့ပါ´ မှားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကပဲလိုက်လျောတယ်ရှိသေး။
` ဦးကို ကူညီတာပါ၊ ဦး ကတစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ အထီးကျန်နေမှာပေါ့´ ဦးက ကျွန်တော့ကို အနောက်ကနေသိုင်းဖက်လိုက်တယ်။ ဦးရဲ့ချွေးနံ့က ခပ်ပြင်းပြင်း ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အနံ့ဟာ ကျွန်တော်တကိုယ်လုံးကို မွန်ထူသွားစေပါတယ်။ ကျွန်တော် အလိုက်သင့် ဘောင်းဘီချွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ကုန်းပြီးချွတ်လိုက်တော့ ဖင်က ဦးရဲ့လီးကို တောင်းတသလိုမျိုး ဖြစ်သွားတယ်။ ဦးက ခပ်တင်းတင်းလေးခါးကို ဆွဲဖက်လိုက်တယ်။ ဦး လီးကမာတောင်မာနေပြီ။
` သား... လေးဘက်ထောက်ပေးပါလား´ နှစ်ခါမပြောရပါဘူး။ မွန်ထူနေတဲ့ကျွန်တော် ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းရေချိုးခန်းထဲမှာလေးဘက်ထောက်ပေးလိုက်တယ်။ ဦးက ထုံးစံအတိုင်း ဖင်တွေကို အရင်ကိုင်တယ်။ ပြီးမှ ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲကို လီးထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ဘယ်အချိန်းကတည်းက ယူထားမှန်းမသိတဲ့ KY Jel ကို လောင်းထည့်လိုက်တယ်။ လက်ကလည်း စအိုဝလေးကိုကလိနေတယ်။ ခါးကိုကိုင်ပြီး အပြတ်စောင့်တယ်။ ကျွန်တော် လီးကို ကျွန်တော့်ဖင်ထဲကို ထည့်စေချင်တယ်။ ဒီလိုမျိုးကိုခံစားကြည့်ချင်တယ်။ ပြောလည်းမပြောရဲဘူး။
`အား...´ တွေးနေတုန်းမှာ လက်ချောင်းလက်တစ်ထစ်လောက်ထိုးထည့်လိုက်တယ်။
` ရပါတယ်... နဲနဲနာသွားလို့ပါ´ နာတယ်လို့ပြောလို့လားမသိ။ ဂျယ်တွေကိုထပ် လောင်းထည့်လိုက်တယ်။ လေးငါးဆယ်ချက် လက်ကို သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်ပဲ။ ကျွန်တော်လက်ချောင်းလေးတွေ အစားလီးကို လိုချင်နေမိတယ်။ တကယ်သွင်းရင်ကော ခံနိုင်ပါ့မလား။ ဦး က လက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ခဏရပ်လိုက်တယ်။ မောသွားပုံရတယ်။ လီးကို ပေါင်ကြားထဲကထုတ်လိုက်တယ်။
`သား... ဦးကို နဲနဲပေးသွင်းပါလား ´
` ဟို...သားရဲ့အထဲကို ဦးရဲ့ လီးကို နဲနဲပေးသွင်းပါလား။ ဦး ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး လည်းသားရဲ့ အပေါက်လေးထဲ သွင်းဖို့ပဲအာရုံများနေတယ်။ ဘယ်လိုမှအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။
သားနဲ့ပဲ နေချင်နေမိတယ်။ သား...ဦးကို ကူညီလက်စနဲ့...´
` ကျွန်တော်... တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး။ ဦး ကိုကူညီချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ...နာမှာလည်း ကြောက်တယ်..ဦး ဟာ က အကြီးကြီးလေ´
` သား...ကိုမနာအောင်ဦးလုပ်မှာပါ...အဖျားလေးပဲသွင်းမှာ..ဟုတ်ပြီလား´ ရင်တွေအဆပေါင်းများစွာခုန်လာသည်။ ကျွန်တော် လိုချင်တာကိုရပြီပေါ့။ ဂျယ်ကိုထပ်လောင်းလိုက်သည်။ နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကွန်ဒုံးအိတ်လေးတစ်အိတ်ကို ဦးဖောက်နေသည်။ ဦးက မဆိုးဘူး။ ရောဂါပိုးရော ညစ်ပတ်မှာကောကို ကြောက်ပုံရသည်။ ဒူးထောက်ထားတဲ့ကျွန်တော့်ဒူးတွေချောင်ချင်လာသည်။ ဦးက လီးကိုကိုင်ပြီး စအိုဝလေးကို တေ့ထားသည်။ မသွင်းသေဘဲပွတ်ပေးသည်။ ဖင်ထဲကတောင်ယားသလိုလိုဖြစ်လာသည်။ စအိုဝလေးကို တေ့ထားပြီး ဖြည်းဖြည်းဖိသည်။
မ၀င်ပေ။ နောက်တစ်ခေါက် ဒီ့ထက်ပြင်းသည်။ မ၀င်သေး။ ဖင်တောင် အောင့်လာသလိုလိုရှိသည်။
` သား... စိတ်ကိုလျော့ထား...အစ ခဏဘဲနာမှာ...နောက်မနာတော့ဘူး.. ဦး...လုပ်ဖူးတယ် ...သားမကြောက်နဲ့´ လုပ်ဖူးတယ်ဆိုတာ ဦးမပြောလည်းကျွန်တော် ရိပ်မိသည်။
သားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လုံးကိုတောင် ဒီလို လေးဘက်ထောက်ပုံစံမျိုးရအောင်ချုပ်နိုင်သေးတာပဲ။ ခက်တာက နဂိုကမှ ခံချင်နေတဲ့ဖင်ကိုသွားဆွတော့လည်း။
` ဟုတ်ကဲ့ပါဦး ´ စိတ်ကိုလျော့ပြီး စအိုကြွက်သားတွေကို လျော့ပေးထားသည်။ ဒီတစ်ခေါက်ပိုပြီးပြင်းသည်။
` အား.... ´ စအိုဝတစ်ခုလုံးပြည့်ကျပ်သွားသည်။ ဒစ်တစ်ခုလုံးဝင်သွားပုံရသည်။ စပ်ဖျင်းဖျင်းနှင့်။
` သား... ခဏလေး အောင့်ထား´ ဦးက ကျွန်တော့် ဂုတ်သားတွေကိုလာနမ်းသည်။ လီးကို ဆက်မသွင်းတော့။ ခဏနားထားသည်။ ကျွန်တော်ငြိမ်သွားမှ ဖြည်းဖြည်းချင်းထပ်သွင်းသည်။ အီးပါချင်သလိုလို ဖြစ်သွားသည်။ ပြည့်ကျပ်သွားသည်။ အောင့်လည်းအောင့်လာသည်။ ကျွန်တော် မအော်ဖြစ်တော့။
` ဦး ..အကုန်မသွင်းနဲ့နော်´
` အင်းပါ...သားကို အဲ့ဒီလောက်မရက်စက်ပါဘူး... သားကို ဦး ချစ်ပါတယ်။ သားက ငတေနဲ့ အသက်တူတူပဲဟာ...ငတေ ဟာဦးသားအရင်းဖြစ်သလို သားဟာလည်းဦးရဲ့သားပဲပေါ့ ... သားသဘောတူရင် သားကိုတောင် ဦးရဲ့သားအရင်းလိုမွေးစားချင်တာ´ မွေးစားသား ဆိုတာ မွေးပြီစားတာကိုပြောတာလား။ ပြောရင်းနဲ့လီးကိုပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။တစ်ဝက်လောက်ပဲ။ အခုမှ နေသားကျလာတယ်။ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်ပေမယ့် ၄ လက်မလောက်ကို ပဲသွင်းထုတ်လုပ်နေပုံပဲ။ အခုမှ လီးကို ထပ်လိုချင်နေမိတယ်။ အကုန်လုံးထိုးထည့်
လိုက်တော့လို့မပြောရဲဘူး။ မျက်လုံးကိုမှေးစင်းပြီး ဖီးလ်ယူနေမိတယ်။ ဖင်ခံတဲ့အရသာကို ကြိုက်သွားရင်တော့ ...ကျွန်တော် ဦးရဲ့မွေးစားသားပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်။ ကျွန်တော့်လီးကိုကိုင်ပြီးလက်တစ်ဖက်က ဂွင်းထုနေလိုက်တယ်။ လက်က တစ်ဖက်တည်းထောက်ထားတာကြာတော့ ညောင်းလာတယ်။ ဦးက ခါးကို ကိုင်ပြီး ဆောင့်တယ်။ မြန်လာတယ်။ ကျွန်တော့်ဖင်တွေကို အနောက်ကိုမသိမသာ ဆုတ်ပေးလိုက်တယ်။ အား... ပိုဝင်သွားလို့လားမသိ။ နာသေးတယ်။ ဦးက ထပ်ပြီးညှောင့်တယ်။ ပိုပြီးအရှိန်ပြင်းလာတယ်။
` အား.....သား...ဦး...အဆုံးထိသွင်းချင်တယ်...´ ပြောပြီးပြီးချင်းသွင်းထဲ့လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်မျက်ဖြူလန်မတတ်ဘဲ။ ဖင်တစ်ခုလုံးအောင့်သွားတယ်။
` အား............ရ ..ပါ...တယ်´ တဒုတ်ဒုတ် တဖွတ်ဖွတ်နဲ့။ ရေဘုံဘိုင်ကရေကျသံနှင့်အတူ သံစဉ်ညီနေတယ်။ ဖင်ခံတဲ့အရသာကို ကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်သွားတယ်။
ဘာလို့အခုလိုနောက်ကျမှ ခံဖြစ်သွားတာလဲ။ အရင်ကအချိန်တွေကို နှမြောမိတယ်။ ဖင်က စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့။ အောင့်ကလည်းအောင့်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုမှပြောမပြတတ်တဲ့အရသာကိုလည်းတစ်ပြိုင်နက်ခံစားနေရတယ်။ ဆောင့်ချက်တွေက တော်တော့်ကိုပြင်းလာတယ်။ တော်တော်ကြာကြာလေးဆောင့်ပြီးတော့
` သား ... ဦး ပြီးတော့မယ်။ ...သားလည်းပြီးချင်ရင်ပြီးလိုက်လေ´ ဦးက ဂွင်းတိုက်တာကို တွေ့ပုံရတယ်။
` ဟုတ်´ ဂွင်းအဆက်မပြတ်ထုလိုက်တယ်။ အား..ပါး...။ မျက်လုံးတွေပြာသွားတယ်။ ဖင်နှစ်လုံးကြားထဲကို ပူနွေးနွေးလရည်တွေ စီးသွားတယ်။ လီးကြီးကိုထုတ်လိုက်တော့ဟာသွားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပြီးသွားတယ်။ ဦးက ကျွန်တော့်ကို မှောက်ချလိုက်ပြီးအပေါ်ကနေဖိထားတယ်။ ဂုတ်သားတွေကို နမ်းတယ်။ ပါးတွေကိုလည်းနမ်းတယ်။ဒီလိုမျိုးကို နေ့တိုင်းလိုချင်နေမိတယ်။
` သား...ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်။..ဦး သားကိုမွေးစားလို့ရမလား´
` သားကို ဦးမွေးစားချင်လို့ပါ။ သားဦးနဲ့တူတူ ဖိုးတေနဲ့တူတူ ဒီမှာနေသွားပေါ့´ ကျွန်တော် က ဒီတစ်ခါ သဘောတူမိသွားတယ်
` ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဦးက ကျွန်တော့်မွေးစားအဖေဖြစ်သွားရင် ...ဖိုးတေလိုပဲ ဦးကို ဖေဖေလို့ခေါ်ရတော့မှာပေါ့´
` အင်းပေါ့... သားသဘောတူတယ်မလား၊ သားအဖေကို ဦး ကဖုန်းဆက်ပြီးပြောပေးမယ်။ သားဖေဖေ က အဖေအရင်းပေ့ါ...ဦးက မွေးစားအဖေပေါ့။ သားမှာ အဖေနှစ်ယောက်ရတာပေါ့´ ပြောပြီး ကျွန်တော့်ကိုပက်လက်လှန်လိုက်သည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်တော့ ဦးမျက်နှာမှာချွေးတွေစို့နေသည်။
` သဘောမတူစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်... ဦး သားကို ဒီလိုပဲနေ့တိုင်းလုပ်နေမှာလား´
` နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဦး ... အဲ...ဖေဖေလည်းသားကိုနေ့တိုင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူး´
` ဦး ကိုမေးစရာရှိတယ်။ အမှန်အတိုင်းဖြေရမယ်နော်´ ကျွန်တော်ကောင်မလေးတစ်ယောက်လိုနွဲ့နေမိသည်။
` ဘာမခေါ်ထွက်စရာရှိလဲ... ဖေဖေ လို့ခေါ်ကြည့်..သားကလိမ္မာပါတယ်´ ကျွန်တော့်ပါးကို တစ်ချက်ငုံ့နမ်းလိုက်သည်။ သိချင်တာမေးဖို့ခေါ်လိုက်ရတော့သည်။
` ဖေဖေက သားကို ဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲ´
` သားက ကောင်မလေးတစ်ယောက်လိုနူးညံ့တယ်။ ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။ ဖေဖေရဲ့ ဇနီးကို သွားသတိရစေတယ်။ သားသုံးတဲ့ shampoo အနံ့ကလည်း `ခင်´ သုံးတဲ့အနံ့နဲ့တစ်ပုံစံတည်း... ´ ဦးက သူ့မိန်းမနဲ့အနံ့တူလို့ဖင်ချတာပေါ့။
` ဦး ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုမြင်လည်း။ ဦး ဖင်ချတာကိုခံလို့ ဘယ်လိုမြင်လည်း´
` သားကို ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲ´
` ဟို...သား...ကို မိန်းမလျာ တစ်ယောက်လို့မမြင်ဘူးလား´
` အင်း...သားကို...ပထမတော့ မထင်ဘူး။ ´
`ဒါဆိုနောက်တော့မှထင်တာပေါ့...ဘယ်အချိန်ကတည်းက သားကို ဂေးလ်ဆိုတာသိသွားတာလဲ´
` သား ...ဟာ ဂေးလ် တစ်ယောက်မဟုတ်ရင်...ဦးကို ဖင်ခံပေးဖို့မပြောနဲ့...အိပ်နေတုန်း နောက်ကနေ ပွတ်တာတောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကနေသိသွားတာ´ လတ်စသတ်တော့ ကျွန်တော် ဂေးလ်မှန်းသိသွားလို့ ဖင်ချတာပေါ့လေ။
` သွားပါပြီ။ ဦး...အဲ...ဖေဖေ ...ငတေကိုဒီအကြောင်းတွေမပြောပါနဲ့ နော်...ကျွန်တော်ဂေးလ် တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို´ လူမိသွားမှတော့ ၀န်ခံဖို့ပဲရှိတော့မှာမဟုတ်လား။ ဦး က ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်း တွေကို နမ်းတယ်။ ရင်တွေအခုထိ တုန်နေတုန်း။ နှုတ်ခမ်းတွေကို ခဏဖယ်လိုက်ပြီး...
` ဖေဖေ ... သား..ကိုချစ်လားဟင်´
` အင်း.. ငတေ ထက်ပိုချစ်တယ်´
` ငတေကို ဖေဖေက ဒီလိုလုပ်လို့မှမရတာ´
`သွား... ဖေဖေလူဆိုး´ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် ငတေ့အိမ်မှာနေဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်တော် အပျော်ကြီးပျော်နေမိသည်။ ဂေးလ်တစ်ယောက် အတွက်သူလိုချင်တာကို ရတာဟာလောကမှာအပျော်ဆုံးလို့ထင်မိသည်။ ကျွန်တော့်လောက်ပျော်ရွှင်မည့်သူအခုရှိမည်မထင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရေမိုးချိုးသည်။ ထမင်းတူတူစားသည်။ ညတူတူအိပ်သည်။ ဦးကို ကျွန်တော် ချစ်မိသွားသည်။
14.9.2009 တွင် အပြီးသတ်ရေးသည်။
စာရေးသူ - သိုးငယ်
စာကြွင်း။ ။ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးသည် စာရေးသူ၏ စိတ်ကူးသက်သက်သာဖြစ်သည်။
* ညီငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ကြိုးစားရေးသားမှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 5:21 PM3comments: